မမကိုခဈြလို့ – My Blog
မကျြနှာခငျြးဆိုငျးလိုကျမိသညျနှငျ့ကိုယျ့ဖကျကသိမျငယျသှားမိ၏ ။ မရယျမပွုံးသျောလညျး ဝမျးသာပီတိဖွဈသညျ့မကျြလုံးမြားနှငျ့ စိုကျကွညျ့နသေညျပာုပဲ — ခံစားလိုကျရသညျ။ ‘‘ ဗိုလျခြူပျဈေးသှားခငျြလို့ ’ ‘’ ဟုတျကဲ့ — တကျပါ ’’ ကားတံခါးကိုဖှငျ့ ပေးပွီး — နောကျခနျးအတှကျထုငျိခုံကိုလှနျပေးလိုကျစဉျ — သူမက — ထုံးစံအတိုငျးမရယျမပွူံး နှငျ့ပငျပွောသညျ။ ‘’ ရပါတယျ — ရှခေုံ့မှာပဲထိုငျမယျ ‘’ အသံ — အပွောလေးတှကေ — ဟိုးတုနျးကလိုပငျဖွဈသျောလညျး — မကျြနှာအမူအရာကမူအနညျးငယျ ရငျ့ကကျြသှားသညျထငျ၏။ ခန ကိုယျကတော့ — ယခငျကထကျနှဈဆလောကျ — ပှသှားသလိုပငျ။ ယခငျကသူမထံမှ ပွနျ့လှငျ့ လာလရှေိ့သော ရမှေေးနံ့မှာ ယခု — ခပျစူးစူးရမှေေးနံ့က တဈကားလုံးမှေးကွိုငျသှားအောငျသငျးပြံ့သှားသညျ။
‘’ ကားမောငျးနတောကွာပွီလား — အောငျမငျး ‘’ ‘’ ဟုတျကဲ့ — ငါးနှဈလောကျရှိပါပွီ — မမနှယျ ‘’ ‘’ မနျးလေးကိုပွောငျးသှား သေးတယျဆို — ဟိုမှာအဆငျမပွလေို့လား — အို — ဆောရီး — မမနှယျမှားသှားတယျ။ ‘’ ‘’ ရပါတယျမမနှယျ — အဆငျမပွေ ဘူးလို့ပဲဆိုပါတော့ — ကြှနျတျောမောငျးတဲ့သုံးဘီးတှေကိုမနျးလေးမှာမောငျးခှငျ့ရှိတော့ ဟိုကိုပွောငျးရှသှေ့ားတာငါ — ကိုယျ ကနယျမွမှေမကြှမျးတာ ‘’ သညျအထိ — မိတျဆှေဟောငျးအဖွဈတဈယောကျကိုတဈယောကျအသိအမှတျပွု — နကွေဆဲဟု – – စကားတှကေသကျသခေံနခေဲ့သညျ။
‘’ မမတို့အဆငျပွတေယျမို့လား – – ကလေးတှရေော – – ‘’ ‘’ မငျး – – ဘာပွောလိုကျတယျ ‘’ မမနှယျက – – ဆတျကနဲတဈ ကိုယျလုံး တောငျ့တငျးသှားကာ – – အောငျမငျးကိုတအံ့တသွ ပွနျမေးလိုကျသညျ ‘’ အဆငျပွတေယျမို့လား – – လို့ ‘’ ‘’ မဟုတျပါ ဘူး – – နောကျဆကျတှဲမေးခှနျး ‘’ ‘’ က – -လေးတှေရောလို့မေးမိတာ – – ပါ ‘’ ‘’ ဟငျး ဟငျး ဟငျး – – မငိးဟာလအေခု ထိကိုသတိကွောငျ – – အသညျးကွောငျတတျသေးတာပဲ– – မငျးသုံးဆယျကြျောပွီပေါ့ – – ဟုတျလား ‘’ ‘’ ဟုတျကဲ့ – – သုံး ဆယျ့နှဈပါ ‘’ ‘’ ပွောငျးလဲဖို့ကောငျးပွီ – – ရငျ့ကကျြလာဖို့ကောငျးပွီပေါ့ ‘’ ‘’ ကြှနျတျော – – – ‘’ ‘’ တျောပွီ – – အောငျမငျး – – အဲဒီရှမှေ့ာပဲရပျ – – ရော့ ‘’ ‘’ မယူပါဘူး – – မမနှယျ ‘’ ရာတနျကိုငျထားသောမမနှယျလကျမြားက တဆတျဆတျတုံနေ သလိုပငျ – – ပွီး မပှငျ့တပှငျ့ပွောကာ ရာတနျကိုအောငျမငျး ပေါငျပျေါ – – ခထြားခဲ့သညျ။ ကားထဲမှဆငျးလိုကျသညျနှငျ့နောကျကို တဈခကျြကလေးမှလှညျ့မကွညျ့။
အောငျမငျး – – ရှကျရှံ့ကွကှေဲစှာ မကျြရညျဝဲသညျ။ ‘’ မငျးကလေးတှေ နဲ့မငျးမိသားစုအတှကျငှရှောနတောမလား – – မောငျ မောငျ – ရော့ယူထားလိုကျ ‘’ တဲ့ အောငျမငျးကားကို – – ကွညျ့မွငျတိုငျအထကျလမျးအတိုငျး လေးကှေးစှာ ပွနျမောငျးခဲ့သညျ။ သွျောသီတာရုံကွီးကလဲ မပွောငျးလဲသေး – – နောကျပိုငျးဆေးရုံကွီး အလှနျမှ – – ကုနျးမို့မို့လေးထိပျတှငျ – –ဗနာပငျကွီးလဲ– – ရှိမွဲ ။ ‘’ ဟယျ – – – အဈကို – – – အစောကွီးပွနျလာတယျ – – – ဟုတျလား ‘’ ‘’ ပကွေီးကား – – – ကနျြလာပွီ – – – ပကွေီးကား – – – ကနျြလာပွီ – – – ‘’ တဈဦးတညျးသောသား နှယျဦးက – – – အိမျရှသေ့ဈပငျရိပျတှငျကစားနရောမှ – – ကား ဆီသို့တဟုနျထိုးပွေးလာသဖွငျ့ ဘရိတျကိုဆောငျ့နငျးလိုကျပါသညျ။
‘’ မိသဈ – – တလေးကို – – – ဆှဲထားလေ ‘’ ‘’ သား – – – ဟဲ့ – ဟဲ့ — သား – – နှယျဦး ‘’ သဈသဈက – – နရောတကာလေး သညျ။ သားကပွေးတတျလှားတတျစမို့နရောတကာမွနျသညျ။သားကိုပှခြေီ့ပွီးနောကျ – – အောငျမငျးကိုအသနားခံသလိုလေးပွုံး ပွသညျ။ အောငျမငျး က သဈသဈမကျြနှာကိုခကျမာစှာ တဈခကျြကွညျ့ပွီးကားကို – – ထားနကေအြိမျဘေးတှငျ – – – ထိုးရပျပွီး – – – ဒကျ (ရျှ) ဘုတျထဲမှလိုငျစငျစာအုပျနှငျ့ပိုကျဆံကိုထုတျယူပွီး – – သားဆီလှညျ့ခဲ့သညျ။ ‘’ ဖကွေီး – – မုနျ့မုနျ့ – – မုနျ့ မုနျ့’’ ‘’ ဖကွေီး ရခြေိူးပွီးရငျ – – ညဈေးသှားမယျလေ – – မုနျ့လဲစားမယျ – – ကစားစရာလဲဝယျမယျ – – ဟုတျလား – – – သား ‘’ ‘’ အငျးအငျး – – အငျးအငျး – – မုနျ့မုနျ – – –့ မုနျ့မုနျ့ ‘’
‘’ သားကလဲဖကွေီးက – – ရုပျရှငျလဲပွမှာတဲ့ – – – သိလား – – ဖဖေနေဲ့ – – သားသား ရခြေိူးမယျ – – အဝတျလဲမယျ – – – ဟုတျလား ‘’ ‘’ အငျးအငျး – – မုနျ့မုနျ့ – – – မုနျ့မုနျ့ ‘’ ‘’ သဈသဈ – – ကလေးကိုသာရခြေိူးပေးးလိုကျ – မငျးအိမျစောငျ့ကနျြရမှာ ‘’ အောငျမငျး က ပွောပွောဆိုဆိုအိမျပျေါလှညျ့တတျသှားသညျ။ ‘’ ကိုရယျ – – ‘’ ဟုတိုးတိုးညီးရငျး မကျြရညျဝဲကနျြရဈသညျ။ သညျ့နှယျ – – မကျြရညျကရြသောအကွီမျပေါငိးလဲမနညျးပွီ – – ရှညျလြားစှာကနျြရဈသောနှဈပေါငိးမြားစှာကို – – ကြျော ဖွတျလာသညျ့တိုငျအောငျမငျး သဈသဈအပျေါအခဲမကွနေိုငျပါကလား။
‘’ ပှမျ – ပှမျ ‘’ ‘’ ဟေ့ – – မပွီးသေးဘူးလား – – ဒရိုငျဘာ ‘’ ‘’ လာပွီ – – မမနှယျ – – လာပွီ ‘’ ပျေါတီကိုအောကျမှ – – ဖယျ မလီယာ ဖိုးဒိုးလေး ဟှနျးကိုတပှမျပှမျနှိပျခါ – – နှယျကကုနျးအျောသညျ။အောငျမငျးကြောငျးလှယျအိတျလှယျရငျး – – ဘောငျးဘီခါးပတျကိုအပွေးအလှားပတျထှကျလာသညျ။ ‘’ လုပျလာပွနျပွီ – – ဗရိုဗရဲ – – မောငျမောငျရယျ ‘’ ‘’ ညက – – ဟုမျး ဝပျတှေ– – မပွီးလို့မမနှယျရဲ့ အဲဒါလုပျနလေို့ ‘’ ‘’ ကိုးနာရီထိုးတော့မယျ – – ဒီမှာ – – တှလေ့ား ‘’ ‘’ ဟုတျကဲ့ပါ – – မှီ အောငျမောငျးပေးပါမယျ ‘’ ‘’ အမလေး အေးအေးဆေးအေးပဲ မောငျးပါ ကိုယျတျောကားမောငျးတတျတာဖွငျ့နှဈရကျနဲ့တဈပိုငျးးပဲရှိ သေးတယျ ‘’ ခွံထဲမှကားလေးမောငျးထှကျခဲ့သညျ။ မမနှယျထံမှသငျးပွနျ့သော ရမှေေးနံ့လေးကို အောငျမငျး ရှူရှိကျမိသညျ။ ‘’ မနကေ့ ဒယဒျီက မေးတယျ – – မောငျအောငျမငျးစာလိုကျနိုငျရဲ့လား တဲ့ ‘’
‘’ အသဲအသနျပဲလို့မပွောလိုကျဘူးလား မမနှယျ ‘’ ‘’ ဒီက အကောငျးပွောမလို့ – – အငျး – – လိုကျနိုငျပါတယျ – – လို့။ ဒါပမေဲ့ ကောငျလေးက ပငျြးခငျြတယျ – – – စာမကကျြဘူးလို့ – – မကောငျးတာလေးလဲထညျ့ပွောရတာပေါ့ဟဲ့ ‘’ ‘’ ဒီ့ပွငျဟာ ပွော ရောပေါ့မမနှယျရယျ ‘’ ’’ စာမကကျြဘူး ပငျြးတယျဆိုတော့မှတျကရော ‘’ ‘’ အမယျ – – ဒါပမေယျ့ဖေးဖေးမမတော့ပွောလိုကျပါ တယျ – – စာမေးပှဲတော့အောငျမှာပါလို့လေ ‘’ ‘’ ဟေး – – ဒါမှ – – မောငျ့ – – မမ ‘’ ‘’ ဟဲ့ – – – လုပျပွနျပွီ – – – ရှကွေ့ညျ့ မောငျး ‘’ အောငျမငျး မမနှယျတို့အိမျရောကျသညျမှာ တဈနှဈကြျောပဲရှိအုံးမညျ။ မမနှယျနှငျ့အောငျမငျး တို့ခဈြသူဘဝရောကျ ခဲ့ကွသညျ။ မမနှယျက နှမျးပါးသော အားကိုးရာမဲ့အောငျမငျး ဘဝ ကိုသနားရာ မှခဈြခဲ့ရသညျ။
အောငျမငျးကတော့မမနှယျ၏ ကွငျနာမှုဖေးမမှုနှငျ့အထိအတှလေ့ေးကွငျေ့ခဈြခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။ အသကျကတော့ကှာသညျ။ မမ နှယျက အစိတျကြျောနပွေီ။ အောငျမငျး က နှဈဆယျပငျမပွညျ့တတျသေး။ သို့သျောအောငျမငျး က ထှားကွိုငျးလှသညျ။ ရှာမှာနေ စဉျကတညျးက ဘောလီဘော အမွဲကစားသညျ။ မမနှယျ၏ ဖခငျ ဦးသျောကောငျး နှငျ့အောငျမငျးဖခငျဦးတိုကျမောငျး တို့က အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးတှေဖွဈခဲ့ကွသညျ။ ဦးတိုကျမောငျး ဆုံးပါးသှားသောအခါ အောငျမငျး ကိုဦးသျောကောငျး က ကြောငျးထားပေးရနျချေါလာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
မမနှယျညီမဝမျးကှဲ သဈသဈကတော့ဆယျ့နှဈနှဈလောကျပဲ ရှိအုံးမညျ – – ဖွဈသညျ။ဦးသျောကောငျး အဈမ မှမှေးသော တူမဖွဈလငျ့ကစား – – သမီးတဈယျောနှယျအလိုလှုကျခဲ့သညျ။ အောငျမငျး ကို သဈသဈက လုံးဝ ကွညျ့မရ။ မမနှယျက သူ့ထကျအောငျမောငျး ကိုအရေးပေးသညျဟမွငျု၏။ မမနှယျနှငျ့အောငျမောငျး ခဈြသူ ဘဝ သနျ့စငျစှာ ဆကျဆံခဲ့ကွပွီး အိဒွေ ရရ နခေဲ့ကွသညျမို့ သဈသဈမရိပျမိခဲ့။
မမနှယျက – – – အောငျမောငျး တို့အ-ထ-က တှငျဆရာမဖွဈ၏။ အောငျမောငျးဆယျတနျးအောငျတော့သဈသဈရှဈတနျးရောကွပျီ။ယခငျကလိုပငျမမနှယျကိုအောငျသဈကငျြေးပို့ပေးမွဲအလုပျတဈခုအပွငျကြောငျးမတူသော သဈသဈကိုဆယျပို့ပေးရသော အလုပျတဈခုပိုလာသညျ။အောငျမောငျး ဒုတိယနှဈရောကျလာသညျအထိဘဝသညျစိုပွစှော လှပ သနျ့ရှငျး နခေဲ့ကွသညျ။
‘’ ဟကေ့ောငျအောငျမငျး လာအုံးပွောစရာရှိလို့ ‘’ ခငျမောငျဝငျး က အောငျမငျး နှငျ့အတနျးမတူသျောလညျး တဈခါတဈရံအောငျ မငျး ကားနှငျ့ပငျပွနျလိုကျတတျသညျ။ ခငျမောငျဝငျး က ပွောစရာရှိလို့ဆိုလငျြအနညျးငယျကွောကျရသညျ။ ဒီကောငျကလကျဖကျ ရညျသောကျခငျြလငျြလညျး ‘’ ခန လာအုံးပွောစရာရှိလို့ ‘’ဆိုကာ ကငျတငျးဝငျတတျသညျ။ ‘’ မငျး – – -ဒီကိုလာ – – ပွောစရာ ရှိ ရငျဒီမှာပဲပွော ‘’
‘’ ဟကေ့ောငျ – – မငျးအတှကျ – – သတငျးထူးကှ မထူးရငျဆေးပေါလိပျတောငျဝယျမတိုကျနဲ့‘’ခငျမောငျဝငျး က အာမခံရဲရဲကွီးပေးနပွေနျသောကွောငျ့အောငျမောငျး ခငျမောငျဝငျး ချေါရာလကျဘကျရညျဆိုငျထဲ သို့ဝငျလိုကျသှားရလသေညျ။ ‘’ လကျဖကျရညျ – – ဟေ့ – – နှဈခှကျ ‘’ ‘’ နအေုံးလေ – – မငျးသတငျး က ထူးမှနျးမသိမထူးမှနျးမသိနဲ့ ‘’ အောငျမောငျး က တား သညျ။ ‘’ ဟာကှာ – – မထူးရငျ – – ကိုယျ့ဖာသာရှငျးမယျ ‘’ စားပှဲထိုးလေး လာခပြေးသော – export ဒူးယားကိုကောကျကိုငျ လိုကျရငျး – – စီးကရကျကလေး ထောငျကာ။ ‘’ မငျး – – ညီမ – -သဈသဈ – – ရညျးစားထားပွီ – – ကိုယျ့လူ ‘’
‘’ ဘာ – – သဈသဈ – – ရညျးစားထားနပွေီ – – ဟုတျလား ‘’ အောငျမောငျး တအံ့တသွသာဖွဈသညျ။ သညျထကျတော့ – – ထှထှေထေူးထူး မခံစားရခြေ။ တကယျတော့ – -လဲ သဈသဈနှငျ့အောငျမငျး တို့ကသှေးဝေးလှနျး၏။ဘယျနှဲ့လဲသတငျး မထူး ဘူးလားဟာ သဈသဈရညျးစားထားတာ ကွာလှပွီဒါသတငျးထူးလားကှ – – – မထူးဘူး – – – သှားမယျ ဟေ – – မထူးဘူးလား – – ဟ – – ဟကေ့ောငျနအေုံးလေ ခငျမောငျဝငျး လကျဘတျရညျနှဈခှကျဆေးလိပျတဈပှဲ နငျ့ကနျ့လနျ့ကနျ့လနျ့ကနျြခဲ့သညျ။ သညျမှာ အောငျမောငျး သဈသဈကိုလူရာသှငျးပွီး စကားပွောဖွဈခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
တကယျတော့လဲ သဈသဈအရှယျရောကျလာပွီဆိုသညျကိုတဈအိမျတညျး အတူတူနသေော အောငျမောငျးတို့ကသာ သတိမထားမိ ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။သဈသဈတငျရငျခါးလေးမြားက အခြိုးကကြ နငျ့ပူရိသတို့မကျြစိကစြရာ အနအေထားလေးထဲရောကျလာ၏ အပွောအဆိုလေးတှေက အစ ရှကျကိုးရှကျကနျးအမူအရာလေးမြားက အပြိုရိုငျးဟနျအပွညျ့ဖွဈလာသညျ ယခငျက ဆိုလငျြ အောငျမောငျးရှမှေ့ာပငျထမီဖွနျ့ဝတျနတေတျသူ ” မိသဈ – – ” ” ရှငျ – – – ” ကားတံခါးကိုဖှငျ့ပွီး တတျလိုကျသညျ နှငျ့ အောငျမောငျးက ခပျမာမာချေါလိုကျမိသညျ။သဈသဈက လနျ့ထူးလေးထူး ရငျး အောငျမောငျးကို ကွညျ့သညျ။ အောငျမောငျး သူ့ကို လိုကျကွညျ့နသေောအခါ သဈသဈ ခေါငျးလေးငုံ့ကာ ရှရေငျလေး အစုံတဖတျြဖတျြတုနျသညျ။ ဘာမြားပွောမလဲဟုနားထောငျနေ စဉျကားကိုမောငျးထှကျခဲ့သဖွငျ့သဈသဈနားမလညျစှာ အောငျမောငျးကိုခိုးကွညျ့မိသညျ။မမနှယျကိုဝငျချေါရအုံးမညျဖွဈ၍လညျး ကားကိုမောငျးနကေအြတိုငျး သမိုငျးလမျးဆုံအရောကျအရှဖေ့ကျသို့ထောငျပွီး မောငျးခဲ့လသေညျ။
အောငျမောငျးနာရီကွညျ့သညျ – – မမနှယျကြောငျးလှတျဖို့ – – နာရီဝကျခနျ့လိုသေးသညျ။ ” နငျ့ကို – – – ငါစကားတဈခှနျး ပွော ခငျြလို့ ” ” ရှနျ – – – အျော – -အငျး ” နှဈမိုငျခနျ့အတှငျကမြှစကားကိုပွနျဆကျ၏ ။သဈသဈ – – ရငျတှေ တဒိနျးဒိနျးခုံနဝေ သညျ။ ကြားကြားယားယား တကသိုလျကြောငျးသား အောငျမောငျးကိုသဈသဈ သူငယျခငျြးတှကေ အမွဲလိုမိတျဆကျခိုငျးကွသညျ။ သဈသဈကလဲ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနှငျ့ဝလေ့ညျကွောငျပတျလုပျကာ ရှောငျဖယျနမေိခဲ့သညျ။ ကွာတော့သဈသဈသူငယျခငျြးတှေ လကျလြှောခဲ့ကွသညျ။အောငျမောငျး ရုပျရညျက ကုလားမငျးသား အမီတာဘာဂမျြး နှငျ့အတျောတူသညျ။ မတျြလုံးမကျြခုံးတှကေ ထူထဲတောကျပွောငျကွသညျ။ နှာတံက ထူးထူးခွားခွား ခြှနျမွနပွေီး ဆံပငျပုံစံက အမီတာဘာဂမျြး ပုံ။
လကျမောငျး၌ – – အမှေးအမွငျတှကေလညျး မညျးနအေောငျထူ၏ ။ ရငျဘတျမှေးမြားက ဘာကွောငျ့မှနျးမသိသဈသဈရငျကို ခုနျ စခေဲ့သညျ၊ ဟိုနရောမှာဆိုရငျဗဈြခဲမှောငျမဲနမှောပဲ ဟုတှေးရငျး မိမိဖာသာလဲရှကျဖူးသညျ။ ‘ နငျရညျးစားထားနပွေီလား မိ သဈ ” ကားလေးကိုရဲဘျောဟောငျးရိပျသာလမျးဘေးတှငျရပျခါ – – ထိုစကားကိုနိဒါနျးမပါပဲ မေးသညျ။ သဈသဈ – – – ဆတျကနဲ သူ့မကျြနှာကိုကွညျ့သညျ။ သူ့မကျြလုံးညိုကွီးမြား နှငျ့သဈသဈတဈကိုယျလုံး ကိုခွဆေုံးခေါငျးဆုံး ကွညျ့သောအခါ သဈသဈမနတေတျ။ ” မထားပါဘူး – – – ဘာဖွဈလို့လဲ – – အဈကို ” ” ငါ သတငျးကွားလို့မေးတာပါ – – ရှဈတနျးဆိုတာ ဝိဇာ သိပံခှဲတဲ့နရော – – – မိသဈအရေးကွီးတယျ။ ” ငါတို့က ဘဝတူတှလေေ – – ဦးလေး သျောကောငျးကြေးဇူး ကိုအမွဲသတိရ နရေမှာ ”
သဈသဈကိုဆယျတနျးမှ မွငျ့မောငျဆိုသော တရုတျကပွားကလိုကျနသေညျမှာကတော့အမှနျဖွဈသညျ။မွငျ့မောငျသာမက ခငျထှနျး – – စံရှတေို့ကလဲလိုကျနကွေသညျ။ သဈသဈရငျကခုနျပဲ ဘုခညျြးပွနျတောခဲ့သညျသာ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ – -သူဟာပထမဆုံး အကွိမျမိသဈကိုအရေးတယူစိုးရိမျတကွီး သတိပေးဆုံးမသညျ့ အတှကျကွညျနူးကနြေပျသညျ။ ” အဈကို့စကားကို – – မိသဈ နားထောငျမှာပါ ” အောငျမောငျးမြှျောလငျ့မထားသော ယဉျကြေးသိမျမှသေ့ညျ့စကားကွောငျ့ – – မိသဈကိုအောငျမောငျးသနားသှားမိ၏။ ” မိသဈ – – အရငျကနဲ့မတူဘူး ” ဟုပွောရငျး မိသဈခေါငျးလေးကို – – ခဈြစနိုးလေး ကိုငဖှပွဈျလိုကျမိသညျ။ မိ သဈရငျထဲတလှပျလှပျဖွဈသှားကာ သူ့ကိုခပျစှစှေလေေးကွညျ့လကျြ – – ရှကျကိုးရှကျကနျးလေးပွုံးမိသညျ။
ကွညျ့ပါအုံး – – ဒီဟာမလေးအပွုံးက အရငျနဲ့ဘာဆိုငျသတုံး – – ညို့ငငျအား လေးတှနေဲ့ပါလား – – – အငျးလေ ဒါကွောငျ့ လညျး ယောကျြားလေးတှေ – – – စိတျဝငျစားကွတာပေါ့ – – – ခေါငျးကလေးငုံ့ထားသော သဈသဈလညျဂုတျသားလေးမြားတှငျမှေးညငျးနုလေးမြားက – – ဗှနှေဈလုံးဖွငျ့ရငျခုနျဖှယျ။ လညျဆံမှေးနုလေးတှေ ပေါကျခါစ – – – မွငျးရိုငျးမလေးတဈ ကောငျပမာ – – နုသဈပြိုမဈြခွငျးလကဏာ ကိုအနီးကပျတှရေ့၏။ လကျဖြံလေး၌လညျး – – – စိမျးစိမျးစိုစိုမှေးနုလေးတှေ စိုး မိုးစပွုနပွေီပဲ – – –ကောငျမလေး မငယျတော့။အောငျမောငျး သကျပွငျးခမြိသညျ။ အောငျမောငျး၏ သကျပွငျးခသြံကိုသဈသဈ က – – – ခပျပွုံးပွုံးလေးမကျြလုံးစှကွေညျ့ကာ – – – ဇကျကလေးစောငျးပွီး ပွနျငုံ့သှားသညျ။
အောငျမောငျး ခေါငျးကိုခါရမျးပွဈလိုကျမိသညျ။ မမနှယျထံမှ ရသော ကိုယျနံ့နှငျ့သဈသဈထံမှဆှတျပြံ့သော ကိုယျနံ့တို့ကကှာခွား လှနျးလှသညျ။ မမနှယျထံမှပငျကိုယျရနံ့တို့က – – – ဖုံးကှယျလကျြရမှေေးနံ့ကသာ – – -ပွနျ့လှငျ့နလေရှေိသညျ။ သဈသဈ ထံမှမူ – – – အောငျသဈတခါမှမခံစားဘူးသော အီလညျလညျအပြိုစဈရနံ့လေးကိုရှူရှိုကျနရေသညျမို့ရငျထဲ၌ – – – တဈမြိုးခံစား ရ၏။ လကျဝဲဘတျပေါငျကိုကားကူရှငျပျေါတငျကာ – – သဈသဈဘကျသို့တစောငျးလှညျ့လကျြတတောငျဆဈကိုကားကြောပျေါ တငျထားခွငျးဖွဈသညျမို့ – – သကျပွငျးရှိုကျပွီး သညျနှငျ့ခွထေောကျကိုကလပျလီဗာ ပျေါပွနျခြ လကျကို ဂီယာတံပျေါပွနျအုပျ လိုကျရငျး – – ။
” သှားကွစို့ – – – မိသဈ – – – မမနှယျ – – ကြောငျးလှတျတော့မယျ ” ” ဟုတျကဲ့ – – အဈကု ”ိသဈသဈ – – ဘယျနှယျ့ ကွောငျ့ထူးထူးခွားခွားကွီး ယဉျကြေးနပေါလိမျ့ဟု အောငျသဈဇဝဇေဝါ တှေးရငျး ကားကိုမောငျးထှကျခဲ့မိသညျ။ နှဈယောကျ စလုံးရငျမှာမူအတှေးကိုယျစီနှငျ့ပဲဖွဈသညျ။ သဈသဈက လညျးတခြိနျလုံး – – ဖုတျလသေညျ့ငပိရှိသညျမြှမအောငျ့မပေဲ့ဂရုမ စိုကျသလိုနလောခဲ့သော အောငျမောငျး ၏ နှလုံးသားရေးရာ ဘာရေးရာ နှငျ့စပျလငျြးသိစကားလေးမြားကွားရမှုကွောငျ့ကွညျနူးနေ တာ – – အောငျမောငျး သကျပွငျးရှိုကျသံလေးကိုပငျမိသဈရငျခုနျနမေိသေးသညျ။
ဪ – – သညျအရှယျကလညျး – – သဈရှကျကွှေသညျကိုပငျလကျခုပျလကျဝါးလေးတီးကာ – – ရယျမောတတျသော အရှယျ – – ။ ” မငျးညီမ – – လိုကျလာတယျ – – ဟကေ့ောငျ – – – ဘာအရေးကွီးလို့လဲမသိဘူး – – – ခငျမောငျဝငျးက – – စာသငျခနျးမှ ထှကျဆီးကွိုပွောပွီးသော ကွောငျ့အောငျမငျး အပွငျကို ကွညျ့၏ ။ ကြောငျးအကြီ အဖွူလကျရှညျထမီအစိမျး နှငျ့ ကြောငျးလှယျအိတျမပါသော သဈသဈကိုတအံ့တဩတှေ့ရသညျ။ ခငျမောငျဝငျးကို ကြျောဖွတျပွီး – – မိသဈဆီလာခဲ့၏။ ” ဘာဖွဈလို့လဲဟငျ – – သဈသဈ ” ” ဖကွေီး – – – အသဲအသနျဖွဈလို့ – – ကိုကို ”’ ” ဟာ – – – – – ” အောငျမငျး ခငျမောငျ ဝငျးကိုအကြိုးအကွောငျးပွောပွီး – – အိမျသို့အပွေးသှားရနျကားဆီသို့ဦးတညျခဲ့သညျ။ သဈသဈက မမှီမကမျးလေး လိုကျလာ သညျ။
” မမနှယျရော – – အကွောငျးကွားပွီး ပွီလားဟငျ ” ” မမနှယျက အိမျကိုအရငျရောကျတာ – – – မမနှယျကွောငျ့ – – မိသဈသိ တာ – -မမနှယျကိုဒျေါကွးလှီ– ဖုနျးဆကျချေါတယျလို့ပွောတယျ ” ကားကူရှငျပျေါ ပွဈထိုငျလိုကျပွီး – – – တဈဖကျတံခါးကို ဖှငျ့ပေးလိုကျသညျ။ မိသဈဝငျ – – ထိုငျကာတံခါးပိတျသညျ။ တံခါးက ဂကျြမကြ – – ကားကို – -တလှိမျ့နှဈလှိမျ့မောငျးပွီးမှ – – သဈသဈဖကျမှတံခါးကိုလှမျးဆှဲဆောငျ့ပိတျ၏။ ထိုအခါ အောငျမောငျး ၏ ကွီးမားသော လကျမောငျးကွီးက မိသဈနို့လေး နှဈလုံး ကိုအိကနဲ ဖိကပျမိကွသညျ။ မိသဈ – – မကျြနှာလေး ရဲပွီးနောကျကိုတှနျ့သညျ။အောငျမောငျး ရငျထဲ – – ဒိတျကနဲပူသှား ကာ သဈသဈကိုအားနာသလိုကွီးဖွဈသှားမိသညျ။
” ဆောရီး – – – မိသဈ – -တံခါးမကလြို့ ” ” အငျး – – – ပါ ” သညျစကား နှဈလုံးအနောကျ၌ နှဈယောကျထဲသာ သိသာသော အတှေးလေးမြားက ပွနျ့လှငျ့သှားကွသည။ျ ကားက ဒသေကောလိပျအတှငျး မှ ဖွတျထှကျလာရာ အရှိနျပွငျးပွငျး နှငျ့တှလေို့ကျ လတေိုငျးသဈသဈကိုယျလုံးလေးက အောငျမောငျးဘကျသို့ယိမျးထိုးသှားသညျ။ မဟာစညျကှနေ့ားရှိ – – – ဂြိုငျ့ကွီးတဈခုကိုအ ရှောငျ – – – ” ဂြိုငျး – -ဒုံး ” ” အမေ့ – -အို – – – ” ကားရှေ့ ဘီး တဈဖကျကဂြုငျိ့ထဲကပြွီး – – ရှအေိ့ပျစယျတနျနှငျ့ဒုံကနဲ – – ဆောငျ့လိုကျရာ သဈသဈမဟနျနိုငျပဲအောငျမောငျး ပေါငျကွား သို့လကျထောကျမိပွီး အောငျမောငျး ရငျခှငျလေးထဲသို့ပွိုဆငျး တိုးဝငျသှားသညျ။ ဤမြှလောကျနှငျ့ဆိုပွသနာမရှိ – – ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့ကွီး ဆုပျလိုကျမိသော သဈသဈလကျကလေး က အောငျမောငျး ၏ ရှညျရှညျလီးအတနျကွီးကို မိမိရရကွီးကိုငျလိုကျမိခွငျးကွောငျ့ပဲ ဖွဈသညျ။
တဒဂ လေးပါ – -တခဏလေးရယျ – – ကွာလှမှနှဈစကနျ့ – – သုံးစကနျ့ပဲပေါ့ – -အဲလိုကိုငျလိုကျမိသညျနှငျ့သဘာဝဆနျ့ကငျြ ဖကျလိငျ သဘောအရ လီးကွီးက ဒိုငျးကနဲသဈသဈလကျကလေးကို ”တော့” လိုကျသလိုရုနျးထှကျလိုကျတာကွောငျ့သဈသဈ မကျြလုံးတှေပွာသှား၏။ အောငျမောငျးက သဈသဈပခုံးလေးကို အသာဖကျပွီး ပှထေူ့၏။ ” ငါ – – – စိတျလောနလေို့ဟ – – မိသဈ ” အောငျမောငျး အသံက တဈစုံတဈရာ ကိုဖုံးဖိရနျကွိုးစား၏။ မိသဈကလဲ ရငျခုနျနှေးထှေးစှာ လှုပျရှားနသေော အသံနငျှ့။ ” ဟုတျတယျ – – ဖကွေီး – – – အတျောဖွဈနတော”မိသဈသူမနရောလေး၌ နသေားတကြ ပွနျထိုငျမိခြိနျကားလေးက ဘုရား လမျး လမျးဆုံမှကှထှေ့ကျသညျ။ မိသဈသူ့လကျဖဝါးလေးကို မသိမသာ ဆုပျနယျနမေိ၏။ ရငျထဲမှတဒိနျးဒိနျးခုနျနရေငျးအောငျ မောငျးကိုခိုးကွညျ့၏။ ယောကြားပျီသခြောမောခနျ့ငွားသော အောငျမောငျး မကျြနှာကရှကေို့မူထားလငျ့ကစား မကျြလုံးစှေအကွညျ့နှငျ့သဈသဈတို့အကွညျ့ခငျြးဆုံကွသညျ။
” ဒိတျ ” ကနဲ ရငျတှခေုနျကာ မကျြနှာကိုကားရှသေို့ ပွနျလှညျ့လိုကျမိကွသညျ။ စကားမူမပွောဖွဈတော့ – – – ။ ဦးသျောကောငျး က – – လူကွီးရောဂါဖွဈပွီး တရှောငျရှောငျဖွဈနသေညျမှာလညျး ကွာပွီဖွဈသညျ။ ကားလေး ပျေါတီကို အောကျသို့ ထိုးလိုကျ မိသညျနှငျ့တံခါးဖှငျ့ကာ အိမျပျေါအပွေးအလှားတတျကွသညျ။ အိမျရှခေ့နျး တှငျအိမျနီးခငျြးမြားရောကျနေ၏။” အဲဒါ ဦးသျော ကောငျး သား နဲ့သမီးတှပေေါ့အကွီးကောငျက တကသိုလျကြောငျးသား။ ”တဈစုံတဈယောကျအသံကိုသဲ့သဲ့ကွားသညျ။
” မောငျမောငျ – – – ” မမနှယျအခနျးဝ၌ အောငျမောငျး နှငျ့ဆုံ၏။ မမနှယျငိုထားသဖွငျ့မကျြနှာတှနေီရဲကာ မို့အဈနသေညျ။ ” ဖဖေေ – – – ဆုံးပွီ ” ” ဗြာ – – – ” ”ရှငျ – – – ” သဈသဈရော အောငျမောငျးပါ ငိုငျတှသှေားစဉျသဈသဈက အောငျ မောငျးလကျမောငျးကိုစုံကိုငျပွီးရငျဘတျ၌ မကျြနှာလေးဝှကျကာ ကွူကွူပါအောငျငိုလတေော့သညျ။ မမနှယျက – – – သဈသဈ ပုခုံးလေးကိုဖှဖှဆုပျနှယျပေး၏။ ” တိတျပါညီမရယျ – – – တို့မောငျနှမ သုံးယောကျစညျးစညျးလုံးလုံး – – ခဈြခဈြခငျခငျနေ သှားကွဖို့ပဲလိုတာ ” ” မိသဈ – – – အသကျတောငျမမှီဘူး – – မမနှယျ ” ဝမျးနညျးဆို့နဈသံလေးဖွငျ့ပွောရငျး – – -ရငျခှငထဲချိုဝငျငိုရှိုကျပွနျသညျ။ နှယျနှငျ့အောငျမောငျးက သဈသဈကိုခြော့မော့နှဈသိမျ့ရငျး တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျအားကိုးစှာ ကွကှေဲစှာ ကွညျ့ဖွဈကွသညျ။
ဈာပန ကိတျစ အဝဝကိုအောငျမောငျးဦးစီး ဆောငျရှကျရ၏။ မမနှယျက အောငျမောငျးကိုသာ အလုံးစုံပုံအပျထား၏။ဒျေါလှ (ထမငျးခကျြ) အဖှားကွီးက တမှောငျ့ ” သူ့သားသမီးတှေကို စိတျမခလြို့လားမသိဘူး မနညေ့က စာကွညျ့ခနျးဝမှာ ကြောပေးပွီး ထိုငျနတောတှလေို့ကျတယျ – – သိလား – –ငါဖွငျ့ခေါငျးကိုဒီလောကျကွီးသှားတာ ” သဈသဈက သူရဲဆိုလငျြတော့အသေ ကွောကျသညျ။ နှယျက – – ဒျေါလှကိုခပျစူးစူးလေးကွညျ့ရငျး ” တကယျတှတေ့ာနျော – – – ဒျေါလှ ” ” အမလေး – – – မဟုတျ ပဲနဲ့မပွောရဲပါဘူး – -ဆရာမရယျ – – ဘုရားပေးပေးကမျြးပေးပေး ကြှနျမ လိမျမပွောပါဘူး ”
ဒျေါလှစကားနညျးသလောကျဆုံး – -တစေ – – ဆိုလဲ သေးပါအောငျကွောကျတတျသော အဖှားကွီး ဖွဈသညျ။ ကွိုးစားရိုးသားသူ ဖွဈသောကွောငျ့ – – နှယျ့မမေရှေိစဉျကတညျးက နှယျတို့မိသားစုနှငျ့နလောခဲ့သညျမှာ သားသမီး မြားရှိသော ကြုံမငေး သို့ ပငျမပွနျတော့ပဲ မိသားစုဝငျတဈယောကျဖွဈနသေညျ။ ကွောကျသညျဆိုကာ – – ရကျလညျပွီး နောကျနတှေ့ေ၌ – – – မမနှယျ နှငျ့အတူသဈသဈဝငျဝငျအိပျတော့သညျ။ နှယျနှယျနှငျ့အောငျမောငျး တို့မှာ ကိုးလိုးကနျ့လနျ့ဖွဈကွရသညျ။ ဖဖေဆေုံးပွီး သညျ့နောကျ – – နှယျနှငျ့အောငျမောငျး ညတိုငျးလိုလိုနှယျ့အခနျးမှာ – – ဆုံကွသညျ။
နှယျကတဈခုတော့စညျးခွားထားပါသညျ။မငျဂလာ မဆောငျသေးခငျဘာမှ မလုပျရ ဟုအောငျမောငျး ကလညျး နှယျ့စကားအတိုငျး အပှတျအသပျလေးမြား မှလှဲ၍ပိုပွီး အခှငျ့အရေးမယူခဲ့ရှာပါ။ ထိုကွောငျ့လညျး နှယျ – – – အောငျမောငျးအခနျးကိုသဈသဈ အိပျခြိနျ၌ အောငျမောငျး အလိုကြ တိတျတဆိတျကူးလာခဲ့ရသညျ။ ” မိနျးကလေး က အဆောငျကူးရတယျ – – – မောငျမောငျ ရယျ – – – ရှကျစရာ ကောငျးနပွေီ – -တကယျပဲ ” နှယျက – – မောငျ့အခနျးထဲဝငျမိသညျနှငျ့ရှကျစရာ မကျြနှာလေး နှငျ့ပွော လိုကျသညျ။ အောငျမငျး က နှယျ့ကို မပွုံးမရယျ – – – လေးစိုကျကွညျ့နရေငျးတံတှေး မြိုခသြညျ။ စှပျကယျြဂြိုငျးပွတျလေး သာဝတျထားသောကွောငျ့အောငျမောငျး ရငျဘတျမှအမှေးမြားကိုအသညျးယားစဖှယျမွငျရ၏။
အောငျမောငျးက အမှေးထူပွောသော သူ့ရငျဘတျကွီး နှငျ့နှယျ့ပါးပွငျလေးဖိကပျမိသညျအထိသိ မျးဖကျလိုကျသညျ။ သငျးပြံ့ သော ရမှေေးနံ့က စူးဝငျသှား၏။နှယျက အလိုကျသငျ့လေး သူ့ရငျခှငျထဲတိုးဝငျလိုကျရငျး – – – ” ကောငျမလေး နိုးလာအုံးမယျ မောင – – – ”ျ” နိုးနိုး – – မမနှယျရယျ – – ဒီလိုညလေးပဲ တှရေ့တဲ့ဟာကို – – မမနှယျက – – မောငျ့ကိုရှောငျဖယျ ရှောငျဖယျနဲ့ ” ” အဲလိုမပွောနဲ့ – – မောငျမောငျ – – မမနှယျကလူကွီး သိလား – – တှဲတှဲသှားသှား လြှောကျသှားလို့ ကောငျးတဲ့အရှယျမဟုတျဘူး – – ဆရာမ ဆိုတဲ့ဂုဏျသိကာလဲ ရှိသေး ”
” အဲဒါကွောငျ့ပွောတာ – – ဒီမှာမနခေငျြတော့ဘူးလို့တောငျကွီးဖွဈဖွဈ – – မမွေို့ဖွဈဖွဈပွောငျးပွီး လကျထပျကွရအောငျဆို လဲ” ” အလုပျက ဒီမှာအခွကေနြတော မောငျမောငျ – – ဖဖေရှေ့ယျယာလုပျငနျးတှေလဲ – – မမပဲ ဆကျလုပျနရေတာ – – ဒါတောငျ အနျကယျစိုးရှိနလေို့ ” ” အဲဒီဦးတငျစိုး ဆိုတဲ့လူကွီးက မမနှယျကိုကွညျ့တဲ့အကွညျ့ဟာ မရိုးသားဘူးလို့ထငျတယျသိ လား ” ” အဟငျး – – ဟုတျမှာပေါ့ ” နှယျက မောငျ့ကို – – စ – လိုစိတျနှငျ့ခပျပေါ့ပေါ့လေး ပွော၏။ အောငျမောငျးက – – နှယျ့ပု ခုံးအရိုးကြိုးမတတျဖဈြညှဈရငျး- – ။ ” မမနှယျနျော – – ကြှနျတော့စိတျကိုမဆှနဲ့သိလား ”
ကြှနျတျောအရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ – – ဘာမှမလုပျပဲအလှကွညျ့နတေဲ့ပနျးကိုကြှနျတော့အရငျခူးလို့ကတော့လား – – မယုံမရှိနဲ့ ဓားနဲ့ထိုးမှာ – – အဲဒါ – – အပွီးပွောတာ ” အောငျမောငျး က – – ကတုံကရီပွောရငျး နှယျ့ပါးပွငျမို့မို့လေးကို – – – နှေးကနဲ – – မှေးလိုကျသညျ။ လကျတဈဖကျက နှယျ့ရငျသားတဈလုံးကိုဖိညှဈရငျး မခငျြ့မရဲ သကျပွငျးခြ၏။ ” မောငျ့ကို – – မမနှယျကတိ ပေးထားတာပဲ မောငျရယျ – – နှယျအပြို့ဘဝ ကိုမောငျ့ကိုပဲ ပေးမှာပါ ” ” မမနှယျက ပါးစပျကပဲပွော သိလား ဟိုလူက အံတိုနေ ပွီမမနှယျလိုလူလောကျတော့ဖွုတျတောငျစားသှားအုံးမယျ ” ” ကဲပါ လှတျပါအုံး အသကျရှူလို့မရတော့ဘူး နှယျက အောငျ မောငျး ပေါငျကိုလကျကလေး ထောကျကာ ရုနျးရငျးနှုတျခမျးလေးစူပွီး ပွောလိုကျ၏။ အောငျမောငျးက မခငျြ့မရဲနှယျ့နှုတျခမျး လေးကို ပွှတျခနဲ စုပျပွီးမှလှတျလိုကျရငျး။
” မမနှယျကို ဒီစာအုပျပွမလို့ – – ဒီမှာ ” စာအုပျကလကျနှဈလုံးလောကျထူသညျ။ ဒေါကျတာ ” အီဆာမကျသရူး ” ရေးသားသော ” အနရယျကငျးသိကာမဖွပြေောကျနညျး ” စာအုပျလေးကိုနှယျကခပျတညျတညျယူဖတျလိုကျ၏။ ” ဒါက အမနောကျနိုငျငံက ဆေး ပညာအယူအစတှပေဲ – – ဒီထဲမှာ ” ဖတျကငျး ” ကိုမမနှယျလလေ့ာဖူးလား ” ” ဟငျ့အငျး – – လိငျစာအုပျတှမှေ မဖတျဖူးတာ ” ” ဒါကွောငျ့အပြိုကွီး ဖွဈနတော ဒီမှာကွညျ့ပုံပါတယျ – – တှလေ့ား မမနှယျ – – ဒါက ယောကျြားလေးရော မိနျးကလေးရော အန ရယျ ကငျးတဲ့နညျးပဲ” ” ဟငျ – – မောငျကလဲ – – – ဘာတှပွေမှနျးမသိဘူး ” ” မမနှယျလဲ– – ဆရာမတဈယောကျပဲဗြာ ဒါ လေးတောငျမှအတှအေ့ကွုံမရှိဘူးဆိုရငျ – – ဘယျလိုလုပျမလဲ ” ” အို – – – မဆိုငျတာ – – ဆရာမက – – ဒါတှသေိရမှာလား ”
” ဟာ – – သိပျသိရတာပေါ့ – – -ဒါမှကိုယျ့ကြောငျးသား ကြောငျးသူတပညျ့လေးတှကေိုထိနျးသိမျးနိုငျမှာ ” ” ပေးစမျးပါ – – တဈခါထဲလကျခြာတှပေေးနပွေနျပွီ ” နှယျက ရငျ့ကကျြဟနျလေး ဖွငျ့စာအုပျကိုဆှဲယူကွညျ့၏။ ယောကျြားလိငျတနျကိုမိနျးမ က ဂှငျးတိုကျပေးနသေကဲ့သို့မိနျးမစောကျပတျကိုယောကျြားက လီးသဏနျပစညျး တဈခုနှငျ့ထိုးသှငျးပေးနပေုံဖွဈသညျ။ ” အဲ ဒါ – – သမီးရညျးစားတှလေေ – – မမနှယျရဲ့ ” ” သိပါတယျသူပဲဖတျတတျတာကနြတောပဲမကျြစိရှကျဖို့ကောငျးလိုကျ တာ ” နှယျက မကျြစိရှကျတယျဟုပါးစပျက ပွောရငျး နောကျစာမကျြနှာမြားကိုလြှောကျလှနျပွီးကွညျ့လိုကျပွနျသညျ။ သုံးလေးရှကျ လှနျပွီးနောကျသရုပျဖျောပှံတဈပုံပျေါလာ၏၊
” ဟငျး – – ဒီပုံကတော့ – – အတျောဆိုးတာ ” အောငျမောငျးက နှယျ့ပုခုံးမှ ကြျောကာလကျကိုနှယျ့နို့ကွီးတဈလုံးအား – – ညှဈ ကစားရငျး – – စာအုပျကိုကွညျ့သညျ။ ” ဒါက ညားပွီထငျတယျမမနှယျရဲ့ကြှနျတျောလဲ အဆုံးထိမဖတျရသေးဘူး – – တဈခြို့ ဝေါဟာရ တှေကတြော့ဆေးပညာ အချေါအဝျေါတှလေား မသိဘူး – – နအေုံး – – အဲ – -အဲဒီမှာတှလေ့ား ” နှယျက အသံ လေးမပှငျ့တဈပှငျ့နှငျ့ဖတျပွီးရယျ၏။ ” အလကား – – – ဘာတှမှေနျးလဲ မသိဘူး ” ” ပွောစမျးပါ မမနှယျရဲ့သိရငျလဲဘာသာပွနျပေးစမျးပါ ” ” ကှယျ – – – ညဈတီးညဈပတျတှပေါ – – ကလေးမရအောငျလုပျတဲ့နညးပျေါ့ – – မိနျးမအဂါ ထဲကို ပလတျစတဈစှပျပွီးလုပျတဲ့ဟာကို – – ယောကျြားဆိုလဲ – – ဟိုဒငျးစှပျပွီးလုပျပေါ့ – – အဲဒါ – –ဘာမှမထူးဘူး ဒီမှာ ကွာလှပွီ – – အိမျထောငျရှငျတှေ သုံးနတော ”
” ကြှနျတျောတို့လဲ အဲဒီလိုလုပျလို့မရဘူးလားဟငျ – – – မမ ”အောငျမောငျး က အရဲစှနျ့ပွီး မမ နားကပျပွော၏။ ” ကြှတျ – – မဟုတျတာတှေကှယျ – – – ရှကျစရာကွီး ” ” ဘာရှကျစရာရှိလဲ မမရယျ – – မောငျ့ဟာကိုစှပျပွီးလုပျကွမယျလေ – – – မ ကောငျးဘူးလား ဟငျ ” ”ဟအေ့ေးကှယျ – – မကောငျးပါဘူး – – – မတျောတဆ ကြျောမကောငျးကွားမကောငျးဖွဈကုနျရငျမမပဲ အရှကျရမှာ ပွီးတော့လဲ ပတျဝနျးကငျြက မောငျနှမ လို့သိကွတာ ” တဖှဖှ– – ဆုပျနယနသေျော– – နှယျ့နို့ကွီးပျေါမှလကျကို ရုပျသိမျးလိုကျသလို ပူးကပျထားသော ခနာကိုယျနှဈခုကိုလဲဆတျကနဲခှါပွဈလိုကျပွီး ကုတငျပျေါသို့ဝကျကွီးတဈကောငျပဈခြ လိုကျသလို ပကျလကျကွီးလှဲခရြငျး ဟငျးကနဲ– – – ညီးတှားလိုကျသညျ။
နှယျ့- – ရငျထဲထိတျကနဲဖွဈသညျ။ နှယျ့ကိုခစြရသျောမောငျ့အဖွဈကလညျးစိတျညဈစရာတော့ကောငျးသညျ။ ခဈြသူတို့ သဘာဝ တှဲသှားတှဲလာလဲ မလုပျရ – – ။ လကျပှနျးတတီး နဖေို့ကလညျးမသငျ့တျော – – ဟုတျတော့လဲ ဟုတျသညျ။ သူ့ခမြာ သနားစရာ – – ပုဆိုးအောကျမှ မတျတောငျနသေော လီးတနျထိပျကွီးက နှယျ့ရငျကိုသိမျ့ကနဲတုနျလှုပျစသေညျ။ သူ့ရငျဘတျပျေါ ကနျ့လနျ့လေးမှေးကာ – အုပျမိုးလိုကျရငျး ။ ” မောငျ – – – ” ခပျတိုးတိုးလေးချေါသညျ။ မောငျကစိတျပကျြလကျပကျြ – – – မကျြနှာဖွငျ့မကျြနှာကကျြကိုသာ မော့ကွညျ့နပွေီး လကျနှဈဖကျကို ခေါငျးအောကျသို့သှငျးထားသညျ။ ဂြိုငျးမှေး မဲမဲကွီးမြားက ရှေးလြားလှသညျ။
” မောငျ – – လို့ဆို – – ထူးလေ ” ” မမပွနျခငျြပွီမို့လား – – ပွနျတော့ ” အောငျမောငျး အသံက တကယျ့ကိုစိတျတိုနသေံ။ ” မောငျကကှယျ – – – ကလေးလေးလိုပဲ– – မတျောတာတှေ ဖွဈကုနျမှာစိုးလို့ – – မ – – တောငျးပနျနတော ကနျြတာတှကေို မောငျ ကွိုကျသလိုလုပျနတောပဲမို့လား – ဟငျ ” နှယျ့အသံလေးက ဖွောငျးဖနြှဈသိမျ့ရငျး ဝမျးနညျးဆို့နငျ့သံလေးဝဲလာသညျ။ မောငျနှယျ့ကိုဤနယျစိမျးစိမျးကားကား ဆကျဆံလငျြ နှယျအငမတနျဝမျးနညျးလှယျသညျ။ မကျြရညျခကျြခွငျး ဝဲသညျ။
အောငျမောငျး က နှယျ့မကျြနှာကို ဝကေနဲကွညျ့ပွီး သကျပွငျးခကြာ – – ခှခေါငျးအုံးကွီးကို – – လှညျ့ခှပွဈလိုကျကာ – – သိမျး ဖကျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ – – နှယျ့ကိုမကွညျ့ပဲလညျး ပွောသညျ။ ” ဟုတျပါပွီ – – မယျမငျးကွီးမရယျ – – ကွှပါတော့ကွာရငျ ကြှနျတျောမြိုး – – ဆးအောငျီ့ပွီးသတေော့မှာ မို့ပါ ” ရကျစကျလှနျး ဥပခေါပွုလှနျးပွီး – – အလှနျတရာမလေးမစားနိုငျလှနျးလေ ခွငျး ဟုတှေးရငျး ဒေါသထှကျ၏။ ” မငျး – – -ဘယျလိုသုံးနှုနျးလိုကျတာလဲ – – မောငျမောငျ – – ဟငျ ” ” မမနှယျကြှနျတော့ကို လာသတျနတောနဲ့မတူဘူးလားဗြ ” ဆတျကနဲ– – လှညျ့ပွောလိုကျသော အောငျမောငျး မကျြလုံးအိမျမှမကြရညျပူမြား ဒလဟော စီးဆငျးလာနသေညျကို တှလေို့ကျရသော နှယျအရညျပြျောသှားသညျ။
” ကောငျလေး ကလညျးလေ – – အရမျး – – ဆိုး ” နှယျက – – အောငျမောငျးပုခုံးကိုဆှဲလှညျ့ပွီး အောငျမောငျး ပေါငျကွားမှလီး ကွီးကိုဆုပျကိုငျဆှဲဖွဲပေးရငျးပွော၏။ အောငျမောငျး ဒိတျကနဲ ဝမျးသာသှားကာ ထ ထိုငျသညျ။ ပွီးနောကျနှယျ့နှုတျခမျးလေး ကို စုပျသညျ။ နှယျက အလိုကျတငျ့လေး မော့ပေးထားကာ မကျြတောငျကွီးမြားမှေးထား၏။ အောငျမောငျး က နှုတျခမျးကို စုပျယူ နရေငျး ပုဆိုးကိုခြှတျပွီး မမနှယျလကျကိုသူ့လီးပျေါ အုပျကိုငျစကော ဂှငျးတိုကျသလို စပေးလိုကျသညျ။ အရှိနျရလာ ပွီးသောအခါ လှတျပေးလိုကျသညျ။ မမနှယျ လကျကလေးက လီးကွီးကိုမှနျမှနျဆုပျကိုငျလကျြ – – ဂှငျးတိုကျပေးနသေညျ။
နှုတျခမျးနှဈလှာကမူ – – သံဂဟဆေကျသလို မွဲနေ၏။ အောငျမောငျးက လီးကွီးကိုကော့ကော့ပေးရငျး မမနှယျ၏ ပူးကပျထား သော ပေါငျကွားထဲသို့လကျကိုသြှိုသှငျး၏။ နှယျက နှုတျခမျးအစုံကိုကမနျးကတနျးခှါရငျး – – – ။ ” ဟအေ့ေးကှာ – – မ – – ကိုမလုပျပေးနဲ့ – – နပေလစေ့ေ – ဟငျ့အငျး ” ” ဟာ – – အတူတူပေါ့ – – လုပျပါ – – မမနှယျရဲ့လှနျပါ ” ” ဟငျ့အငျး – – – ဟငျ့အငျး – – အဲဒါတော့ – – မရဘူးဆရာ – – ဒီမှာသူ့ဟာကွီးကိုလုပျပေးနပွေီပဲ ဟာကို – – – တဈခါထဲ ”
မမနှယျမကျြနှာက ရှကျသှေးတို့ဖွငျ့နီရဲနပွေီး နှုတျခမျးလေးတှေ– – မသိမသာတုနျနသေညျ။ လကျက လီးကွီးကိုကိုငျထား သျောလညျး မကျြနှာလှဲထားသညျ။ ” ဒါဆိုမမဟာကို ကွညျ့ရုံပဲကွညျ့မယျ – – – ဘယျ့နှယျ့လဲ ” ” ဟာ မဟုတျတာ – – – ကလေးကလား ” ” စောကျပတျမမွငျဘူးသေးလို့ပါ – – မမနှယျရဲ့ – – – လုပျပါ ” ” မောငျနျော – – အပွောအဆိုအရမျးရိုငျးတာ ပဲ ” ” ဒါဖွငျ့မောငျဘယျလိုပွောရမှာလဲ ” ”သှား – – – ဘယျလိုမှ – – မပွောနဲ့ ” နှယျက လီးကွီးကိုလှညျ့ကွညျ့ရငျး – – – ” မ ပွီးသေးဘူးလား – – လကျညောငျးလာပွီ – – – ” ဟုကလေးလေးတဈယောကျလို နှုတျခမျးလေးစူကာပွောလိုကျသညျ။
‘’ ခပျတငျးကငျး – – အငျး – – ဆုတျ – – ဆုတျထား – – မွနျမွနျလေး – – – ဆောငျ့ – – ဆောငျ့ – – ဆောငျ့ – – အ – -အငျ့ ‘’ နှ ယျ့လကျပျေါမှ – – သူ့လကျကိုအုပချါခပျကွမျးကွမျးကွီး ကိုငျဆောငျ့ခိုငျးလိုကျသညျ။ ‘’ မောငျ – – မနာဘူးလား – – ဟငျ ‘’ ‘’ ဟငျ့အငျး – – မနာဘူး – – မမနှယျရဲ့ – – ကောငျးတာ ‘’ လီးတနျကွီး က ပူနသေညျ။ လီးထိပျမှယိုစီးကလြာသော အရညျကွညျ မြား က မမနှယျလကျခြောငျးလေးမြား ကိုစေးကပျကုနျသညျ။ ‘’ အရတှေေ – – ထှကျတယျနျော – – ဘယျလိုလဲမသိဘူး – – အဲဒါ မပွီးသေးဘူး – -ဟုတျလား – မောငျ ‘’ ‘’ ဟငျ့အငျး – – မပွီးသေးဘူး – – မမနှယျရဲ့သုကျထှကျမှ ပွီးမှာ ‘’ ‘’ မလှယျဘူး နျော – – တျောတျောကွာနပွေီ – – မ – – လကျညောငျးလာပွီ ‘’ ‘’ မမနှယျ – – ကြှနျတျောပွောသလိုလုပျမလား ‘’ ‘’ မမနှယျ – – စောကျပတျကိုကြှနျတေျာ့ကို ပွရုံလေးပွ ပွီး – – ခပျမွနျမွနျဂှငျးတိုကျကွညျ့- – အဲဒါ သုံးလေးခကျြနဲ့ထှကျရော ‘’ ‘’ အမလေး သူ့ ဆေးနညျး က လဲတဈမြိူး ‘’
နှယျက ရှကျကိုးရှကျကနျးလေးပွောပွီး အောငျမငျး နဖူးကိုလကျသီးဆုပျလေး နှငျ့ဖှဖှထုလိုကျသညျ။အောငျမငျး က နှယျ့ထမီကို ဆှဲလှနျသညျ။ ဒီတဈခါတော့ခပျပကျြပကျြမကျြနှာလေးဖွငျ့သူမ ဖငျကို ပွနျငုံ့ ကွညျ့လိုကျသညျ။အောငျမငျး လီး ကွီးကိုကိုငျထား သောလကျက အမှတျတမဲ့ရပျနေ၏ ။ ‘’ မမနှယျက – – စောကျမှေး သိပျမပေါကျဘူးနျော ‘’ ‘’ အငျး – – ဆယျ့ကိုးနှဈကြျောမှ ပေါကျတာ – – ပါးပါးလေး ‘’ အောငျမငျး က ထမီကိုခါးအထိဆှဲတငျပွီးကွညျ့သညျ။ စောကျပတျကွီး က ဖူးဖူးပွညျ့ပွညျ့ကွီးဖွဈ ကာ ဖောငျးကားလုံးထဈနပွေီး – – အစိကွီးက တျောတျောရှညျသညျ။
ရှညျသညျဟုဆိုသညျက အပျေါဘကျသို့ရှညျထှကျလာခွငျး မဟုတျပဲ – – စောကျပတျနှဈမှာကွား ဍျအောကျဖကျသို့- – တဈလဈ ကွီးတနျးဆငျးနခွေငျးဖွဈသညျ။အောငျမငျး က စောကျပတျနှဈခွမျး တို လကျညှိူးလကျမဖွငျ့အသာဖွဲကွညျ့ရငျး ‘’ ဆောငျ့ – – မမနှယျ – – ဆောငျ့ – – မမနှယျစောကျပတျကွီး ကို မွငျလိုကျတာ နဲ့ကြှနျတေျာ့လီးကွီး က အလိုလိုတောငျသှားတာ – – အား – – – ဆောငျ့ – — ဆောငျ့ – – – ဆောငျ့ – – နာနာလေးဆောငျ့မမနှယျပေါငျကားထားပေးလေ – – အား – အငျး – – မမနှယျရယျ – – ဒီစောကျပတျကွီး ကိုတကယျလိုးရရငျ – – ဘယျလောကျကောငျးမလဲ နျော ‘’ ‘’ လုပျပွနျပွီ – – တဆငျ့ကဲမလာနဲ့- – သိလား ‘’ ‘’ အငျးပါ – – မ – – ရယျ – – အား – – – ထှကျပွီထှကျပွီ – – အိုးအိုး ‘’ နှယျက လီးကွီးကို ကွညျ့လိုကျသညျ။ ဖွောငျးကနဲ ကနျထှကျသှားသော သုကျရညျမြား က ခွငျထောငျအမိုးကိုပငျထိ၏။ ပထမဆုံးအခကျြသညျအပွငျးထနျဆုံး ဖွဈသညျ။ ရပွှေတျနှငျ့ပနျးထုတျလိုကျသကဲ့ သို့မွနျသညျ။ လီးကိုဆုပျကိုငျထားသော နှယျ့လကျကလေးထဲဍျသံခြောငျးကွီးလို မာတောငျ သှားသော အထိအတှနှေ့ငျ့အကွောကွီးမြား ထဈထဈသှားသညျကိုစမျးသပျကိုငျမိရာ ရငျတဈခုလုံး လှုပျခါနမေိသညျ။
ယောကျြားလီးကွီး ကိုပထမဆုံး ကိုငျဖူးခွငျးမို့လဲပူနှေးသော အထိအတှကေ့ လကျဖဝါး ဍျခြှဲကနျြနသေညျ။ ‘’ ဟှနျ့ – – – ပကေနျုပွီ ‘’ နှယျက – – အောငျမငျးပုဆိုး နှငျ့လကျကိုသုတျသညျ။ အောငျမငျး က ပကျလကျအနအေထား – – အောငျမငျး ဘေးတှငျ ကု တငျအောကျခွတေဈဖကျခြ ကာ ဖငျဘကျက ကုတငျပျေါ တငျပေးထားပွီး ထမိနျကိုလှနျပွထားသညျမို့ – – စောကျပတျကွီး က ပွဲ အာပွီး လိုးခငျြစရာ အရညျလဲ့စိုစှတျနသေညျ။ နှယျ့အသားလေး က ပယငျးရောငျထကာ ကွညျလဲ့နသေညျ။ စောကျပတျဘေး နှဈခွမျးမှာ စပဈြသီး စိမျးညိုလေးတှေ လိုတငျးလကျြ အရညျစိုနသေညျ့အတှကျလညျး စားခငျြစဖှယျကွီး လို ဖွဈနေ၏။
အောငျမငျး လီးတနျကွီး ကို – – ဒဈကွီးအား ဖွဲလိုကျစုလိုကျနှငျ့လလေ့ာနသေော အပြိုကွီး မမနှယျခမြာ – – သူ့စောကျပတျကွီး ကို အသအေခြာဖွဲ ကာ ကွညျ့ရငျး ဆငျကွံကွံနသေော အောငျမငျးကို – သတိမထားလိုကျမိခြေ။ ထိုအခြိနျကွားကာလလေး ကို အမိအရ အသုံးပွုကာ နှယျ့စောကျဖုတျကွီး ကိုထမီကွားသို့ခေါငျးကိုထိုးသှငျးပွီး စောကျဖုတျကွီး အလယျရှိစုအိနသေော အစိ ရှညျကွီး ကိုထိထိမိမိကွီး လြှာစောငျးထိုးကာ ဖိစုပျပွဈလိုကျလေ၏။ ‘’ ဟဲ့ – – အို ‘’ အငျ့အငျ့ – – ရှီး – – ကြှတျကြှတျ ’’ နှယျ – – အလဈအငိုကျခံလိုကျရခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့လညျးကုတငျပျေါတငျထားသောခွထေောကျက ရုတျတရကျ – – ညှပျလိုကျ – – စလေို့ကျမသညျိဖွဈရာ – အောငျမငျးခေါငျး ကိုထမီနှငျ့အုပျပွီး ပေါငျနှဈဖကျနှငျ့ညှပျထားသလို ကွီးဖွဈသှားလသေညျ။
ဗိုကျကွောမှစိမျ့ဝငျသှားသော ကာမ အရသာထူးကွီး က အပြိုကွီး စဈစဈဖွဈသော နှယျ့ခမြာ အကွာအခဉျြတှေ တှနျ့ကှေး နုံးခြိကာ ခှယေိုငျပြော့နှဲ့သှားမိလသေညျ။ ‘’ ပွှတျ ‘’ ကနဲ ‘’ ပွှတျ ‘’ ကနဲ နှဈခကျြဆငျ့စုပျလိုကျခွငျးကွောငျ့ကာမ အရသာထူးကွီး မှာ တဈကိုယျလုံး ကိုလှမျးမိုးလကျြမမြေ့ောသှားမတတျခံစားလိုကျရသညျ။ ထိုကဲ့သို့သတိလကျလှတျဖွဈသှားသညျနှငျ့အောငျမငျး က နှယျ့ကိုယျလုံး အိအိလေးကိုတှနျးလှဲပွီး နှယျ့ပါးစပျဝလေးသို့လီးကွီးကိုတလေို့ကျသကဲ့သို့သူကလညျး နှယျ့စောကျပတျကွီး ကို မလှုပျနိုငျမယှကျနိုငျဖွဈအောငျဆကျခါဆကျခါ ယကျလိုကျလေ၏။ ‘’ အှနျး – – -အှနျး ‘’ ဆါုသော အသံလေး နှငျ့အတူနှယျ့ ပါးစပျလေးထဲသို့အောငျမငျး လီးကွီးကတနျးဝငျသှားလေ၏။ ထိုသို့ – – မမြှျောလငျ့ပဲ ဆနျးပွားသော ထူးထှခေနျးနားလှသညျ့ အတှေ့ ထူးထူးကွီးကွောငျ့နှဈယောကသာျးမှာ လောကကွီး ကိုမသှေ့ားမိကွသညျ။
‘’ မမ – – ‘’ ‘’ မမနှယျ – – ‘’ အိပျယာမှနိုးနိုးခွငျး သဈသဈနှယျ့ကိုစမျးကွညျ့ရာမတှသေ့ဖွငျ့ – – ခပျတိုးတိုးချေါကွညျ့မိသညျ။ မမနှယျထူးသံကို ပွနျမကွားရသောအခါ ကွောကျစိတျနှငျ့ငေါကျကနဲ ထထိုငျလိုကျမိသညျ။ ဖကွေီးသျောကောငျး မကြှတျသေးဘး ဆိူုသော ဒျေါကွီးလှစကား က နားထဲပွနျဝငျလာပွီး ကွောကျစိတျက တဈကိုယျလုံး ကိုတောငျ့တငျးသှားစကော ဆီးသှားခငျြ သလိုလိုဘာလိုလိုဖွဈလာသောကွောငျ့ ထမီဘိုသီဘတျသီနှငျ့ထှကျလာခဲ့မိသညျ။ မမနှယျသညျလညျး အိမျသာသို့သှားသညျပဲ ဖွဈမညျဟုထငျကာ အိမျသာဘကျသို့ခွဦေးလှညျ့လိုကျ၏။ သို့သျောနှဈခနျးကြျောရှိ အဈကိုအောငျမောငျး အခနျးထဲမှလကျတဈလုံး ခနျ့တံခါးဟနပွေီး လေးပမေီးခြောငျးရောငျက အပွငျသို့စူးရှစှာ ထိုးထှကျနသေညျကိုတှလေို့ကျရသဖွငျ့ကွောကျစိတိအနညျးငယျ ပွကော အဈကို အောငျမောငျး အခနျးသို့ကပျလာခဲ့လသေညျ။
လောကဍျဖွဈလိမျ့မညဟျုထငျမထားသော လူနှဈဦးကိုမမြှျောလငျ့ပဲ တှေ့လိုကျသူတိုငျးမှာ ရုတျတရကျ ‘’ ရှော့ ‘’ ဟုချေါသော သှေးလညျပတျမှုတှရေပျတနျ့သှားတတျကွလသေညျ။ သဈသစသျမှာ ‘’ ရှော့ ‘’ ဖွဈခွငျးကို မိမိရရ ခံစားလိုကျရသညျ။ တံခါးကွား မှအထဲသို့ကွညျ့လိုကျမိသညျနှငျ့နှဈယောကျစလုံး အဝတျအစားမရှိကွတော့ပဲ မမနှယျစောကျဖုတျကွီး ကိုအဈကိုအောငျမောငျး က ယကျပေးနသေကဲ့သို့ အဈကိုအောငျမောငျး လီးကွီး ကိုလညျး မမနှယျက ခုံမငျနှဈခွိုကျစှာ စုပျနခွေငျး တို့ကိုမွငျလိုကျသညျနှငျ့ သဈသဈတဈကိုယျလုံး ကြောကရျုပျကွီးလိုတောငျ့တငျးသှားသညျ။ အဈကိုအောငျမောငျး လမှေးကွီးတှကေ မဲနကျမှောငျမဲ နပွေီး အရငျးတှငျကောကျရိုးပုံကွီးအလား ဟီးထနေ၏။ မမနှယျက သူမ၏ ဖွူလှသော လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့လမှေးမြား ကိုဖိကိုငျထားပွီး လကျတဈဖကျက လီးတနျကွီး ကို ဖွဲခထြား ကာ ရဲရဲကွီး ပွဲနသေော ဒဈဖွဲကွီး ကို မမနှယျ၏ နီစှေးပါးလှာသော နှုတျခမျးလေးဖွငျ့စုပျယူနသေညျ။
တဈခါတဈရံလီးကွီးကိုရခေဲခြောငျး တဈခြောငျး နှယျပါးစပျထဲ စုပျသှငျးပွီး အပွငျသို့ဆှဲထုတျလိုကျတတျ၏။ ကွောကွီးတှေအွ ဝိုငျးအရိုငျး ထကာ ကွောကျခမနျးလိလိကွီးထှားလှသော အောငျမငျး လီးကွီး မြိုးကိုသဈသဈမမွငျဖူးခြေ။ အဖြားကွီး က မှိုပှငျ့ ကွီးသဏ်ဍနျစှငျ့ကားနပွေီး ကိုယျထညျကွီး က အလုံးထှားထှား နှငျ့မို့အလိုးခံရသူမိနျးကလေး အဖို့တော့ – – မသကျသာလှဟု တှေးမိ၏။ သို့သျောထိုလီးတနျကွီးကိုမမနှယျက ပါးစပျလေးအပွညျ့စုပျခါစုပျခါ ကလိနပွေနျသော အခါ သဈသဈမှာ ထိုလီးကွီး အလိုးကို ခံခငျြစိတျတှေတဖှားဖှားပျေါပေါကျလာပွီး စောကျပတျထဲမှအရမြေား ပငျယိုစိမျ့ ကဆြငျးလာလတေော့သညျ။
‘’ နှယျ – – မောလား- – ဟငျ ‘’ ‘’ မောတယျ – – မောငျရယျ – – နားကွဦးစို့ ‘’ နှယျက ဒယီးဒယိုငျလေးထရငျး မောငျ့ခေါငျးကိုခှ ထားသော ပေါငျတနျကွီးကိုကားပွီးကြျောကာခြ၏။ ထိုသို့ကားလိုကျစဉျ စောကျပတျကွီး ရဲခနဲဖွဈသှားသညျကိုသဈသဈမွငျ လိုကျပွနျသညျ။ မမနှယျ စောကျပတျကွီး ဒီလောကျကွီးလိမျ့မညျဟုသဈသဈမထငျခဲ့ခြေ။ မမနှယျစောကျပတျကွီး မှာ အလြား အနံသာမက ဖောကျပါ နကျရှိငျးလမေညျဟု မွငျရုံနှငျ့သိနိုငျသညျ။ ဘေးသို့ကားထှကျနသေော စောကျပတျဧရိယာ အသားတဈကွီး မြား က လကျနှဈလုံးမက ထူအမျးနသေညျ။ လကျသီးဆုပျကွီး တငျထားသလို မို့မောကျကာ ခုံးထနခွေငျးကွောငျ့လညျး စောကျ ပတျကွီး မှာ အဟနျ့ကောငျးလှနျးသညျဟုဆိုရမညျ ထငျသညျ။
မမနှယျက ထမီကိုလြှောခပြွီး ဝတျသညျ။ ပွကေနြသေော ဆံပငျမြား ကိုထုံးဖှဲ့သညျ။ လကျနှဈဖကျမွှောကျကာ ဆံပငျထုံးနစေဉျ အောငျမငျး က မမနှယျနို့ကွီးနှဈလုံးကိုတပွှတျပွှတျစို့သညျ။ ‘’ ဟိတျ – – – နို့မပွတျသေးတဲ့ကလေးလား – – ခိခိ – – – ခိခိ ‘’ မမနှယျက အောငျမငျး နဖူးကိုလကျသီးလေးနှငျ့ဖှဖှလေးထုရငျး ရယျသညျ။ နို့အုံကွီး ကိုလညျး နို့ညှဈသလိုအရငျးမှကိုငျကာ ညှဈ ပေးနသေညျ။အောငျမငျး လီးကွီးကမူ – – အောငျမငျးတံတှေးမြား နှငျ့ စိုစှတျတောကျပလကျြမီးခြောငျးအရာငျအောကျတှငျ တဖိတျဖိတျအရာငျမြား လကျထနသေညျကိုသဈသဈတှေ့နရေ၏။ ‘’ တျောတော့မောငျရယျ – – နို့သီးခေါငျးလေးတှေလဲ ကြိမျး စပျနပွေီ – – အလကား – – ဟုတျတာလဲ မဟုတျဘူး – – တျောတော့ ‘’ နှယျတ မောငျ့ခေါငျးကိုလကျနှဈဖကျဖွငျ့ညှပျယူကာ ဆှဲ မော့ရငျး မကျြနှာခငျြးကပျခါ တိုးပွောသညျ။
‘’ နှယျ – – မောငျ့လီးကိုစုပျတာ ကောငျးလားဟငျ ‘’ ‘’ အာ – – – သှား – – မသိဘူး – – သှား – – – မမေးနဲ့ ‘’ မမနှယျက ခေါငျး လေးငဲ့စောငျးကာ ရှောငျတိမျးပွီး ရှကျပွုံးလေး နှငျ့မောငျ့ကိုတှနျးလှတျသညျ။ ‘’ မောငျတော့နှယျ့စောကျပတျကွီး ကိုယကျရတာ အရသာကို ရှိသှားတာပဲ – – သိလား ‘’ ‘’ မောငျ – – မရှံ့ဘူးလား – – – ဟငျ ‘’ နှယျက မကျြနှာလေး ရှုံရငျး – – မောငျ့ကိုကွညျ့ ကာမေး၏။ ‘’ ခဈြတာကို – – မရှံပါဘူး ‘’ ‘’ တို့တော့ရှံတယျ – – သူအတငျး ထိုးထညျ့လို့စုပျရတာ ‘’ နှယျက ဆငျဝရေ့နျရှောငျ လေးပွောရငျး မောငျ့ပခုံးကိုထုပွနျ၏။။ ‘’ အဲဒီလိုမှုတျပွီးရင လိုးလို့အကောငျးဆုံးပဲ နှယျ ‘’ ‘’ ဟအေ့ေး – – မလိုးခငျြဘူးကှယျ – – နှယျရှကျတယျ – – – ပွီးတော့မောငျ့ဟာကွီးက နညျးတာကွီး မဟုတျဘူး – – နှယျကွောကျတယျ ‘’
နှယျတ မူနှဲ့တဲ့အိုကျတငျလေး နှငျ့ပွောပွနျသညျ။ သဈသဈ – – ရငျထဲ – – တဒိနျးဒိနျး ခုံကာမောနသေညျ။ သူတို့လိုးမှ မလိုးရ သေးပဲ ဟုသိလိုကျသဖွငျ့လညျး – – စိတျထဲကနြေပျသလိုလိုဘာလိုလို ဖွဈရသညျ။ ‘’ ဒါဆို – – နှယျ့အဖုတျထဲ – – ကိုတရေုံ့ လေးတမေ့ယျလေ ‘’ ‘’ သှားစမျးပါ – – ယုံမယျ – – အားကွီးကွီး တပွေီ့းတဈခါထဲဆောငျ့သှငျးလိုကျမှာ မလား – – ဟှနျ့မသိ တာလိုကျလို့’’ မောငျက ကနြေပျကွညျနုးစှာ ရယျသညျ။ ‘’ နှယျ့ကိုမေးမလို့ – – သိလား ‘’ ‘’ ဘာလဲ ပေါကျကရ တှေမမေးနဲ့ နျော – – – ဟှနျ့ ‘’ ‘’ အငျးပါ – – နှယျရဲ့- – မောငျတကယျမသိလို့မေးမှာပါ ‘’ ‘’ မေးလေ – – ဘာသိခငျြလို့လဲ‘’ ‘’ ဟိုလေ – – အခုန – – နှယျစောကျ့ပတျကို ဖွဲကွညျ့တော့အစိနှဈခုတောငျတှတေ့ယျ – – အဲဒါကွီး က မိနျးမတိုငျး အဲလိုပဲ အရှညျကွီးလား – – – နှယျ – -ဟငျ ‘’
‘’ ဟငျ့အငျး – – အရပျပုတဲ့သူတှကေတြော့တိုတယျမောငျရဲ့ – – နှယျက အရပျရှညျတာကိုး – – ပွီးတော့အစိအောကျမှာ အသားပိုလေးလို တှမေိ့လား – – ဟိုဒငျး – – – အငျး – -ခပျမဲမဲလေး – – လေ ‘’ ‘’ အငျး – – အငျး – – တှတေ့ယျ – – – အဲဒါ က ဘာချေါလဲ ‘’ ‘’ အစိပဲလေ – – ဒါပမေယျ့သူက အသားပိုပေါ့- – သူ့ရဲ့အောကျကမှ – – – သေးပေါကျတဲ့အပေါကျလေးရှိ တာ – – မောငျကလဲ ကွံကွံဖနျဖနျသိပျမေးတာပဲ ‘’ ‘’ ဘာဖွဈလဲ အခငျြးခငျြး သိထားရတာပေါ့ ‘’ နှယျက သူမနို့ကွီးနှဈလုံး တှငျ စိုစှတျနသေော မောငျ့တံတှေးမြား ကိုအဝတျစ နှငျ့ဖိသုတျလိုကျပွီး မှဘရာစီယာလေး ကိုရငျဘတျရှတှေ့ငျကွယျသီးတပျပွီး မှ နောကျသို့ဆှဲလှညျ့သညျ။တငျးအိနသေော နို့ မြားကိုဘရာစီယာ ပုံစံခှကျအတှငျးသို့နောကျမှအသားကအြောငျသှငျးပွီး ပခုံးသိုငျးကွိုး လေးကို မ တငျလိုကျသညျ။ ‘’ မောငျ့ကိုလဲ မေးမယျနျော ‘’
‘’ မေး – – – ‘’ ‘’ မောငတျို့ကိုအခုလိုမှုတျပေးတော့ဘယျလိုနလေဲ – – ပွီးတော့ပါးစပျထဲရောကျသှားရငျကော ဘယျလိုခံစားရ လဲဟငျ ‘’ နှယျက မောငျ့ရငျဘတျမှေးကွီးမြားကိုဖှကစားရငျး မောငျ့မကျြနှာကိုမကွညျ့ရဲကွညျ့ရဲ လေး နှငျ့မေးသညျ။ ‘’ ယောကျြားတဈယောကျပနျးသနေရေငျတောငျဒီနညျး နဲ့ကုရငျတဈပတျအတှငျးသကျသာတယျတဲ့နှယျရဲ့- – ဟုတျတာ မဟုတျတာ တော့မောငျမသိဘူးနျောကွားဖူးတာ – – ပွီးတော့နှယျ့ပါးစပျထဲ လီးဝငျသှားပွီဆိုတာနဲ့ – – ဟို – – အငျး – – စောကျပတျကိုလိုး ရသလိုပဲနမှောပေါ့ – – – မသိဘူး – – ဘာလို့လဲဆိုတော့မောငျက နှယျ့ကိုလိုးမှမလိုးရသေးတာ ‘’
‘’ အငျး – – မောငျကလဲ – – မငျဂလာဆောငျပွီးရငျလိုးပေါ့လို့- – အခုဟာက နှယျကွောကျလှနျးလို့ပါဆို ‘’ နှယျက မောငျ့နားဝ တှငျကပျပွီး တီတီတာတာလေးခြှဲ၏။ မောငျက သကျပွငျး ကိုတှငျတှငျခရြငျး နှယျ့စောကျပတျကွီးကိုလကျနှငျ့ထိုးမှနေေ ပွနျသညျ။ ‘’ တျောတော့ကှယျ – – မောငျကလဲ – – အရတှေထေပျကလြာလို့ – – တဈခါထပျသုတျနရေအုံးမယျ – – အာ – လတျှတော့လို့ဆို ‘’ နှယျ့ထမီအောကျမှလြှိုနှိုကျနသေော မောငျ့လကျကွီးကိုခပျကွမျးကွမျးလေးဆှဲဖယျပွီး ရပျလိုကျသညျ။ ’ နှယျ့ အပျေါ အကြီရော – – အျောဒီမှာတှပွေီ့ – – တဈခါထဲအဝတျအစားတှလေဲ – – – ပပှေကုနျတာပဲ – – သှား ‘’
မောငျ့မကျြနှာ ကိုတီရှပျအကြီစလေးဖွငျ့ပုတျခတျဆော့ကစားပွီး မှအကြီကိုဝတျသညျ။အောငျမငျး က ပုဆိုးမဝတျသေးပဲ – – ငူငူ ကွီးထိုငျကာ။ ‘’ တောကျ – – – စောကျဖုတျကွီး ကိုအသအေခြာ မှုတျပွီး မှမလိုးရဘူးဆိုတာ တဈလောကလုံးမှာ ငါ တဈယောကျ ပဲ ရှိမယျထငျတယျ – – တောကျ – – ဟငျးဟငျး လကျသီးတဈဖကျလကျဝါးတဈဖကျနှငျ့ဖွောငျးကနဲ ထုကာ ကွိတျမနိုငျခဲမရကွီး ပွောခလြိုကျလသေညျ။ နှယျက သူ့ကိုယျလုံးလေးကို ရှတေို့းနောကျငငျဖွဈသှားအောငျပငျတခဈခဈရယျသညျ။
ပါးစပျကလေးကိုလကျဝါးလေးနှငျ့ပိတျထားပွီး ရယျပွနျသညျ။ ‘’ မောငျပဲ ပတျတငျး သဘောကတြယျဆို ‘’ ‘’ အငျး – – ပတျတငျး မလုပျပဲ– – ဆငျနငျးသှားရငျတောငျဒီလောကျခံစားရမှာ မဟုတျဘူး သိလား ‘’ မကျြနှာထားတငျးတငျး နှငျ့နှယျ့ကိုတဈ ခကျြမော့ကွညျ့ပွီးပွောလိုကျရာ – – နှယျက မောငျ့ပခုံးကိုကိုငျလှုပျရငျး ‘’ လုပျပွီ – – ခုနက တဈမြိုး – – အခုတဈမြိုး ‘’ ‘’ ဘာ – – – ခုနက တဈမြိုးလဲ ‘’ မောငျက ကလေးဆိုးကွီးလို ပါးကွီးဖောငျးကာ မကျြနှာညိုညို နှငျ့စိတျကောကျပွပွနျလသေညျ။
‘’ မောငျပဲ – – -ခုနက မမအဖုတျကွီးကို ကွညျ့ပွီးဂှငျးတိုကျရရငျကနြေပျပါပွီဆို – – – အခုကိစ ပွီးပွနျတော့တဈမြိုး – – တဈခါ ထဲ သူ့အလိုကွီး လိုကျနရေတာပဲ– – တကယျ ‘’ ‘’ ဒီမှာ – – မမ – – ဟိုလေ – – ဒီလိုဗြာ – – မမ စောကျပတျထဲတိုမောငျ့ လီးကွီး နဲ့စှတျကနဲ– – တဈခကျြပဲ လိုးမယျမမရယျ – – အရမေထှကျစရေပါဘူးနျောမမ ‘’ ‘’ အလယျလယျ – – လူလညျ လေး – – ဝါးနုက ဝါးရငျ့ကိုပတျခငျြနပွေနျပွီ – – တျောစမျးပါကှယျ – ဟငျး-ဟငျး ‘’ တရေုံ့လေးဆိုတဈမြိုး – – သှငျးရုံလေးဆို တာတဈမြိုး နှယျက မောငျ့ပါးကိုလိမျဆှဲရငျးရယျသညျ။ အောငျမောငျး နဲ့တှမှေ့နှယျ့အရှကျ – – နှယျ့ဂုဏျသိကာ တှေ တဈပွား သား မှမရှိတော့အောငျခဝါကခြဲ့ ရတာပါလား မောငျရယျ။
‘’ တကယျပါ – – မရယျ – – တဈခကျြပဲလိုးမှာ – – တဈခကျြထကျပိုသှားရငျ – – မမမောငျ့ကိုပါးရိုကျ ‘’ တဲ့ မောငျက ပွော ပွောဆိုဆိုနှယျ့ထမီကိုဆှဲလှနျသညျ။ မောငျသညျတကယျ့ကလေးဆိုးဖွဈသညျ။ မောငျကပုဆိုးမဝတျသေးသဖွငျ့မောငျ့လီးကွီးက ဆငျနှာမောငျးကွီး လိုယမျးခါနသေညျ။ ‘’ ကှယျ – – လုပျပွီ – – – မဟုတျတာ – – ဟိတျ – – – မောငျနျော ‘’ တကယျတော့ လဲ နှယျလဲအသှေးအသား နဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့သာမနျ – – မနုသ – -လူတဈဦးပါ ‘’ မောငျ – – – ဟအေ့ေးကှယျ – – ဟငျ့အငျး ‘’ နဲ့ပဲမောငျက ရငျခငျြးဆှဲအပျပွီး – – နှယျ့စောကျပတျကိုလီးကွီးဆှဲသှငျးပွီး လိုးခဲ့တာပဲမလား မောငျ့လီးတနျ ကွီး နငျ့နငျ့နဲနဲစောကျခေါငျးထဲကိုဝငျသှားကတညျးက မောငျကတိမတညျဘူးဆိုတာ သိပွီးသားပါမောငျ။
ဗွဈကနဲ– – ထိုးခှဲဝငျသှားတဲ့မောငျ့လီးရဲ့ဒဏျဟာ နှယျ့မကွေ့ောတှကေိုအကုနျပိတျပဈလိုကျသလိုပဲလေ။ နှယျမကျြတောငျလေး မြားမှေးစငျးကာ မောငျ့ကွောပွငျကွီးကိုတဈဖကျကဈြနအေောငျ ဖကျထားမိလိုကျသညျ။ ‘’ တဈခကျြထဲလိုးမှာ ‘’ ဆိုတဲ့မောငျဟာ ဖငျကွီးကိုခှာခှာပွီး ဆောငျ့လိုးနတေော့တယျလေ။ နှယျ့ဖငျတှေဆုပျဆှဲထားသလိုပါ ပဲကှယျ။ လီးကွီး က အလုံးအထညျထှား အလြားကလဲရှညျဆိုတော့လေ နှယျ့မှာရုနျးနိုငျတဲ့ ခှနျအားတှမေရှိပါဘူး – – မောငျက နှယျ့ကိုတှနျးလကျြ – – စားပှဲစောငျးတှငျတငျပွီး ခွနှေဈဖကျကိုသူ့ခါးတှငျညှပျထားစကော – – ဆောငျ့၏။ စားပှဲက စာရေးစားပှဲ။ စားပှဲပျေါ ရှိအထပျလိုကျအစီအရီတ ငထားတျဲ့စာအုပျမြား ပွိုကွသညျ။ စားပှဲထောငျ့စှနျးတှငျ တငျထားသောဂကျ (ဈ) မီးခွဈကလေး ဒေါကျကနဲကွမျးပွငျသို့ ကသြညျ။
မောငျက ခှနျအားနှငျ့ပွညျ့စုံသော ယောကျြားကွီးဖွဈ၏။ နှယျ့မှာသာ ကွီးမားအိစကျသော တငျပါးသားကွီးတှေ မရှိခဲ့ပါလငျြ – – နှယျ့ဖငျအရိုးတှကွေမှေကြိုးအကျကုနျပလေိမျ့မညျ။ ‘’ ပွှတျ – – ဖှပျ – – ပွှတျဖပျ – – ‘’ ဆါုတဲ့အသံတှကေလဲ တိုးတိတျနတေဲ့ ညဥျ့ဦးယံမှာ – – ပီပီသသကွီး။ ‘’ အား – – မောငျ – – ဖွညျးဖွညျး – – – နာတယျ – – – အ – – ‘’ ‘’ ခဏလေး – – အောငျ့ခံပါ မမရယျ – – မစောကျပတျကကဉျြးနသေေးတော့နယတာပါ – – အငျ – -အငျ့ – အား ‘’ မောငျက ဒရောသောပါကွီး အလုအယ ကျလိုး၏။ နှယျကလဲလေ အဲဒီ့လိုအကွမျးပတမျးလေးလုပျတာကိုပဲ သာယာတတျတဲ့မနျိးမမြိုးပဲလား မပွာတတျတော့ပါဘူး မောငျ – – ပခုံးနှဈဖကျပျေါကို ခွနှေဈခြောငျးစလုံး တငျလိုကျပွီး ဖွဈခငျြရာဖွဈတော့ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ခနာ ကိုယျကို စားပှဲပျေါ လှနျခြ လိုကျမိသညျ။
ခေါငျးကအနတေျောပွိုကနြသေော စာအုပျပုံပျေါရောကျသှားသညျ။ဖငျနှဈခွမျး က လှတျလှတျလပျလပျကွီး ဖွဲပေးထား သညျ့အတှကျ စောကျပတျကွီး က ပွူးထှကျနေ၏။ တံခါးဘကျသို့ခပျစောငျးစောငျး အနအေထားမြိုး လေးလှနျပေးထား သညျ့အတှကျ – – သဈသဈရငျသပျရှုမောရပွီ။ အဈကိုအောငျမောငျးလီးကွီး က ရှညျလြားကွီးထှားလှသညျမို့စောကျပတျကွီး ထဲထိုးစိုကျခလြိုကျတိုငျး မမနှယျခမြာ ခါးလေးကော့ကော့သှားသညျမှာ စားပှဲနှငျ့ခါးလေးကွားတှင – –ျခေါငျးအုံးတဈလုံးစာ လောကျကိုလှတျလှတျသှား၏။ ယောကျြားတှေ ဒါကွောငျ့မို့လို့လဲ ဖငျကွီးတာ ကို နှဈသကျကွတာပါလားဟု – – သဈသဈ – – မကျြမွငျကိုယျတှေ့သငျခနျးစာရမိသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျောအဈကိုအောငျမောငျး လီးတနျကွီး ကမမနှယျ စောကျခေါငျး ထဲ ‘’ဇှတျ ‘’ ကနဲတိုးဝငျသှားတိုငျး မမနှယျဖငျကွီးက စားပှဲပျေါတှငျပွားကသြှားပွီး ဘေးသို့ကားကားသှားသျောလညျး – – အိကနဲ – – နိမျ့ဆငျးပွီး တငျးကနဲ – – တငျးကနဲကနျတတျလာကာ အရှိနျနှငျ့လှဲရိုကျလိုကျသောဂှေးစိကွီး နှငျ့ဖောကျကနဲ ရငျဆိုငျမိ ကွ၏။
ထိုနညျးအတိုငျး အိကနဲ ဖောကျကနဲ ရငျဆိုငျလှုပျရှားနကွေလရော အောငျမောငျးဆီးခုံမဲမဲကွီးက မမနှယျဖငျကွီးနှငျ့ဗွဲကနဲဗွိကနဲ ပှတျကွိတျသံကွီးမှာ မွငျတှေ့ကွားသိနရေသော သဈသဈ၏ အသညျးဆိုငျကို အညှာမှကိုငျလှုပျနသေလိုတလှပျလှပျတသိမျ့ သိမျ့ဆတျဆတျတုနျနမေိပရော – – ကာယကံရှငျနှဈယောကျ၏ ခံစားမှုမှာ ဆိုဖှယျရာမရှိအောငျအရသာအထူးကွီး ထူးနကွေပေ တော့သညျ။ ‘’ မ – – ပေါငျတဈခြောငျးကို – – ဒီဘကျပွောငျး – အငျး ‘’ မမနှယျက ခွထေောကျတဈဖကျကိုအဈကိုအောငျမောငျး ခေါငျးပျေါမှကြှမျးဘားမယျမြားပမာ ဖွောငျ့တနျးစှာကျောယူလိုကျ၏။ အဈကိူအောငျမောငျး က ခွထေောကျတဈဖကျကိုဂြိုငျး အောကျထား တဈဖကျကို ပခုံးပျေါမှေးထားပွီး စောကျပတျကွီးထဲသို့ဒေါငျလိုကျလိုးပွနျလသေညျ။ သဈသဈမှာ လီးတနျကွီး အဝငျအထှကျကိုမမှိတျမသုနျလေး ကွညျ့နမေိရာ ဇောခြှေးမြားပငျပွနျနသေညျကိုသတိမမူမိနိုငျအောငျ ခံစားနမေိသညျမို့သရဲကို လဲ မနေ့မေိသညျ။
တဈစောငျးကွီး လိုးနသေောအခါ – – အခုလောကျထိမိပုံမပျေါပဲမမနှယျက ငုံ့ကွညျ့ရုံလေးကွညျ့ကာ သိပျနာကငျြဟနျမပျေါပေ။ ’ ညောငျးတယျ – – ခွထေောကျမွှောကျထား ရတာ ‘’ ‘’ ဒါဆို – – ခလြိုကျလေ – – မမ – – ကုနျးပွီးလိုးမယျ ‘’ အံ့သွစရာပငျ – – မမနှယျက – – အဈကိုအောငျမောငျးစကား ကိုကလေးငယျတဈယောကျနှယျတသှမေသမျိး လိုကျနာရငျးစားပှဲကို လကျနှဈ ဖကျဖွငျ့ထောကျပွီး ဖငျကွီးကိုအနောကျသို့ခပျကော့ကော့ လေးကုနျးပေးလိုကျသညျ။ သညျပုံစံသညျလညျး သဈသဈဖကျမှ မွငျကှငျးကောငျးသော ပုံစံဖွဈနကော ဘေးတိုကျအနအေထားမွငျရ၏။ အဈကိုအောငျမောငျး က လီးကွီးကိုလကျဖွငျ့ကိုငျပွီး စောကျ ပတျအဝကိုတလေ့ကျြမမနှယျပခုံးကို ကြောမှလှမျးဆှဲပွီး ထိုးသှငျးလိုကျစဉျလီးကွီးက ဝါးရငျးတုတျကွီးတဈခြောငျးလိုပငျ ကှေးကနဲ ဖွဈပွီးမှတနျးဝငျသှား၏။
‘’ ဗွှတျ ‘’ ကနဲ အသံကိသဈသဈနား နဲ့ဆတျဆတျကွားလိုကျသညျ။ မမနှယျတော့ဘယျလိုခံရမယျမသိ၊ သဈသဈရငျထဲမှာမူအောငျ့ သကျသကျဖွဈသှား၏။ ‘’ အိုး – – အိုး – – အိုး – – – မောငျရယျ – – ရှီး – – အား – – – ကြှတျကြှတျ ‘’ စားပှဲစောငျးလေး ကိုကိုငျထားသော မမနှယျလကျကလေးမြား ကဈြလဈြမွဲမွံစှာ ကိုငျထားရငျး ညီး ရှာသညျ။ ဗိုကျသားအောကျမှ ပှယောငျးယောငျး လေး အဖုတျလိုကျခြှနျနကွေသော အမှေးစုလေးမှာ ဇောငးသှားသညျ။ ဖငျကုနျးပွီး အလိုးခံရသော အလုပျသညျအတျော ထိသညျထသျသညျ။ မမနှယျနှာသီးဖြားလေးတှငျ ခြှေးလေးတှေပငျသီးလာကွ၏။
အဈကိုအောငျမငျးကလညျး ပခုံးကိုမဆှဲတော့ပဲ ခါးလေးကိုလကျနှဈဖကျဖွငျ့စုံကိုငျကာ တပွှတျပွှတျဆောငျ့တော့၏။ ‘’ ပွှတျ – ပွှတျ – ¬ ပွှတျ – ဖတျ – – ဖတျ – ပွှတျ – – – စှိ ‘’ ‘’ အငျ့ – အငျ့- အ – အ – အ – အငျ့ – – အားလားလားလား ‘’ အခနျးတဈ ခုလုံး လိုးသံညီးသံသကျပွငျးခသြံ – – တအငျ့အငျ့လညျခြောငျးထဲမှညီးတှားသံတို့နှငျ့သာစိုးမိုးနရော ခြောငျးကွညျ့နသေော သဈသဈခမြာ သူမ စောကျဖုတျလေး ကိုလကျဖွငျ့ အုပျပှတျနမေိရာမှအားမရတော့ပဲ ထမီလေးကိုလှနျကာ စောကျပတျထဲသို့ လကျခလယျလေးဖွငျ့ထိုးမှကေလိနမေိလတေော့သညျ။
အိစိုသော စောကျခေါငျးအတှငျးမှစောကျရညျကွညျမြား စိမျ့ထလာကွသညျ။ စောကျပတျအောကျဖကျထောငျ့ခြှနျးလေးမှနကော စောကျရညျမြားက ဖငျကွားမှတဆငျ့ပေါငျသို့စေးကပျစေးကပျနှငျ့ လြောတိုကျဆငျးသညျ။ တံတှေးကို မကွာခဏ မြိုခနြရေ သော လညျခြောငျးအတှငျးမှအဈတဈတဈကွီး ခံစားလိုကျရသလိုစောကျမှေး ပါးပါးနုနုလေးမြား ပေါကျရောကျရာ စိမျးစိုစ ဆီးခုံမို့မို့ လေးမှာလညျး အောငျ့သကျနာကငျြစှာ ဆီးကငျြသော ဝဒေနာကိုခံစားလာမိရသညျ။စကျသနေတျပဈသလို ဒလစပျဆောငျ့လိုးလိုကျ ပွီးမှအဈကိုအောငျမောငျး က မမနှယျ ကြောပွငျလေးပျေါဝမျးလြားမှောကျဖိကပျကာ ရငျဘတျမှေးကွီးမြားနှငျ့ ပှတျနပွေီး ‘’ ခဈြ လိုကျတာ မမ ရာ ‘’ ဟုမောသံကွီး နှငျ့ပွောကာ မမ ဂုတျသား နုနုလေးကိုသှားဖွငျ့မနာ့တနာလေးကိုကျရငျး – – သုကျရညျပူပူနှေးနှေး ခြှဲခြှဲပဈပဈမြားကို မမနှယျစောကျပတျထဲရှိသားအိမျ၏ အနကျရှိုငျးဆုံး အတှငျးကဆြုံး နရောလေးထဲသို့ဒလဟော ဗဈြကနဲ ဗဈြကနဲနအေောငျပနျးထုတျလိုကျလတေော့သညျ။
ဖငျကွီးမှာလညျး ငလငျြပွငျးထနျစှာ လှုပျသလိုဘယျညာခါရမျးသှားပွီး ကော့ကော့ဆောငျ့လကျြစောကျပတျအတှငျး မှ စောကျရေ မြား ကိုညှဈထုတျပေးနမေိ၏။ ‘’ မောတယျ – – ‘’ မမက လီးကွီးကိုဖွုတျကနဲ ဆှဲခြှတျလိုကျသညျနှငျ့မောတယျဟုဆိုကာ ကု တငျပျေါခွပေဈလကျပဈ လေးလှဲခလြိုကျလသေညျ။အဈကိုအောငျမောငျး က မမနှယျဘေး တှငျယှဉျအိပျလိုကျပွီး မမနှယျကို မွတျ မွတျနိုးနိုးလေး ဖကျထားရငျး။ ‘’ အား – – – ကောငျးလိုကျတာ မမနှယျရယျ ‘’ ဟုဆိုတာ့မမနှယျက အဈကိုအောငျမောငျး နဖူးကို လကျညိုးလေး အသာထောကျကာ – – – ‘’ သှား – – – သနောလေး – – လူငယျသလောကျလီးကွီးတဲ့အကောငျ – ဟှနျး – – ပွောတော့သှငျးရုံလေးဆို – – တဈခကျြတညျး ဆို – – – တဈခကျြထကျပိုရငျပါးရိုကျဆို – လူပါးလေး – – ဟငျးဟငျး ‘’ အောငျ မငျး တသိမျ့သိမျ့ရယျသညျ။
‘’ မမ – က မောငျ့ကိုသိပျအလိုလိုကျတာပါနျော ‘’ ခံခငျြမိတော့လညျးဒီလိုပဲပေါ့နျော၊ ‘’ အဟငျး မ- က မောငျ့ကိုတကယျခဈြတာပဲ‘’ ‘’ အလိုတျော – – မငျးကိုအပြျောတမျးခဈြတယျလို့မြား မငျးထငျခဲ့လို့လားဟငျ ‘’ ‘’ မဟုတျပါဘူး မ အခုလို – -အငျး – – လိုးလိုကျရတော့- မောငျ့ဘကျကပိုခဈြသှားတာပေါ့ ‘’ အဈကိုအောငျမောငျး မကျြနှာ သညျတဈခါမှမမွငျဘူးလောကျအောငျပငျ – ကလေးဆနျစှာ ပွောနခွေငျးကွောငျ့မမနှယျမကျြနှာလေး မှာ ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးတဈယောကျ၏ မနူးမနပျ မကျြနှာပေး လေးဖွဈနရေသညျ။ မမနှယျက အဈကိုအောငျမောငျးလညျပငျးကွီး ကိုဟီးလေးခိုပွီး တခဈခဈရယျပွီး မှတီးတိုးလေးပွော လိုကျ၏။ ‘’ မောငျ မောပွီလားဟငျ ‘’ ‘’ ဟငျ့အငျး – – – ဘာလဲ မကထပျပေးမလို့လား ‘’
‘’ မောငျ့သဘောလေ – – ဟုတျပွီလား ‘’ သဈသဈမမနှယျအစားရှကျလိုကျတာ တျောပွီပေါ့ဟုတျဘူးလား ကိုယျက မိနျးကလေး ပဲ ဟာ. အို – – အခုတော့မမနှယျကို ကွညျ့ရတာ ဆပျဆလူးကိုခါနတေော့တာပဲ၊ လကျကလဲအဈကိုအောငျမောငျး လီးကွီးကိုကောကျညှငျးပေါငျးဆုပျသလိုတငျးကနဲ တငျးကနဲ ဆုပျနလေရေဲ့။ အောငျမောငျး ဆိုသော သူကလညျး အစကတညျးက မောငျးတငျထားတာ – – သိတယျမို့လား။ စိနျချေါရငျတိမျပျေါအထိလိုကျမဲ့ လူစား – – – ဗလကလညျး တျောရုံမိနျးမဆိုဆှဲညှဈလိုကျတာ နဲ့အရိုးအကျသှားလောကျတဲ့ သူ – -ဒီလိုလူစားကိုမမနှယျမဖွုံဘူး ထပျပွီးတော့တောငျစိနျချေါနသေေး ၊ အံ့လညျးအံ့ပါရဲ့အရှကျတှလေဲ မရှိကွတော့ဘူး၊ အို – – – သဈသဈသူတို့ကိုကွညျ့ရငျးလှုပျရှားနတေဲ့စိတျတှေကိုမနိုငျမနငျး စုစညျးသိမျးဆညျးနရေငျးက – – မမနှယျ က ပကျလကျ လှနျပွီး ကုတငျပျေါအိပျခလြိုကျတဲ့ အောငျမငျးလီးတနျကွီးပျေါကိုကားယားခှပွီး လီးတနျကွီးကိုကိုငျပွီး စောကျပတျထဲထညျ့ နတေဲ့အခြိနျ။ သူတို့ကိုကြောခိုငျးလိုကျမိသညျ။
မောငျနှမ – – မောငျနှမ – – နဲ့ဘာ မောငျနှမတှလေညျး – – ဘယျမလဲ သိကာ – – အရှကျ – -စညျးကမျး – – – ဟငျးဟငျးဟငျး။ ဖွဈပါတယျ – – မိသဈဆိုတာကလညျး မှေးကတညျးက တဈကောငျကွှကျ တဈမကျြနှာ တဈကိုယျတညျး ။ ကိုယျထငျရာလုပျ ကွစတမျး ဟဆေို့ရငျအဈကိုအောငျမောငျးလိုပဲ မိသဈမိုကျရဲတာပေါ့။ စဉျးစားကွညျ့လေ အဈကိုအောငျမောငျးပျေါ ရငျခုံ စိတျဝငျစားခဲ့မိတာက မိသဈပါ – – အခုတော့ဘယျအခြိနျက – – ခွပေုနျးခုတျနကွေမှနျးမသိတဲ သူ့တို့နှဈယောကျရဲ့အရှုပျ ထုပျကို မိသဈအသိနောကျကခြဲ့ပွီး ကိုယျ့ဖာသာပဲတဈယောကျထဲရှကျရတယျ။ လူတကာသာ ဒီအကွောငျး သိကုနျရငျ – – မိ သဈတို့တဈအိမျသားလုံး အိမျအပွငျတောငျထှကျရဲမှာ မဟုတျတော့ဘူး မဟုတျလား။ အခှတော့အထီးကနျြဘဝလမျးမှာ မိသဈ တဈကောငျကွှကျမ – – အဖျောမဲ့စှာ – – လြှောကျရပွီပေါ့ ——။ ကနျြနသေေးသော အပိုငျးမြားမှာ မိသဈ၏ဇာတျလမျးမြားဖွဈနသေော ကွောငျ့ဤနရောတှငျအဆုံးသတျလိုကျပါသညျ။ – – – – – – ပွီးပါပွီ – – – – –
မျက်နှာချင်းဆိုင်းလိုက်မိသည်နှင့်ကိုယ့်ဖက်ကသိမ်ငယ်သွားမိ၏ ။ မရယ်မပြုံးသော်လည်း ဝမ်းသာပီတိဖြစ်သည့်မျက်လုံးများနှင့် စိုက်ကြည့်နေသည်ပာုပဲ — ခံစားလိုက်ရသည်။ ‘‘ ဗိုလ်ချူပ်ဈေးသွားချင်လို့ ’ ‘’ ဟုတ်ကဲ့ — တက်ပါ ’’ ကားတံခါးကိုဖွင့် ပေးပြီး — နောက်ခန်းအတွက်ထုင်ိခုံကိုလှန်ပေးလိုက်စဉ် — သူမက — ထုံးစံအတိုင်းမရယ်မပြူံး နှင့်ပင်ပြောသည်။ ‘’ ရပါတယ် — ရှေ့ခုံမှာပဲထိုင်မယ် ‘’ အသံ — အပြောလေးတွေက — ဟိုးတုန်းကလိုပင်ဖြစ်သော်လည်း — မျက်နှာအမူအရာကမူအနည်းငယ် ရင့်ကျက်သွားသည်ထင်၏။ ခန ကိုယ်ကတော့ — ယခင်ကထက်နှစ်ဆလောက် — ပွသွားသလိုပင်။ ယခင်ကသူမထံမှ ပြန့်လွင့် လာလေ့ရှိသော ရေမွှေးနံ့မှာ ယခု — ခပ်စူးစူးရေမွှေးနံ့က တစ်ကားလုံးမွှေးကြိုင်သွားအောင်သင်းပျံ့သွားသည်။
‘’ ကားမောင်းနေတာကြာပြီလား — အောင်မင်း ‘’ ‘’ ဟုတ်ကဲ့ — ငါးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ — မမနွယ် ‘’ ‘’ မန်းလေးကိုပြောင်းသွား သေးတယ်ဆို — ဟိုမှာအဆင်မပြေလို့လား — အို — ဆောရီး — မမနွယ်မှားသွားတယ်။ ‘’ ‘’ ရပါတယ်မမနွယ် — အဆင်မပြေ ဘူးလို့ပဲဆိုပါတော့ — ကျွန်တော်မောင်းတဲ့သုံးဘီးတွေကိုမန်းလေးမှာမောင်းခွင့်ရှိတော့ ဟိုကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာငါ — ကိုယ် ကနယ်မြေမှမကျွမ်းတာ ‘’ သည်အထိ — မိတ်ဆွေဟောင်းအဖြစ်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အသိအမှတ်ပြု — နေကြဆဲဟု – – စကားတွေကသက်သေခံနေခဲ့သည်။
‘’ မမတို့အဆင်ပြေတယ်မို့လား – – ကလေးတွေရော – – ‘’ ‘’ မင်း – – ဘာပြောလိုက်တယ် ‘’ မမနွယ်က – – ဆတ်ကနဲတစ် ကိုယ်လုံး တောင့်တင်းသွားကာ – – အောင်မင်းကိုတအံ့တသြ ပြန်မေးလိုက်သည် ‘’ အဆင်ပြေတယ်မို့လား – – လို့ ‘’ ‘’ မဟုတ်ပါ ဘူး – – နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်း ‘’ ‘’ က – -လေးတွေရောလို့မေးမိတာ – – ပါ ‘’ ‘’ ဟင်း ဟင်း ဟင်း – – မငိးဟာလေအခု ထိကိုသတိကြောင် – – အသည်းကြောင်တတ်သေးတာပဲ– – မင်းသုံးဆယ်ကျော်ပြီပေါ့ – – ဟုတ်လား ‘’ ‘’ ဟုတ်ကဲ့ – – သုံး ဆယ့်နှစ်ပါ ‘’ ‘’ ပြောင်းလဲဖို့ကောင်းပြီ – – ရင့်ကျက်လာဖို့ကောင်းပြီပေါ့ ‘’ ‘’ ကျွန်တော် – – – ‘’ ‘’ တော်ပြီ – – အောင်မင်း – – အဲဒီရှေ့မှာပဲရပ် – – ရော့ ‘’ ‘’ မယူပါဘူး – – မမနွယ် ‘’ ရာတန်ကိုင်ထားသောမမနွယ်လက်များက တဆတ်ဆတ်တုံနေ သလိုပင် – – ပြီး မပွင့်တပွင့်ပြောကာ ရာတန်ကိုအောင်မင်း ပေါင်ပေါ် – – ချထားခဲ့သည်။ ကားထဲမှဆင်းလိုက်သည်နှင့်နောက်ကို တစ်ချက်ကလေးမှလှည့်မကြည့်။
အောင်မင်း – – ရှက်ရွှံ့ကြေကွဲစွာ မျက်ရည်ဝဲသည်။ ‘’ မင်းကလေးတွေ နဲ့မင်းမိသားစုအတွက်ငွေရှာနေတာမလား – – မောင် မောင် – ရော့ယူထားလိုက် ‘’ တဲ့ အောင်မင်းကားကို – – ကြည့်မြင်တိုင်အထက်လမ်းအတိုင်း လေးကွေးစွာ ပြန်မောင်းခဲ့သည်။ သြော်သီတာရုံကြီးကလဲ မပြောင်းလဲသေး – – နောက်ပိုင်းဆေးရုံကြီး အလွန်မှ – – ကုန်းမို့မို့လေးထိပ်တွင် – –ဗနာပင်ကြီးလဲ– – ရှိမြဲ ။ ‘’ ဟယ် – – – အစ်ကို – – – အစောကြီးပြန်လာတယ် – – – ဟုတ်လား ‘’ ‘’ ပေကြီးကား – – – ကျန်လာပြီ – – – ပေကြီးကား – – – ကျန်လာပြီ – – – ‘’ တစ်ဦးတည်းသောသား နွယ်ဦးက – – – အိမ်ရှေ့သစ်ပင်ရိပ်တွင်ကစားနေရာမှ – – ကား ဆီသို့တဟုန်ထိုးပြေးလာသဖြင့် ဘရိတ်ကိုဆောင့်နင်းလိုက်ပါသည်။
‘’ မိသစ် – – တလေးကို – – – ဆွဲထားလေ ‘’ ‘’ သား – – – ဟဲ့ – ဟဲ့ — သား – – နွယ်ဦး ‘’ သစ်သစ်က – – နေရာတကာလေး သည်။ သားကပြေးတတ်လွှားတတ်စမို့နေရာတကာမြန်သည်။သားကိုပွေ့ချီပြီးနောက် – – အောင်မင်းကိုအသနားခံသလိုလေးပြုံး ပြသည်။ အောင်မင်း က သစ်သစ်မျက်နှာကိုခက်မာစွာ တစ်ချက်ကြည့်ပြီးကားကို – – ထားနေကျအိမ်ဘေးတွင် – – – ထိုးရပ်ပြီး – – – ဒက် (ရှ်) ဘုတ်ထဲမှလိုင်စင်စာအုပ်နှင့်ပိုက်ဆံကိုထုတ်ယူပြီး – – သားဆီလှည့်ခဲ့သည်။ ‘’ ဖေကြီး – – မုန့်မုန့် – – မုန့် မုန့်’’ ‘’ ဖေကြီး ရေချိူးပြီးရင် – – ညဈေးသွားမယ်လေ – – မုန့်လဲစားမယ် – – ကစားစရာလဲဝယ်မယ် – – ဟုတ်လား – – – သား ‘’ ‘’ အင်းအင်း – – အင်းအင်း – – မုန့်မုန် – – –့ မုန့်မုန့် ‘’
‘’ သားကလဲဖေကြီးက – – ရုပ်ရှင်လဲပြမှာတဲ့ – – – သိလား – – ဖေဖေနဲ့ – – သားသား ရေချိူးမယ် – – အဝတ်လဲမယ် – – – ဟုတ်လား ‘’ ‘’ အင်းအင်း – – မုန့်မုန့် – – – မုန့်မုန့် ‘’ ‘’ သစ်သစ် – – ကလေးကိုသာရေချိူးပေးးလိုက် – မင်းအိမ်စောင့်ကျန်ရမှာ ‘’ အောင်မင်း က ပြောပြောဆိုဆိုအိမ်ပေါ်လှည့်တတ်သွားသည်။ ‘’ ကိုရယ် – – ‘’ ဟုတိုးတိုးညီးရင်း မျက်ရည်ဝဲကျန်ရစ်သည်။ သည့်နှယ် – – မျက်ရည်ကျရသောအကြီမ်ပေါငိးလဲမနည်းပြီ – – ရှည်လျားစွာကျန်ရစ်သောနှစ်ပေါငိးများစွာကို – – ကျော် ဖြတ်လာသည့်တိုင်အောင်မင်း သစ်သစ်အပေါ်အခဲမကြေနိုင်ပါကလား။
‘’ ပွမ် – ပွမ် ‘’ ‘’ ဟေ့ – – မပြီးသေးဘူးလား – – ဒရိုင်ဘာ ‘’ ‘’ လာပြီ – – မမနွယ် – – လာပြီ ‘’ ပေါ်တီကိုအောက်မှ – – ဖယ် မလီယာ ဖိုးဒိုးလေး ဟွန်းကိုတပွမ်ပွမ်နှိပ်ခါ – – နွယ်ကကုန်းအော်သည်။အောင်မင်းကျောင်းလွယ်အိတ်လွယ်ရင်း – – ဘောင်းဘီခါးပတ်ကိုအပြေးအလွှားပတ်ထွက်လာသည်။ ‘’ လုပ်လာပြန်ပြီ – – ဗရိုဗရဲ – – မောင်မောင်ရယ် ‘’ ‘’ ညက – – ဟုမ်း ဝပ်တွေ– – မပြီးလို့မမနွယ်ရဲ့ အဲဒါလုပ်နေလို့ ‘’ ‘’ ကိုးနာရီထိုးတော့မယ် – – ဒီမှာ – – တွေ့လား ‘’ ‘’ ဟုတ်ကဲ့ပါ – – မှီ အောင်မောင်းပေးပါမယ် ‘’ ‘’ အမလေး အေးအေးဆေးအေးပဲ မောင်းပါ ကိုယ်တော်ကားမောင်းတတ်တာဖြင့်နှစ်ရက်နဲ့တစ်ပိုင်းးပဲရှိ သေးတယ် ‘’ ခြံထဲမှကားလေးမောင်းထွက်ခဲ့သည်။ မမနွယ်ထံမှသင်းပြန့်သော ရေမွှေးနံ့လေးကို အောင်မင်း ရှူရှိက်မိသည်။ ‘’ မနေ့က ဒယဒ်ီက မေးတယ် – – မောင်အောင်မင်းစာလိုက်နိုင်ရဲ့လား တဲ့ ‘’
‘’ အသဲအသန်ပဲလို့မပြောလိုက်ဘူးလား မမနွယ် ‘’ ‘’ ဒီက အကောင်းပြောမလို့ – – အင်း – – လိုက်နိုင်ပါတယ် – – လို့။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးက ပျင်းချင်တယ် – – – စာမကျက်ဘူးလို့ – – မကောင်းတာလေးလဲထည့်ပြောရတာပေါ့ဟဲ့ ‘’ ‘’ ဒီ့ပြင်ဟာ ပြော ရောပေါ့မမနွယ်ရယ် ‘’ ’’ စာမကျက်ဘူး ပျင်းတယ်ဆိုတော့မှတ်ကရော ‘’ ‘’ အမယ် – – ဒါပေမယ့်ဖေးဖေးမမတော့ပြောလိုက်ပါ တယ် – – စာမေးပွဲတော့အောင်မှာပါလို့လေ ‘’ ‘’ ဟေး – – ဒါမှ – – မောင့် – – မမ ‘’ ‘’ ဟဲ့ – – – လုပ်ပြန်ပြီ – – – ရှေ့ကြည့် မောင်း ‘’ အောင်မင်း မမနွယ်တို့အိမ်ရောက်သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိအုံးမည်။ မမနွယ်နှင့်အောင်မင်း တို့ချစ်သူဘဝရောက် ခဲ့ကြသည်။ မမနွယ်က နွမ်းပါးသော အားကိုးရာမဲ့အောင်မင်း ဘဝ ကိုသနားရာ မှချစ်ခဲ့ရသည်။
အောင်မင်းကတော့မမနွယ်၏ ကြင်နာမှုဖေးမမှုနှင့်အထိအတွေ့လေးကြေင့်ချစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်ကတော့ကွာသည်။ မမ နွယ်က အစိတ်ကျော်နေပြီ။ အောင်မင်း က နှစ်ဆယ်ပင်မပြည့်တတ်သေး။ သို့သော်အောင်မင်း က ထွားကြိုင်းလှသည်။ ရွာမှာနေ စဉ်ကတည်းက ဘောလီဘော အမြဲကစားသည်။ မမနွယ်၏ ဖခင် ဦးသော်ကောင်း နှင့်အောင်မင်းဖခင်ဦးတိုက်မောင်း တို့က အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဦးတိုက်မောင်း ဆုံးပါးသွားသောအခါ အောင်မင်း ကိုဦးသော်ကောင်း က ကျောင်းထားပေးရန်ခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မမနွယ်ညီမဝမ်းကွဲ သစ်သစ်ကတော့ဆယ့်နှစ်နှစ်လောက်ပဲ ရှိအုံးမည် – – ဖြစ်သည်။ဦးသော်ကောင်း အစ်မ မှမွှေးသော တူမဖြစ်လင့်ကစား – – သမီးတစ်ယော်နှယ်အလိုလွုက်ခဲ့သည်။ အောင်မင်း ကို သစ်သစ်က လုံးဝ ကြည့်မရ။ မမနွယ်က သူ့ထက်အောင်မောင်း ကိုအရေးပေးသည်ဟမြငု၏။ မမနွယ်နှင့်အောင်မောင်း ချစ်သူ ဘဝ သန့်စင်စွာ ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီး အိဒြေ ရရ နေခဲ့ကြသည်မို့ သစ်သစ်မရိပ်မိခဲ့။
မမနွယ်က – – – အောင်မောင်း တို့အ-ထ-က တွင်ဆရာမဖြစ်၏။ အောင်မောင်းဆယ်တန်းအောင်တော့သစ်သစ်ရှစ်တန်းရောကြပ်ီ။ယခင်ကလိုပင်မမနွယ်ကိုအောင်သစ်ကျေင်းပို့ပေးမြဲအလုပ်တစ်ခုအပြင်ကျောင်းမတူသော သစ်သစ်ကိုဆယ်ပို့ပေးရသော အလုပ်တစ်ခုပိုလာသည်။အောင်မောင်း ဒုတိယနှစ်ရောက်လာသည်အထိဘဝသည်စိုပြေစွာ လှပ သန့်ရှင်း နေခဲ့ကြသည်။
‘’ ဟေ့ကောင်အောင်မင်း လာအုံးပြောစရာရှိလို့ ‘’ ခင်မောင်ဝင်း က အောင်မင်း နှင့်အတန်းမတူသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံအောင် မင်း ကားနှင့်ပင်ပြန်လိုက်တတ်သည်။ ခင်မောင်ဝင်း က ပြောစရာရှိလို့ဆိုလျင်အနည်းငယ်ကြောက်ရသည်။ ဒီကောင်ကလက်ဖက် ရည်သောက်ချင်လျင်လည်း ‘’ ခန လာအုံးပြောစရာရှိလို့ ‘’ဆိုကာ ကင်တင်းဝင်တတ်သည်။ ‘’ မင်း – – -ဒီကိုလာ – – ပြောစရာ ရှိ ရင်ဒီမှာပဲပြော ‘’
‘’ ဟေ့ကောင် – – မင်းအတွက် – – သတင်းထူးကွ မထူးရင်ဆေးပေါလိပ်တောင်ဝယ်မတိုက်နဲ့‘’ခင်မောင်ဝင်း က အာမခံရဲရဲကြီးပေးနေပြန်သောကြောင့်အောင်မောင်း ခင်မောင်ဝင်း ခေါ်ရာလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲ သို့ဝင်လိုက်သွားရလေသည်။ ‘’ လက်ဖက်ရည် – – ဟေ့ – – နှစ်ခွက် ‘’ ‘’ နေအုံးလေ – – မင်းသတင်း က ထူးမှန်းမသိမထူးမှန်းမသိနဲ့ ‘’ အောင်မောင်း က တား သည်။ ‘’ ဟာကွာ – – မထူးရင် – – ကိုယ့်ဖာသာရှင်းမယ် ‘’ စားပွဲထိုးလေး လာချပေးသော – export ဒူးယားကိုကောက်ကိုင် လိုက်ရင်း – – စီးကရက်ကလေး ထောင်ကာ။ ‘’ မင်း – – ညီမ – -သစ်သစ် – – ရည်းစားထားပြီ – – ကိုယ့်လူ ‘’
‘’ ဘာ – – သစ်သစ် – – ရည်းစားထားနေပြီ – – ဟုတ်လား ‘’ အောင်မောင်း တအံ့တသြသာဖြစ်သည်။ သည်ထက်တော့ – – ထွေထွေထူးထူး မခံစားရချေ။ တကယ်တော့ – -လဲ သစ်သစ်နှင့်အောင်မင်း တို့ကသွေးဝေးလွန်း၏။ဘယ်နှဲ့လဲသတင်း မထူး ဘူးလားဟာ သစ်သစ်ရည်းစားထားတာ ကြာလှပြီဒါသတင်းထူးလားကွ – – – မထူးဘူး – – – သွားမယ် ဟေ – – မထူးဘူးလား – – ဟ – – ဟေ့ကောင်နေအုံးလေ ခင်မောင်ဝင်း လက်ဘတ်ရည်နှစ်ခွက်ဆေးလိပ်တစ်ပွဲ နင့်ကန့်လန့်ကန့်လန့်ကျန်ခဲ့သည်။ သည်မှာ အောင်မောင်း သစ်သစ်ကိုလူရာသွင်းပြီး စကားပြောဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့လဲ သစ်သစ်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုသည်ကိုတစ်အိမ်တည်း အတူတူနေသော အောင်မောင်းတို့ကသာ သတိမထားမိ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သစ်သစ်တင်ရင်ခါးလေးများက အချိုးကျကျ နင့်ပူရိသတို့မျက်စိကျစရာ အနေအထားလေးထဲရောက်လာ၏ အပြောအဆိုလေးတွေက အစ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းအမူအရာလေးများက အပျိုရိုင်းဟန်အပြည့်ဖြစ်လာသည် ယခင်က ဆိုလျင် အောင်မောင်းရှေ့မှာပင်ထမီဖြန့်ဝတ်နေတတ်သူ ” မိသစ် – – ” ” ရှင် – – – ” ကားတံခါးကိုဖွင့်ပြီး တတ်လိုက်သည် နှင့် အောင်မောင်းက ခပ်မာမာခေါ်လိုက်မိသည်။သစ်သစ်က လန့်ထူးလေးထူး ရင်း အောင်မောင်းကို ကြည့်သည်။ အောင်မောင်း သူ့ကို လိုက်ကြည့်နေသောအခါ သစ်သစ် ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ရွှေရင်လေး အစုံတဖျတ်ဖျတ်တုန်သည်။ ဘာများပြောမလဲဟုနားထောင်နေ စဉ်ကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့သဖြင့်သစ်သစ်နားမလည်စွာ အောင်မောင်းကိုခိုးကြည့်မိသည်။မမနွယ်ကိုဝင်ခေါ်ရအုံးမည်ဖြစ်၍လည်း ကားကိုမောင်းနေကျအတိုင်း သမိုင်းလမ်းဆုံအရောက်အရှေ့ဖက်သို့ထောင်ပြီး မောင်းခဲ့လေသည်။
အောင်မောင်းနာရီကြည့်သည် – – မမနွယ်ကျောင်းလွှတ်ဖို့ – – နာရီဝက်ခန့်လိုသေးသည်။ ” နင့်ကို – – – ငါစကားတစ်ခွန်း ပြော ချင်လို့ ” ” ရှန် – – – အော် – -အင်း ” နှစ်မိုင်ခန့်အတွင်ကျမှစကားကိုပြန်ဆက်၏ ။သစ်သစ် – – ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုံနေဝ သည်။ ကျားကျားယားယား တကသိုလ်ကျောင်းသား အောင်မောင်းကိုသစ်သစ် သူငယ်ချင်းတွေက အမြဲလိုမိတ်ဆက်ခိုင်းကြသည်။ သစ်သစ်ကလဲ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနှင့်ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ကာ ရှောင်ဖယ်နေမိခဲ့သည်။ ကြာတော့သစ်သစ်သူငယ်ချင်းတွေ လက်လျှောခဲ့ကြသည်။အောင်မောင်း ရုပ်ရည်က ကုလားမင်းသား အမီတာဘာဂျမ်း နှင့်အတော်တူသည်။ မျတ်လုံးမျက်ခုံးတွေက ထူထဲတောက်ပြောင်ကြသည်။ နှာတံက ထူးထူးခြားခြား ချွန်မြနေပြီး ဆံပင်ပုံစံက အမီတာဘာဂျမ်း ပုံ။
လက်မောင်း၌ – – အမွေးအမြင်တွေကလည်း မည်းနေအောင်ထူ၏ ။ ရင်ဘတ်မွေးများက ဘာကြောင့်မှန်းမသိသစ်သစ်ရင်ကို ခုန် စေခဲ့သည်၊ ဟိုနေရာမှာဆိုရင်ဗျစ်ခဲမှောင်မဲနေမှာပဲ ဟုတွေးရင်း မိမိဖာသာလဲရှက်ဖူးသည်။ ‘ နင်ရည်းစားထားနေပြီလား မိ သစ် ” ကားလေးကိုရဲဘော်ဟောင်းရိပ်သာလမ်းဘေးတွင်ရပ်ခါ – – ထိုစကားကိုနိဒါန်းမပါပဲ မေးသည်။ သစ်သစ် – – – ဆတ်ကနဲ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်သည်။ သူ့မျက်လုံးညိုကြီးများ နှင့်သစ်သစ်တစ်ကိုယ်လုံး ကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်သောအခါ သစ်သစ်မနေတတ်။ ” မထားပါဘူး – – – ဘာဖြစ်လို့လဲ – – အစ်ကို ” ” ငါ သတင်းကြားလို့မေးတာပါ – – ရှစ်တန်းဆိုတာ ဝိဇာ သိပံခွဲတဲ့နေရာ – – – မိသစ်အရေးကြီးတယ်။ ” ငါတို့က ဘဝတူတွေလေ – – ဦးလေး သော်ကောင်းကျေးဇူး ကိုအမြဲသတိရ နေရမှာ ”
သစ်သစ်ကိုဆယ်တန်းမှ မြင့်မောင်ဆိုသော တရုတ်ကပြားကလိုက်နေသည်မှာကတော့အမှန်ဖြစ်သည်။မြင့်မောင်သာမက ခင်ထွန်း – – စံရွှေတို့ကလဲလိုက်နေကြသည်။ သစ်သစ်ရင်ကခုန်ပဲ ဘုချည်းပြန်တောခဲ့သည်သာ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ – -သူဟာပထမဆုံး အကြိမ်မိသစ်ကိုအရေးတယူစိုးရိမ်တကြီး သတိပေးဆုံးမသည့် အတွက်ကြည်နူးကျေနပ်သည်။ ” အစ်ကို့စကားကို – – မိသစ် နားထောင်မှာပါ ” အောင်မောင်းမျှော်လင့်မထားသော ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သည့်စကားကြောင့် – – မိသစ်ကိုအောင်မောင်းသနားသွားမိ၏။ ” မိသစ် – – အရင်ကနဲ့မတူဘူး ” ဟုပြောရင်း မိသစ်ခေါင်းလေးကို – – ချစ်စနိုးလေး ကိုငဖွပြစ်လိုက်မိသည်။ မိ သစ်ရင်ထဲတလှပ်လှပ်ဖြစ်သွားကာ သူ့ကိုခပ်စွေစွေလေးကြည့်လျက် – – ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေးပြုံးမိသည်။
ကြည့်ပါအုံး – – ဒီဟာမလေးအပြုံးက အရင်နဲ့ဘာဆိုင်သတုံး – – ညို့ငင်အား လေးတွေနဲ့ပါလား – – – အင်းလေ ဒါကြောင့် လည်း ယောက်ျားလေးတွေ – – – စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့ – – – ခေါင်းကလေးငုံ့ထားသော သစ်သစ်လည်ဂုတ်သားလေးများတွင်မွှေးညင်းနုလေးများက – – ဗွေနှစ်လုံးဖြင့်ရင်ခုန်ဖွယ်။ လည်ဆံမွေးနုလေးတွေ ပေါက်ခါစ – – – မြင်းရိုင်းမလေးတစ် ကောင်ပမာ – – နုသစ်ပျိုမျစ်ခြင်းလကဏာ ကိုအနီးကပ်တွေ့ရ၏။ လက်ဖျံလေး၌လည်း – – – စိမ်းစိမ်းစိုစိုမွေးနုလေးတွေ စိုး မိုးစပြုနေပြီပဲ – – –ကောင်မလေး မငယ်တော့။အောင်မောင်း သက်ပြင်းချမိသည်။ အောင်မောင်း၏ သက်ပြင်းချသံကိုသစ်သစ် က – – – ခပ်ပြုံးပြုံးလေးမျက်လုံးစွေကြည့်ကာ – – – ဇက်ကလေးစောင်းပြီး ပြန်ငုံ့သွားသည်။
အောင်မောင်း ခေါင်းကိုခါရမ်းပြစ်လိုက်မိသည်။ မမနွယ်ထံမှ ရသော ကိုယ်နံ့နှင့်သစ်သစ်ထံမှဆွတ်ပျံ့သော ကိုယ်နံ့တို့ကကွာခြား လွန်းလှသည်။ မမနွယ်ထံမှပင်ကိုယ်ရနံ့တို့က – – – ဖုံးကွယ်လျက်ရေမွှေးနံ့ကသာ – – -ပြန့်လွင့်နေလေရှိသည်။ သစ်သစ် ထံမှမူ – – – အောင်သစ်တခါမှမခံစားဘူးသော အီလည်လည်အပျိုစစ်ရနံ့လေးကိုရှူရှိုက်နေရသည်မို့ရင်ထဲ၌ – – – တစ်မျိုးခံစား ရ၏။ လက်ဝဲဘတ်ပေါင်ကိုကားကူရှင်ပေါ်တင်ကာ – – သစ်သစ်ဘက်သို့တစောင်းလှည့်လျက်တတောင်ဆစ်ကိုကားကျောပေါ် တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်မို့ – – သက်ပြင်းရှိုက်ပြီး သည်နှင့်ခြေထောက်ကိုကလပ်လီဗာ ပေါ်ပြန်ချ လက်ကို ဂီယာတံပေါ်ပြန်အုပ် လိုက်ရင်း – – ။
” သွားကြစို့ – – – မိသစ် – – – မမနွယ် – – ကျောင်းလွှတ်တော့မယ် ” ” ဟုတ်ကဲ့ – – အစ်ကု ”ိသစ်သစ် – – ဘယ်နှယ့် ကြောင့်ထူးထူးခြားခြားကြီး ယဉ်ကျေးနေပါလိမ့်ဟု အောင်သစ်ဇဝေဇဝါ တွေးရင်း ကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့မိသည်။ နှစ်ယောက် စလုံးရင်မှာမူအတွေးကိုယ်စီနှင့်ပဲဖြစ်သည်။ သစ်သစ်က လည်းတချိန်လုံး – – ဖုတ်လေသည့်ငပိရှိသည်မျှမအောင့်မေ့ပဲဂရုမ စိုက်သလိုနေလာခဲ့သော အောင်မောင်း ၏ နှလုံးသားရေးရာ ဘာရေးရာ နှင့်စပ်လျင်းသိစကားလေးများကြားရမှုကြောင့်ကြည်နူးနေ တာ – – အောင်မောင်း သက်ပြင်းရှိုက်သံလေးကိုပင်မိသစ်ရင်ခုန်နေမိသေးသည်။
ဪ – – သည်အရွယ်ကလည်း – – သစ်ရွက်ကြွေသည်ကိုပင်လက်ခုပ်လက်ဝါးလေးတီးကာ – – ရယ်မောတတ်သော အရွယ် – – ။ ” မင်းညီမ – – လိုက်လာတယ် – – ဟေ့ကောင် – – – ဘာအရေးကြီးလို့လဲမသိဘူး – – – ခင်မောင်ဝင်းက – – စာသင်ခန်းမှ ထွက်ဆီးကြိုပြောပြီးသော ကြောင့်အောင်မင်း အပြင်ကို ကြည့်၏ ။ ကျောင်းအကျီ အဖြူလက်ရှည်ထမီအစိမ်း နှင့် ကျောင်းလွယ်အိတ်မပါသော သစ်သစ်ကိုတအံ့တဩတွေ့ရသည်။ ခင်မောင်ဝင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး – – မိသစ်ဆီလာခဲ့၏။ ” ဘာဖြစ်လို့လဲဟင် – – သစ်သစ် ” ” ဖေကြီး – – – အသဲအသန်ဖြစ်လို့ – – ကိုကို ”’ ” ဟာ – – – – – ” အောင်မင်း ခင်မောင် ဝင်းကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီး – – အိမ်သို့အပြေးသွားရန်ကားဆီသို့ဦးတည်ခဲ့သည်။ သစ်သစ်က မမှီမကမ်းလေး လိုက်လာ သည်။
” မမနွယ်ရော – – အကြောင်းကြားပြီး ပြီလားဟင် ” ” မမနွယ်က အိမ်ကိုအရင်ရောက်တာ – – – မမနွယ်ကြောင့် – – မိသစ်သိ တာ – -မမနွယ်ကိုဒေါ်ကြးလှီ– ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ် ” ကားကူရှင်ပေါ် ပြစ်ထိုင်လိုက်ပြီး – – – တစ်ဖက်တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ မိသစ်ဝင် – – ထိုင်ကာတံခါးပိတ်သည်။ တံခါးက ဂျက်မကျ – – ကားကို – -တလှိမ့်နှစ်လှိမ့်မောင်းပြီးမှ – – သစ်သစ်ဖက်မှတံခါးကိုလှမ်းဆွဲဆောင့်ပိတ်၏။ ထိုအခါ အောင်မောင်း ၏ ကြီးမားသော လက်မောင်းကြီးက မိသစ်နို့လေး နှစ်လုံး ကိုအိကနဲ ဖိကပ်မိကြသည်။ မိသစ် – – မျက်နှာလေး ရဲပြီးနောက်ကိုတွန့်သည်။အောင်မောင်း ရင်ထဲ – – ဒိတ်ကနဲပူသွား ကာ သစ်သစ်ကိုအားနာသလိုကြီးဖြစ်သွားမိသည်။
” ဆောရီး – – – မိသစ် – -တံခါးမကျလို့ ” ” အင်း – – – ပါ ” သည်စကား နှစ်လုံးအနောက်၌ နှစ်ယောက်ထဲသာ သိသာသော အတွေးလေးများက ပြန့်လွင့်သွားကြသည။် ကားက ဒေသကောလိပ်အတွင်း မှ ဖြတ်ထွက်လာရာ အရှိန်ပြင်းပြင်း နှင့်တွေ့လိုက် လေတိုင်းသစ်သစ်ကိုယ်လုံးလေးက အောင်မောင်းဘက်သို့ယိမ်းထိုးသွားသည်။ မဟာစည်ကွေ့နားရှိ – – – ဂျိုင့်ကြီးတစ်ခုကိုအ ရှောင် – – – ” ဂျိုင်း – -ဒုံး ” ” အမေ့ – -အို – – – ” ကားရှေ့ ဘီး တစ်ဖက်ကဂျုငိ့်ထဲကျပြီး – – ရှေ့အိပ်စယ်တန်နှင့်ဒုံကနဲ – – ဆောင့်လိုက်ရာ သစ်သစ်မဟန်နိုင်ပဲအောင်မောင်း ပေါင်ကြား သို့လက်ထောက်မိပြီး အောင်မောင်း ရင်ခွင်လေးထဲသို့ပြိုဆင်း တိုးဝင်သွားသည်။ ဤမျှလောက်နှင့်ဆိုပြသနာမရှိ – – ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီး ဆုပ်လိုက်မိသော သစ်သစ်လက်ကလေး က အောင်မောင်း ၏ ရှည်ရှည်လီးအတန်ကြီးကို မိမိရရကြီးကိုင်လိုက်မိခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်သည်။
တဒဂ လေးပါ – -တခဏလေးရယ် – – ကြာလှမှနှစ်စကန့် – – သုံးစကန့်ပဲပေါ့ – -အဲလိုကိုင်လိုက်မိသည်နှင့်သဘာဝဆန့်ကျင် ဖက်လိင် သဘောအရ လီးကြီးက ဒိုင်းကနဲသစ်သစ်လက်ကလေးကို ”တော့” လိုက်သလိုရုန်းထွက်လိုက်တာကြောင့်သစ်သစ် မျက်လုံးတွေပြာသွား၏။ အောင်မောင်းက သစ်သစ်ပခုံးလေးကို အသာဖက်ပြီး ပွေ့ထူ၏။ ” ငါ – – – စိတ်လောနေလို့ဟ – – မိသစ် ” အောင်မောင်း အသံက တစ်စုံတစ်ရာ ကိုဖုံးဖိရန်ကြိုးစား၏။ မိသစ်ကလဲ ရင်ခုန်နွေးထွေးစွာ လှုပ်ရှားနေသော အသံနငှ့်။ ” ဟုတ်တယ် – – ဖေကြီး – – – အတော်ဖြစ်နေတာ”မိသစ်သူမနေရာလေး၌ နေသားတကျ ပြန်ထိုင်မိချိန်ကားလေးက ဘုရား လမ်း လမ်းဆုံမှကွေ့ထွက်သည်။ မိသစ်သူ့လက်ဖဝါးလေးကို မသိမသာ ဆုပ်နယ်နေမိ၏။ ရင်ထဲမှတဒိန်းဒိန်းခုန်နေရင်းအောင် မောင်းကိုခိုးကြည့်၏။ ယောကျားပ်ီသချောမောခန့်ငြားသော အောင်မောင်း မျက်နှာကရှေ့ကိုမူထားလင့်ကစား မျက်လုံးစွေအကြည့်နှင့်သစ်သစ်တို့အကြည့်ချင်းဆုံကြသည်။
” ဒိတ် ” ကနဲ ရင်တွေခုန်ကာ မျက်နှာကိုကားရှေ့သို့ ပြန်လှည့်လိုက်မိကြသည်။ စကားမူမပြောဖြစ်တော့ – – – ။ ဦးသော်ကောင်း က – – လူကြီးရောဂါဖြစ်ပြီး တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေသည်မှာလည်း ကြာပြီဖြစ်သည်။ ကားလေး ပေါ်တီကို အောက်သို့ ထိုးလိုက် မိသည်နှင့်တံခါးဖွင့်ကာ အိမ်ပေါ်အပြေးအလွှားတတ်ကြသည်။ အိမ်ရှေ့ခန်း တွင်အိမ်နီးချင်းများရောက်နေ၏။” အဲဒါ ဦးသော် ကောင်း သား နဲ့သမီးတွေပေါ့အကြီးကောင်က တကသိုလ်ကျောင်းသား။ ”တစ်စုံတစ်ယောက်အသံကိုသဲ့သဲ့ကြားသည်။
” မောင်မောင် – – – ” မမနွယ်အခန်းဝ၌ အောင်မောင်း နှင့်ဆုံ၏။ မမနွယ်ငိုထားသဖြင့်မျက်နှာတွေနီရဲကာ မို့အစ်နေသည်။ ” ဖေဖေ – – – ဆုံးပြီ ” ” ဗျာ – – – ” ”ရှင် – – – ” သစ်သစ်ရော အောင်မောင်းပါ ငိုင်တွေသွားစဉ်သစ်သစ်က အောင် မောင်းလက်မောင်းကိုစုံကိုင်ပြီးရင်ဘတ်၌ မျက်နှာလေးဝှက်ကာ ကြူကြူပါအောင်ငိုလေတော့သည်။ မမနွယ်က – – – သစ်သစ် ပုခုံးလေးကိုဖွဖွဆုပ်နှယ်ပေး၏။ ” တိတ်ပါညီမရယ် – – – တို့မောင်နှမ သုံးယောက်စည်းစည်းလုံးလုံး – – ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေ သွားကြဖို့ပဲလိုတာ ” ” မိသစ် – – – အသက်တောင်မမှီဘူး – – မမနွယ် ” ဝမ်းနည်းဆို့နစ်သံလေးဖြင့်ပြောရင်း – – -ရင်ခွငထဲခ်ိုဝင်ငိုရှိုက်ပြန်သည်။ နွယ်နှင့်အောင်မောင်းက သစ်သစ်ကိုချော့မော့နှစ်သိမ့်ရင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အားကိုးစွာ ကြေကွဲစွာ ကြည့်ဖြစ်ကြသည်။
ဈာပန ကိတ်စ အဝဝကိုအောင်မောင်းဦးစီး ဆောင်ရွက်ရ၏။ မမနွယ်က အောင်မောင်းကိုသာ အလုံးစုံပုံအပ်ထား၏။ဒေါ်လှ (ထမင်းချက်) အဖွားကြီးက တမှောင့် ” သူ့သားသမီးတွေကို စိတ်မချလို့လားမသိဘူး မနေ့ညက စာကြည့်ခန်းဝမှာ ကျောပေးပြီး ထိုင်နေတာတွေ့လိုက်တယ် – – သိလား – –ငါဖြင့်ခေါင်းကိုဒီလောက်ကြီးသွားတာ ” သစ်သစ်က သူရဲဆိုလျင်တော့အသေ ကြောက်သည်။ နွယ်က – – ဒေါ်လှကိုခပ်စူးစူးလေးကြည့်ရင်း ” တကယ်တွေ့တာနော် – – – ဒေါ်လှ ” ” အမလေး – – – မဟုတ် ပဲနဲ့မပြောရဲပါဘူး – -ဆရာမရယ် – – ဘုရားပေးပေးကျမ်းပေးပေး ကျွန်မ လိမ်မပြောပါဘူး ”
ဒေါ်လှစကားနည်းသလောက်ဆုံး – -တစေ – – ဆိုလဲ သေးပါအောင်ကြောက်တတ်သော အဖွားကြီး ဖြစ်သည်။ ကြိုးစားရိုးသားသူ ဖြစ်သောကြောင့် – – နွယ့်မေမေရှိစဉ်ကတည်းက နွယ်တို့မိသားစုနှင့်နေလာခဲ့သည်မှာ သားသမီး များရှိသော ကျုံမငေး သို့ ပင်မပြန်တော့ပဲ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်။ ကြောက်သည်ဆိုကာ – – ရက်လည်ပြီး နောက်နေ့တွေ၌ – – – မမနွယ် နှင့်အတူသစ်သစ်ဝင်ဝင်အိပ်တော့သည်။ နွယ်နွယ်နှင့်အောင်မောင်း တို့မှာ ကိုးလိုးကန့်လန့်ဖြစ်ကြရသည်။ ဖေဖေဆုံးပြီး သည့်နောက် – – နွယ်နှင့်အောင်မောင်း ညတိုင်းလိုလိုနွယ့်အခန်းမှာ – – ဆုံကြသည်။
နွယ်ကတစ်ခုတော့စည်းခြားထားပါသည်။မင်ဂလာ မဆောင်သေးခင်ဘာမှ မလုပ်ရ ဟုအောင်မောင်း ကလည်း နွယ့်စကားအတိုင်း အပွတ်အသပ်လေးများ မှလွဲ၍ပိုပြီး အခွင့်အရေးမယူခဲ့ရှာပါ။ ထိုကြောင့်လည်း နွယ် – – – အောင်မောင်းအခန်းကိုသစ်သစ် အိပ်ချိန်၌ အောင်မောင်း အလိုကျ တိတ်တဆိတ်ကူးလာခဲ့ရသည်။ ” မိန်းကလေး က အဆောင်ကူးရတယ် – – – မောင်မောင် ရယ် – – – ရှက်စရာ ကောင်းနေပြီ – -တကယ်ပဲ ” နွယ်က – – မောင့်အခန်းထဲဝင်မိသည်နှင့်ရှက်စရာ မျက်နှာလေး နှင့်ပြော လိုက်သည်။ အောင်မင်း က နွယ့်ကို မပြုံးမရယ် – – – လေးစိုက်ကြည့်နေရင်းတံတွေး မျိုချသည်။ စွပ်ကျယ်ဂျိုင်းပြတ်လေး သာဝတ်ထားသောကြောင့်အောင်မောင်း ရင်ဘတ်မှအမွှေးများကိုအသည်းယားစဖွယ်မြင်ရ၏။
အောင်မောင်းက အမွှေးထူပြောသော သူ့ရင်ဘတ်ကြီး နှင့်နွယ့်ပါးပြင်လေးဖိကပ်မိသည်အထိသိ မ်းဖက်လိုက်သည်။ သင်းပျံ့ သော ရေမွှေးနံ့က စူးဝင်သွား၏။နွယ်က အလိုက်သင့်လေး သူ့ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်လိုက်ရင်း – – – ” ကောင်မလေး နိုးလာအုံးမယ် မောင – – – ”်” နိုးနိုး – – မမနွယ်ရယ် – – ဒီလိုညလေးပဲ တွေ့ရတဲ့ဟာကို – – မမနွယ်က – – မောင့်ကိုရှောင်ဖယ် ရှောင်ဖယ်နဲ့ ” ” အဲလိုမပြောနဲ့ – – မောင်မောင် – – မမနွယ်ကလူကြီး သိလား – – တွဲတွဲသွားသွား လျှောက်သွားလို့ ကောင်းတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူး – – ဆရာမ ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိကာလဲ ရှိသေး ”
” အဲဒါကြောင့်ပြောတာ – – ဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးလို့တောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ် – – မေမြို့ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပြီး လက်ထပ်ကြရအောင်ဆို လဲ” ” အလုပ်က ဒီမှာအခြေကျနေတာ မောင်မောင် – – ဖေဖေ့ရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလဲ – – မမပဲ ဆက်လုပ်နေရတာ – – ဒါတောင် အန်ကယ်စိုးရှိနေလို့ ” ” အဲဒီဦးတင်စိုး ဆိုတဲ့လူကြီးက မမနွယ်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ဟာ မရိုးသားဘူးလို့ထင်တယ်သိ လား ” ” အဟင်း – – ဟုတ်မှာပေါ့ ” နွယ်က မောင့်ကို – – စ – လိုစိတ်နှင့်ခပ်ပေါ့ပေါ့လေး ပြော၏။ အောင်မောင်းက – – နွယ့်ပု ခုံးအရိုးကျိုးမတတ်ဖျစ်ညှစ်ရင်း- – ။ ” မမနွယ်နော် – – ကျွန်တော့စိတ်ကိုမဆွနဲ့သိလား ”
ကျွန်တော်အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ – – ဘာမှမလုပ်ပဲအလှကြည့်နေတဲ့ပန်းကိုကျွန်တော့အရင်ခူးလို့ကတော့လား – – မယုံမရှိနဲ့ ဓားနဲ့ထိုးမှာ – – အဲဒါ – – အပြီးပြောတာ ” အောင်မောင်း က – – ကတုံကရီပြောရင်း နွယ့်ပါးပြင်မို့မို့လေးကို – – – နွေးကနဲ – – မွှေးလိုက်သည်။ လက်တစ်ဖက်က နွယ့်ရင်သားတစ်လုံးကိုဖိညှစ်ရင်း မချင့်မရဲ သက်ပြင်းချ၏။ ” မောင့်ကို – – မမနွယ်ကတိ ပေးထားတာပဲ မောင်ရယ် – – နွယ်အပျို့ဘဝ ကိုမောင့်ကိုပဲ ပေးမှာပါ ” ” မမနွယ်က ပါးစပ်ကပဲပြော သိလား ဟိုလူက အံတိုနေ ပြီမမနွယ်လိုလူလောက်တော့ဖြုတ်တောင်စားသွားအုံးမယ် ” ” ကဲပါ လွှတ်ပါအုံး အသက်ရှူလို့မရတော့ဘူး နွယ်က အောင် မောင်း ပေါင်ကိုလက်ကလေး ထောက်ကာ ရုန်းရင်းနှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ပြောလိုက်၏။ အောင်မောင်းက မချင့်မရဲနွယ့်နှုတ်ခမ်း လေးကို ပြွတ်ခနဲ စုပ်ပြီးမှလွှတ်လိုက်ရင်း။
” မမနွယ်ကို ဒီစာအုပ်ပြမလို့ – – ဒီမှာ ” စာအုပ်ကလက်နှစ်လုံးလောက်ထူသည်။ ဒေါက်တာ ” အီဆာမက်သရူး ” ရေးသားသော ” အနရယ်ကင်းသိကာမဖြေပျောက်နည်း ” စာအုပ်လေးကိုနွယ်ကခပ်တည်တည်ယူဖတ်လိုက်၏။ ” ဒါက အမနောက်နိုင်ငံက ဆေး ပညာအယူအစတွေပဲ – – ဒီထဲမှာ ” ဖတ်ကင်း ” ကိုမမနွယ်လေ့လာဖူးလား ” ” ဟင့်အင်း – – လိင်စာအုပ်တွေမှ မဖတ်ဖူးတာ ” ” ဒါကြောင့်အပျိုကြီး ဖြစ်နေတာ ဒီမှာကြည့်ပုံပါတယ် – – တွေ့လား မမနွယ် – – ဒါက ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးရော အန ရယ် ကင်းတဲ့နည်းပဲ” ” ဟင် – – မောင်ကလဲ – – – ဘာတွေပြမှန်းမသိဘူး ” ” မမနွယ်လဲ– – ဆရာမတစ်ယောက်ပဲဗျာ ဒါ လေးတောင်မှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင် – – ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ” ” အို – – – မဆိုင်တာ – – ဆရာမက – – ဒါတွေသိရမှာလား ”
” ဟာ – – သိပ်သိရတာပေါ့ – – -ဒါမှကိုယ့်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတပည့်လေးတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာ ” ” ပေးစမ်းပါ – – တစ်ခါထဲလက်ချာတွေပေးနေပြန်ပြီ ” နွယ်က ရင့်ကျက်ဟန်လေး ဖြင့်စာအုပ်ကိုဆွဲယူကြည့်၏။ ယောက်ျားလိင်တန်ကိုမိန်းမ က ဂွင်းတိုက်ပေးနေသကဲ့သို့မိန်းမစောက်ပတ်ကိုယောက်ျားက လီးသဏန်ပစည်း တစ်ခုနှင့်ထိုးသွင်းပေးနေပုံဖြစ်သည်။ ” အဲ ဒါ – – သမီးရည်းစားတွေလေ – – မမနွယ်ရဲ့ ” ” သိပါတယ်သူပဲဖတ်တတ်တာကျနေတာပဲမျက်စိရှက်ဖို့ကောင်းလိုက် တာ ” နွယ်က မျက်စိရှက်တယ်ဟုပါးစပ်က ပြောရင်း နောက်စာမျက်နှာများကိုလျှောက်လှန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်သည်။ သုံးလေးရွက် လှန်ပြီးနောက်သရုပ်ဖော်ပွံတစ်ပုံပေါ်လာ၏၊
” ဟင်း – – ဒီပုံကတော့ – – အတော်ဆိုးတာ ” အောင်မောင်းက နွယ့်ပုခုံးမှ ကျော်ကာလက်ကိုနွယ့်နို့ကြီးတစ်လုံးအား – – ညှစ် ကစားရင်း – – စာအုပ်ကိုကြည့်သည်။ ” ဒါက ညားပြီထင်တယ်မမနွယ်ရဲ့ကျွန်တော်လဲ အဆုံးထိမဖတ်ရသေးဘူး – – တစ်ချို့ ဝေါဟာရ တွေကျတော့ဆေးပညာ အခေါ်အဝေါ်တွေလား မသိဘူး – – နေအုံး – – အဲ – -အဲဒီမှာတွေ့လား ” နွယ်က အသံ လေးမပွင့်တစ်ပွင့်နှင့်ဖတ်ပြီးရယ်၏။ ” အလကား – – – ဘာတွေမှန်းလဲ မသိဘူး ” ” ပြောစမ်းပါ မမနွယ်ရဲ့သိရင်လဲဘာသာပြန်ပေးစမ်းပါ ” ” ကွယ် – – – ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေပါ – – ကလေးမရအောင်လုပ်တဲ့နညးပေါ့် – – မိန်းမအဂါ ထဲကို ပလတ်စတစ်စွပ်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာကို – – ယောက်ျားဆိုလဲ – – ဟိုဒင်းစွပ်ပြီးလုပ်ပေါ့ – – အဲဒါ – –ဘာမှမထူးဘူး ဒီမှာ ကြာလှပြီ – – အိမ်ထောင်ရှင်တွေ သုံးနေတာ ”
” ကျွန်တော်တို့လဲ အဲဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးလားဟင် – – – မမ ”အောင်မောင်း က အရဲစွန့်ပြီး မမ နားကပ်ပြော၏။ ” ကျွတ် – – မဟုတ်တာတွေကွယ် – – – ရှက်စရာကြီး ” ” ဘာရှက်စရာရှိလဲ မမရယ် – – မောင့်ဟာကိုစွပ်ပြီးလုပ်ကြမယ်လေ – – – မ ကောင်းဘူးလား ဟင် ” ”ဟေ့အေးကွယ် – – မကောင်းပါဘူး – – – မတော်တဆ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်ကုန်ရင်မမပဲ အရှက်ရမှာ ပြီးတော့လဲ ပတ်ဝန်းကျင်က မောင်နှမ လို့သိကြတာ ” တဖွဖွ– – ဆုပ်နယနေသော်– – နွယ့်နို့ကြီးပေါ်မှလက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သလို ပူးကပ်ထားသော ခနာကိုယ်နှစ်ခုကိုလဲဆတ်ကနဲခွါပြစ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ဝက်ကြီးတစ်ကောင်ပစ်ချ လိုက်သလို ပက်လက်ကြီးလှဲချရင်း ဟင်းကနဲ– – – ညီးတွားလိုက်သည်။
နွယ့်- – ရင်ထဲထိတ်ကနဲဖြစ်သည်။ နွယ့်ကိုချစရသော်မောင့်အဖြစ်ကလည်းစိတ်ညစ်စရာတော့ကောင်းသည်။ ချစ်သူတို့ သဘာဝ တွဲသွားတွဲလာလဲ မလုပ်ရ – – ။ လက်ပွန်းတတီး နေဖို့ကလည်းမသင့်တော် – – ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်သည်။ သူ့ခမျာ သနားစရာ – – ပုဆိုးအောက်မှ မတ်တောင်နေသော လီးတန်ထိပ်ကြီးက နွယ့်ရင်ကိုသိမ့်ကနဲတုန်လှုပ်စေသည်။ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ် ကန့်လန့်လေးမှေးကာ – အုပ်မိုးလိုက်ရင်း ။ ” မောင် – – – ” ခပ်တိုးတိုးလေးခေါ်သည်။ မောင်ကစိတ်ပျက်လက်ပျက် – – – မျက်နှာဖြင့်မျက်နှာကျက်ကိုသာ မော့ကြည့်နေပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းအောက်သို့သွင်းထားသည်။ ဂျိုင်းမွှေး မဲမဲကြီးများက ရှေးလျားလှသည်။
” မောင် – – လို့ဆို – – ထူးလေ ” ” မမပြန်ချင်ပြီမို့လား – – ပြန်တော့ ” အောင်မောင်း အသံက တကယ့်ကိုစိတ်တိုနေသံ။ ” မောင်ကကွယ် – – – ကလေးလေးလိုပဲ– – မတော်တာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ – – မ – – တောင်းပန်နေတာ ကျန်တာတွေကို မောင် ကြိုက်သလိုလုပ်နေတာပဲမို့လား – ဟင် ” နွယ့်အသံလေးက ဖြောင်းဖျနှစ်သိမ့်ရင်း ဝမ်းနည်းဆို့နင့်သံလေးဝဲလာသည်။ မောင်နွယ့်ကိုဤနယ်စိမ်းစိမ်းကားကား ဆက်ဆံလျင် နွယ်အငမတန်ဝမ်းနည်းလွယ်သည်။ မျက်ရည်ချက်ခြင်း ဝဲသည်။
အောင်မောင်း က နွယ့်မျက်နှာကို ဝေကနဲကြည့်ပြီး သက်ပြင်းချကာ – – ခွခေါင်းအုံးကြီးကို – – လှည့်ခွပြစ်လိုက်ကာ – – သိမ်း ဖက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ – – နွယ့်ကိုမကြည့်ပဲလည်း ပြောသည်။ ” ဟုတ်ပါပြီ – – မယ်မင်းကြီးမရယ် – – ကြွပါတော့ကြာရင် ကျွန်တော်မျိုး – – ဆးအောငီ့်ပြီးသေတော့မှာ မို့ပါ ” ရက်စက်လွန်း ဥပေခါပြုလွန်းပြီး – – အလွန်တရာမလေးမစားနိုင်လွန်းလေ ခြင်း ဟုတွေးရင်း ဒေါသထွက်၏။ ” မင်း – – -ဘယ်လိုသုံးနှုန်းလိုက်တာလဲ – – မောင်မောင် – – ဟင် ” ” မမနွယ်ကျွန်တော့ကို လာသတ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားဗျ ” ဆတ်ကနဲ– – လှည့်ပြောလိုက်သော အောင်မောင်း မျက်လုံးအိမ်မှမျကရည်ပူများ ဒလဟော စီးဆင်းလာနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသော နွယ်အရည်ပျော်သွားသည်။
” ကောင်လေး ကလည်းလေ – – အရမ်း – – ဆိုး ” နွယ်က – – အောင်မောင်းပုခုံးကိုဆွဲလှည့်ပြီး အောင်မောင်း ပေါင်ကြားမှလီး ကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ဆွဲဖြဲပေးရင်းပြော၏။ အောင်မောင်း ဒိတ်ကနဲ ဝမ်းသာသွားကာ ထ ထိုင်သည်။ ပြီးနောက်နွယ့်နှုတ်ခမ်းလေး ကို စုပ်သည်။ နွယ်က အလိုက်တင့်လေး မော့ပေးထားကာ မျက်တောင်ကြီးများမှေးထား၏။ အောင်မောင်း က နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူ နေရင်း ပုဆိုးကိုချွတ်ပြီး မမနွယ်လက်ကိုသူ့လီးပေါ် အုပ်ကိုင်စေကာ ဂွင်းတိုက်သလို စပေးလိုက်သည်။ အရှိန်ရလာ ပြီးသောအခါ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ မမနွယ် လက်ကလေးက လီးကြီးကိုမှန်မှန်ဆုပ်ကိုင်လျက် – – ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည်။
နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကမူ – – သံဂဟေဆက်သလို မြဲနေ၏။ အောင်မောင်းက လီးကြီးကိုကော့ကော့ပေးရင်း မမနွယ်၏ ပူးကပ်ထား သော ပေါင်ကြားထဲသို့လက်ကိုသျှိုသွင်း၏။ နွယ်က နှုတ်ခမ်းအစုံကိုကမန်းကတန်းခွါရင်း – – – ။ ” ဟေ့အေးကွာ – – မ – – ကိုမလုပ်ပေးနဲ့ – – နေပလေ့စေ – ဟင့်အင်း ” ” ဟာ – – အတူတူပေါ့ – – လုပ်ပါ – – မမနွယ်ရဲ့လှန်ပါ ” ” ဟင့်အင်း – – – ဟင့်အင်း – – အဲဒါတော့ – – မရဘူးဆရာ – – ဒီမှာသူ့ဟာကြီးကိုလုပ်ပေးနေပြီပဲ ဟာကို – – – တစ်ခါထဲ ”
မမနွယ်မျက်နှာက ရှက်သွေးတို့ဖြင့်နီရဲနေပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေ– – မသိမသာတုန်နေသည်။ လက်က လီးကြီးကိုကိုင်ထား သော်လည်း မျက်နှာလွှဲထားသည်။ ” ဒါဆိုမမဟာကို ကြည့်ရုံပဲကြည့်မယ် – – – ဘယ့်နှယ့်လဲ ” ” ဟာ မဟုတ်တာ – – – ကလေးကလား ” ” စောက်ပတ်မမြင်ဘူးသေးလို့ပါ – – မမနွယ်ရဲ့ – – – လုပ်ပါ ” ” မောင်နော် – – အပြောအဆိုအရမ်းရိုင်းတာ ပဲ ” ” ဒါဖြင့်မောင်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ ” ”သွား – – – ဘယ်လိုမှ – – မပြောနဲ့ ” နွယ်က လီးကြီးကိုလှည့်ကြည့်ရင်း – – – ” မ ပြီးသေးဘူးလား – – လက်ညောင်းလာပြီ – – – ” ဟုကလေးလေးတစ်ယောက်လို နှုတ်ခမ်းလေးစူကာပြောလိုက်သည်။
‘’ ခပ်တင်းကင်း – – အင်း – – ဆုတ် – – ဆုတ်ထား – – မြန်မြန်လေး – – – ဆောင့် – – ဆောင့် – – ဆောင့် – – အ – -အင့် ‘’ နွ ယ့်လက်ပေါ်မှ – – သူ့လက်ကိုအုပခ်ါခပ်ကြမ်းကြမ်းကြီး ကိုင်ဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ ‘’ မောင် – – မနာဘူးလား – – ဟင် ‘’ ‘’ ဟင့်အင်း – – မနာဘူး – – မမနွယ်ရဲ့ – – ကောင်းတာ ‘’ လီးတန်ကြီး က ပူနေသည်။ လီးထိပ်မှယိုစီးကျလာသော အရည်ကြည် များ က မမနွယ်လက်ချောင်းလေးများ ကိုစေးကပ်ကုန်သည်။ ‘’ အရေတွေ – – ထွက်တယ်နော် – – ဘယ်လိုလဲမသိဘူး – – အဲဒါ မပြီးသေးဘူး – -ဟုတ်လား – မောင် ‘’ ‘’ ဟင့်အင်း – – မပြီးသေးဘူး – – မမနွယ်ရဲ့သုက်ထွက်မှ ပြီးမှာ ‘’ ‘’ မလွယ်ဘူး နော် – – တော်တော်ကြာနေပြီ – – မ – – လက်ညောင်းလာပြီ ‘’ ‘’ မမနွယ် – – ကျွန်တော်ပြောသလိုလုပ်မလား ‘’ ‘’ မမနွယ် – – စောက်ပတ်ကိုကျွန်တော့်ကို ပြရုံလေးပြ ပြီး – – ခပ်မြန်မြန်ဂွင်းတိုက်ကြည့်- – အဲဒါ သုံးလေးချက်နဲ့ထွက်ရော ‘’ ‘’ အမလေး သူ့ ဆေးနည်း က လဲတစ်မျိူး ‘’
နွယ်က ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေးပြောပြီး အောင်မင်း နဖူးကိုလက်သီးဆုပ်လေး နှင့်ဖွဖွထုလိုက်သည်။အောင်မင်း က နွယ့်ထမီကို ဆွဲလှန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ခပ်ပျက်ပျက်မျက်နှာလေးဖြင့်သူမ ဖင်ကို ပြန်ငုံ့ ကြည့်လိုက်သည်။အောင်မင်း လီး ကြီးကိုကိုင်ထား သောလက်က အမှတ်တမဲ့ရပ်နေ၏ ။ ‘’ မမနွယ်က – – စောက်မွှေး သိပ်မပေါက်ဘူးနော် ‘’ ‘’ အင်း – – ဆယ့်ကိုးနှစ်ကျော်မှ ပေါက်တာ – – ပါးပါးလေး ‘’ အောင်မင်း က ထမီကိုခါးအထိဆွဲတင်ပြီးကြည့်သည်။ စောက်ပတ်ကြီး က ဖူးဖူးပြည့်ပြည့်ကြီးဖြစ် ကာ ဖောင်းကားလုံးထစ်နေပြီး – – အစိကြီးက တော်တော်ရှည်သည်။
ရှည်သည်ဟုဆိုသည်က အပေါ်ဘက်သို့ရှည်ထွက်လာခြင်း မဟုတ်ပဲ – – စောက်ပတ်နှစ်မွှာကြား ဍ်အောက်ဖက်သို့- – တစ်လစ် ကြီးတန်းဆင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။အောင်မင်း က စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်း တို လက်ညှိူးလက်မဖြင့်အသာဖြဲကြည့်ရင်း ‘’ ဆောင့် – – မမနွယ် – – ဆောင့် – – မမနွယ်စောက်ပတ်ကြီး ကို မြင်လိုက်တာ နဲ့ကျွန်တော့်လီးကြီး က အလိုလိုတောင်သွားတာ – – အား – – – ဆောင့် – — ဆောင့် – – – ဆောင့် – – နာနာလေးဆောင့်မမနွယ်ပေါင်ကားထားပေးလေ – – အား – အင်း – – မမနွယ်ရယ် – – ဒီစောက်ပတ်ကြီး ကိုတကယ်လိုးရရင် – – ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ နော် ‘’ ‘’ လုပ်ပြန်ပြီ – – တဆင့်ကဲမလာနဲ့- – သိလား ‘’ ‘’ အင်းပါ – – မ – – ရယ် – – အား – – – ထွက်ပြီထွက်ပြီ – – အိုးအိုး ‘’ နွယ်က လီးကြီးကို ကြည့်လိုက်သည်။ ဖြောင်းကနဲ ကန်ထွက်သွားသော သုက်ရည်များ က ခြင်ထောင်အမိုးကိုပင်ထိ၏။ ပထမဆုံးအချက်သည်အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ရေပြွှတ်နှင့်ပန်းထုတ်လိုက်သကဲ့ သို့မြန်သည်။ လီးကိုဆုပ်ကိုင်ထားသော နွယ့်လက်ကလေးထဲဍ်သံချောင်းကြီးလို မာတောင် သွားသော အထိအတွေ့နှင့်အကြောကြီးများ ထစ်ထစ်သွားသည်ကိုစမ်းသပ်ကိုင်မိရာ ရင်တစ်ခုလုံး လှုပ်ခါနေမိသည်။
ယောက်ျားလီးကြီး ကိုပထမဆုံး ကိုင်ဖူးခြင်းမို့လဲပူနွေးသော အထိအတွေ့က လက်ဖဝါး ဍ်ချွဲကျန်နေသည်။ ‘’ ဟွန့် – – – ပေကန်ုပြီ ‘’ နွယ်က – – အောင်မင်းပုဆိုး နှင့်လက်ကိုသုတ်သည်။ အောင်မင်း က ပက်လက်အနေအထား – – အောင်မင်း ဘေးတွင် ကု တင်အောက်ခြေတစ်ဖက်ချ ကာ ဖင်ဘက်က ကုတင်ပေါ် တင်ပေးထားပြီး ထမိန်ကိုလှန်ပြထားသည်မို့ – – စောက်ပတ်ကြီး က ပြဲ အာပြီး လိုးချင်စရာ အရည်လဲ့စိုစွတ်နေသည်။ နွယ့်အသားလေး က ပယင်းရောင်ထကာ ကြည်လဲ့နေသည်။ စောက်ပတ်ဘေး နှစ်ခြမ်းမှာ စပျစ်သီး စိမ်းညိုလေးတွေ လိုတင်းလျက် အရည်စိုနေသည့်အတွက်လည်း စားချင်စဖွယ်ကြီး လို ဖြစ်နေ၏။
အောင်မင်း လီးတန်ကြီး ကို – – ဒစ်ကြီးအား ဖြဲလိုက်စုလိုက်နှင့်လေ့လာနေသော အပျိုကြီး မမနွယ်ခမျာ – – သူ့စောက်ပတ်ကြီး ကို အသေအချာဖြဲ ကာ ကြည့်ရင်း ဆင်ကြံကြံနေသော အောင်မင်းကို – သတိမထားလိုက်မိချေ။ ထိုအချိန်ကြားကာလလေး ကို အမိအရ အသုံးပြုကာ နွယ့်စောက်ဖုတ်ကြီး ကိုထမီကြားသို့ခေါင်းကိုထိုးသွင်းပြီး စောက်ဖုတ်ကြီး အလယ်ရှိစုအိနေသော အစိ ရှည်ကြီး ကိုထိထိမိမိကြီး လျှာစောင်းထိုးကာ ဖိစုပ်ပြစ်လိုက်လေ၏။ ‘’ ဟဲ့ – – အို ‘’ အင့်အင့် – – ရှီး – – ကျွှတ်ကျွှတ် ’’ နွယ် – – အလစ်အငိုက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်းကုတင်ပေါ်တင်ထားသောခြေထောက်က ရုတ်တရက် – – ညှပ်လိုက် – – စေ့လိုက်မသည်ိဖြစ်ရာ – အောင်မင်းခေါင်း ကိုထမီနှင့်အုပ်ပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်နှင့်ညှပ်ထားသလို ကြီးဖြစ်သွားလေသည်။
ဗိုက်ကြောမှစိမ့်ဝင်သွားသော ကာမ အရသာထူးကြီး က အပျိုကြီး စစ်စစ်ဖြစ်သော နွယ့်ခမျာ အကြာအချဉ်တွေ တွန့်ကွေး နုံးချိကာ ခွေယိုင်ပျော့နွဲ့သွားမိလေသည်။ ‘’ ပြွှတ် ‘’ ကနဲ ‘’ ပြွှတ် ‘’ ကနဲ နှစ်ချက်ဆင့်စုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကာမ အရသာထူးကြီး မှာ တစ်ကိုယ်လုံး ကိုလွှမ်းမိုးလျက်မေ့မျောသွားမတတ်ခံစားလိုက်ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားသည်နှင့်အောင်မင်း က နွယ့်ကိုယ်လုံး အိအိလေးကိုတွန်းလှဲပြီး နွယ့်ပါးစပ်ဝလေးသို့လီးကြီးကိုတေ့လိုက်သကဲ့သို့သူကလည်း နွယ့်စောက်ပတ်ကြီး ကို မလှုပ်နိုင်မယှက်နိုင်ဖြစ်အောင်ဆက်ခါဆက်ခါ ယက်လိုက်လေ၏။ ‘’ အွန်း – – -အွန်း ‘’ ဆါုသော အသံလေး နှင့်အတူနွယ့် ပါးစပ်လေးထဲသို့အောင်မင်း လီးကြီးကတန်းဝင်သွားလေ၏။ ထိုသို့ – – မမျှော်လင့်ပဲ ဆန်းပြားသော ထူးထွေခန်းနားလှသည့် အတွေ့ ထူးထူးကြီးကြောင့်နှစ်ယောကသာ်းမှာ လောကကြီး ကိုမေ့သွားမိကြသည်။
‘’ မမ – – ‘’ ‘’ မမနွယ် – – ‘’ အိပ်ယာမှနိုးနိုးခြင်း သစ်သစ်နွယ့်ကိုစမ်းကြည့်ရာမတွေ့သဖြင့် – – ခပ်တိုးတိုးခေါ်ကြည့်မိသည်။ မမနွယ်ထူးသံကို ပြန်မကြားရသောအခါ ကြောက်စိတ်နှင့်ငေါက်ကနဲ ထထိုင်လိုက်မိသည်။ ဖေကြီးသော်ကောင်း မကျွတ်သေးဘး ဆိူုသော ဒေါ်ကြီးလှစကား က နားထဲပြန်ဝင်လာပြီး ကြောက်စိတ်က တစ်ကိုယ်လုံး ကိုတောင့်တင်းသွားစေကာ ဆီးသွားချင် သလိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်လာသောကြောင့် ထမီဘိုသီဘတ်သီနှင့်ထွက်လာခဲ့မိသည်။ မမနွယ်သည်လည်း အိမ်သာသို့သွားသည်ပဲ ဖြစ်မည်ဟုထင်ကာ အိမ်သာဘက်သို့ခြေဦးလှည့်လိုက်၏။ သို့သော်နှစ်ခန်းကျော်ရှိ အစ်ကိုအောင်မောင်း အခန်းထဲမှလက်တစ်လုံး ခန့်တံခါးဟနေပြီး လေးပေမီးချောင်းရောင်က အပြင်သို့စူးရှစွာ ထိုးထွက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ကြောက်စိတိအနည်းငယ် ပြေကာ အစ်ကို အောင်မောင်း အခန်းသို့ကပ်လာခဲ့လေသည်။
လောကဍ်ဖြစ်လိမ့်မညဟ်ုထင်မထားသော လူနှစ်ဦးကိုမမျှော်လင့်ပဲ တွေ့လိုက်သူတိုင်းမှာ ရုတ်တရက် ‘’ ရှော့ ‘’ ဟုခေါ်သော သွေးလည်ပတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားတတ်ကြလေသည်။ သစ်သစသ်မှာ ‘’ ရှော့ ‘’ ဖြစ်ခြင်းကို မိမိရရ ခံစားလိုက်ရသည်။ တံခါးကြား မှအထဲသို့ကြည့်လိုက်မိသည်နှင့်နှစ်ယောက်စလုံး အဝတ်အစားမရှိကြတော့ပဲ မမနွယ်စောက်ဖုတ်ကြီး ကိုအစ်ကိုအောင်မောင်း က ယက်ပေးနေသကဲ့သို့ အစ်ကိုအောင်မောင်း လီးကြီး ကိုလည်း မမနွယ်က ခုံမင်နှစ်ခြိုက်စွာ စုပ်နေခြင်း တို့ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့် သစ်သစ်တစ်ကိုယ်လုံး ကျောကရ်ုပ်ကြီးလိုတောင့်တင်းသွားသည်။ အစ်ကိုအောင်မောင်း လမွေးကြီးတွေက မဲနက်မှောင်မဲ နေပြီး အရင်းတွင်ကောက်ရိုးပုံကြီးအလား ဟီးထနေ၏။ မမနွယ်က သူမ၏ ဖြူလွှသော လက်ချောင်းလေးများဖြင့်လမွေးများ ကိုဖိကိုင်ထားပြီး လက်တစ်ဖက်က လီးတန်ကြီး ကို ဖြဲချထား ကာ ရဲရဲကြီး ပြဲနေသော ဒစ်ဖြဲကြီး ကို မမနွယ်၏ နီစွေးပါးလွှာသော နှုတ်ခမ်းလေးဖြင့်စုပ်ယူနေသည်။
တစ်ခါတစ်ရံလီးကြီးကိုရေခဲချောင်း တစ်ချောင်း နှယ်ပါးစပ်ထဲ စုပ်သွင်းပြီး အပြင်သို့ဆွဲထုတ်လိုက်တတ်၏။ ကြောကြီးတွေအြ ဝိုင်းအရိုင်း ထကာ ကြောက်ခမန်းလိလိကြီးထွားလှသော အောင်မင်း လီးကြီး မျိုးကိုသစ်သစ်မမြင်ဖူးချေ။ အဖျားကြီး က မှိုပွင့် ကြီးသဏ္ဍန်စွင့်ကားနေပြီး ကိုယ်ထည်ကြီး က အလုံးထွားထွား နှင့်မို့အလိုးခံရသူမိန်းကလေး အဖို့တော့ – – မသက်သာလှဟု တွေးမိ၏။ သို့သော်ထိုလီးတန်ကြီးကိုမမနွယ်က ပါးစပ်လေးအပြည့်စုပ်ခါစုပ်ခါ ကလိနေပြန်သော အခါ သစ်သစ်မှာ ထိုလီးကြီး အလိုးကို ခံချင်စိတ်တွေတဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာပြီး စောက်ပတ်ထဲမှအရေများ ပင်ယိုစိမ့် ကျဆင်းလာလေတော့သည်။
‘’ နွယ် – – မောလား- – ဟင် ‘’ ‘’ မောတယ် – – မောင်ရယ် – – နားကြဦးစို့ ‘’ နွယ်က ဒယီးဒယိုင်လေးထရင်း မောင့်ခေါင်းကိုခွ ထားသော ပေါင်တန်ကြီးကိုကားပြီးကျော်ကာချ၏။ ထိုသို့ကားလိုက်စဉ် စောက်ပတ်ကြီး ရဲခနဲဖြစ်သွားသည်ကိုသစ်သစ်မြင် လိုက်ပြန်သည်။ မမနွယ် စောက်ပတ်ကြီး ဒီလောက်ကြီးလိမ့်မည်ဟုသစ်သစ်မထင်ခဲ့ချေ။ မမနွယ်စောက်ပတ်ကြီး မှာ အလျား အနံသာမက ဖောက်ပါ နက်ရှိင်းလေမည်ဟု မြင်ရုံနှင့်သိနိုင်သည်။ ဘေးသို့ကားထွက်နေသော စောက်ပတ်ဧရိယာ အသားတစ်ကြီး များ က လက်နှစ်လုံးမက ထူအမ်းနေသည်။ လက်သီးဆုပ်ကြီး တင်ထားသလို မို့မောက်ကာ ခုံးထနေခြင်းကြောင့်လည်း စောက် ပတ်ကြီး မှာ အဟန့်ကောင်းလွန်းသည်ဟုဆိုရမည် ထင်သည်။
မမနွယ်က ထမီကိုလျှောချပြီး ဝတ်သည်။ ပြေကျနေသော ဆံပင်များ ကိုထုံးဖွဲ့သည်။ လက်နှစ်ဖက်မြှောက်ကာ ဆံပင်ထုံးနေစဉ် အောင်မင်း က မမနွယ်နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုတပြွှတ်ပြွှတ်စို့သည်။ ‘’ ဟိတ် – – – နို့မပြတ်သေးတဲ့ကလေးလား – – ခိခိ – – – ခိခိ ‘’ မမနွယ်က အောင်မင်း နဖူးကိုလက်သီးလေးနှင့်ဖွဖွလေးထုရင်း ရယ်သည်။ နို့အုံကြီး ကိုလည်း နို့ညှစ်သလိုအရင်းမှကိုင်ကာ ညှစ် ပေးနေသည်။အောင်မင်း လီးကြီးကမူ – – အောင်မင်းတံတွေးများ နှင့် စိုစွတ်တောက်ပလျက်မီးချောင်းအရာင်အောက်တွင် တဖိတ်ဖိတ်အရာင်များ လက်ထနေသည်ကိုသစ်သစ်တွေ့နေရ၏။ ‘’ တော်တော့မောင်ရယ် – – နို့သီးခေါင်းလေးတွေလဲ ကျိမ်း စပ်နေပြီ – – အလကား – – ဟုတ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး – – တော်တော့ ‘’ နွယ်တ မောင့်ခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညှပ်ယူကာ ဆွဲ မော့ရင်း မျက်နှာချင်းကပ်ခါ တိုးပြောသည်။
‘’ နွယ် – – မောင့်လီးကိုစုပ်တာ ကောင်းလားဟင် ‘’ ‘’ အာ – – – သွား – – မသိဘူး – – သွား – – – မမေးနဲ့ ‘’ မမနွယ်က ခေါင်း လေးငဲ့စောင်းကာ ရှောင်တိမ်းပြီး ရှက်ပြုံးလေး နှင့်မောင့်ကိုတွန်းလွှတ်သည်။ ‘’ မောင်တော့နွယ့်စောက်ပတ်ကြီး ကိုယက်ရတာ အရသာကို ရှိသွားတာပဲ – – သိလား ‘’ ‘’ မောင် – – မရွံ့ဘူးလား – – – ဟင် ‘’ နွယ်က မျက်နှာလေး ရှုံရင်း – – မောင့်ကိုကြည့် ကာမေး၏။ ‘’ ချစ်တာကို – – မရွံပါဘူး ‘’ ‘’ တို့တော့ရွံတယ် – – သူအတင်း ထိုးထည့်လို့စုပ်ရတာ ‘’ နွယ်က ဆင်ဝေ့ရန်ရှောင် လေးပြောရင်း မောင့်ပခုံးကိုထုပြန်၏။။ ‘’ အဲဒီလိုမှုတ်ပြီးရင လိုးလို့အကောင်းဆုံးပဲ နွယ် ‘’ ‘’ ဟေ့အေး – – မလိုးချင်ဘူးကွယ် – – နွယ်ရှက်တယ် – – – ပြီးတော့မောင့်ဟာကြီးက နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး – – နွယ်ကြောက်တယ် ‘’
နွယ်တ မူနွဲ့တဲ့အိုက်တင်လေး နှင့်ပြောပြန်သည်။ သစ်သစ် – – ရင်ထဲ – – တဒိန်းဒိန်း ခုံကာမောနေသည်။ သူတို့လိုးမှ မလိုးရ သေးပဲ ဟုသိလိုက်သဖြင့်လည်း – – စိတ်ထဲကျေနပ်သလိုလိုဘာလိုလို ဖြစ်ရသည်။ ‘’ ဒါဆို – – နွယ့်အဖုတ်ထဲ – – ကိုတေ့ရုံ လေးတေ့မယ်လေ ‘’ ‘’ သွားစမ်းပါ – – ယုံမယ် – – အားကြီးကြီး တေ့ပြီးတစ်ခါထဲဆောင့်သွင်းလိုက်မှာ မလား – – ဟွန့်မသိ တာလိုက်လို့’’ မောင်က ကျေနပ်ကြည်နုးစွာ ရယ်သည်။ ‘’ နွယ့်ကိုမေးမလို့ – – သိလား ‘’ ‘’ ဘာလဲ ပေါက်ကရ တွေမမေးနဲ့ နော် – – – ဟွန့် ‘’ ‘’ အင်းပါ – – နွယ်ရဲ့- – မောင်တကယ်မသိလို့မေးမှာပါ ‘’ ‘’ မေးလေ – – ဘာသိချင်လို့လဲ‘’ ‘’ ဟိုလေ – – အခုန – – နွယ်စောက့်ပတ်ကို ဖြဲကြည့်တော့အစိနှစ်ခုတောင်တွေ့တယ် – – အဲဒါကြီး က မိန်းမတိုင်း အဲလိုပဲ အရှည်ကြီးလား – – – နွယ် – -ဟင် ‘’
‘’ ဟင့်အင်း – – အရပ်ပုတဲ့သူတွေကျတော့တိုတယ်မောင်ရဲ့ – – နွယ်က အရပ်ရှည်တာကိုး – – ပြီးတော့အစိအောက်မှာ အသားပိုလေးလို တွေ့မိလား – – ဟိုဒင်း – – – အင်း – -ခပ်မဲမဲလေး – – လေ ‘’ ‘’ အင်း – – အင်း – – တွေ့တယ် – – – အဲဒါ က ဘာခေါ်လဲ ‘’ ‘’ အစိပဲလေ – – ဒါပေမယ့်သူက အသားပိုပေါ့- – သူ့ရဲ့အောက်ကမှ – – – သေးပေါက်တဲ့အပေါက်လေးရှိ တာ – – မောင်ကလဲ ကြံကြံဖန်ဖန်သိပ်မေးတာပဲ ‘’ ‘’ ဘာဖြစ်လဲ အချင်းချင်း သိထားရတာပေါ့ ‘’ နွယ်က သူမနို့ကြီးနှစ်လုံး တွင် စိုစွတ်နေသော မောင့်တံတွေးများ ကိုအဝတ်စ နှင့်ဖိသုတ်လိုက်ပြီး မှဘရာစီယာလေး ကိုရင်ဘတ်ရှေ့တွင်ကြယ်သီးတပ်ပြီး မှ နောက်သို့ဆွဲလှည့်သည်။တင်းအိနေသော နို့ များကိုဘရာစီယာ ပုံစံခွက်အတွင်းသို့နောက်မှအသားကျအောင်သွင်းပြီး ပခုံးသိုင်းကြိုး လေးကို မ တင်လိုက်သည်။ ‘’ မောင့်ကိုလဲ မေးမယ်နော် ‘’
‘’ မေး – – – ‘’ ‘’ မောငတ်ို့ကိုအခုလိုမှုတ်ပေးတော့ဘယ်လိုနေလဲ – – ပြီးတော့ပါးစပ်ထဲရောက်သွားရင်ကော ဘယ်လိုခံစားရ လဲဟင် ‘’ နွယ်က မောင့်ရင်ဘတ်မွှေးကြီးများကိုဖွကစားရင်း မောင့်မျက်နှာကိုမကြည့်ရဲကြည့်ရဲ လေး နှင့်မေးသည်။ ‘’ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပန်းသေနေရင်တောင်ဒီနည်း နဲ့ကုရင်တစ်ပတ်အတွင်းသက်သာတယ်တဲ့နွယ်ရဲ့- – ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ တော့မောင်မသိဘူးနော်ကြားဖူးတာ – – ပြီးတော့နွယ့်ပါးစပ်ထဲ လီးဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ – – ဟို – – အင်း – – စောက်ပတ်ကိုလိုး ရသလိုပဲနေမှာပေါ့ – – – မသိဘူး – – ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်က နွယ့်ကိုလိုးမှမလိုးရသေးတာ ‘’
‘’ အင်း – – မောင်ကလဲ – – မင်ဂလာဆောင်ပြီးရင်လိုးပေါ့လို့- – အခုဟာက နွယ်ကြောက်လွန်းလို့ပါဆို ‘’ နွယ်က မောင့်နားဝ တွင်ကပ်ပြီး တီတီတာတာလေးချွဲ၏။ မောင်က သက်ပြင်း ကိုတွင်တွင်ချရင်း နွယ့်စောက်ပတ်ကြီးကိုလက်နှင့်ထိုးမွှေနေ ပြန်သည်။ ‘’ တော်တော့ကွယ် – – မောင်ကလဲ – – အရေတွေထပ်ကျလာလို့ – – တစ်ခါထပ်သုတ်နေရအုံးမယ် – – အာ – လတွှ်တော့လို့ဆို ‘’ နွယ့်ထမီအောက်မှလျှိုနှိုက်နေသော မောင့်လက်ကြီးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆွဲဖယ်ပြီး ရပ်လိုက်သည်။ ’ နွယ့် အပေါ် အကျီရော – – အော်ဒီမှာတွေ့ပြီ – – တစ်ခါထဲအဝတ်အစားတွေလဲ – – – ပေပွကုန်တာပဲ – – သွား ‘’
မောင့်မျက်နှာ ကိုတီရှပ်အကျီစလေးဖြင့်ပုတ်ခတ်ဆော့ကစားပြီး မှအကျီကိုဝတ်သည်။အောင်မင်း က ပုဆိုးမဝတ်သေးပဲ – – ငူငူ ကြီးထိုင်ကာ။ ‘’ တောက် – – – စောက်ဖုတ်ကြီး ကိုအသေအချာ မှုတ်ပြီး မှမလိုးရဘူးဆိုတာ တစ်လောကလုံးမှာ ငါ တစ်ယောက် ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ် – – တောက် – – ဟင်းဟင်း လက်သီးတစ်ဖက်လက်ဝါးတစ်ဖက်နှင့်ဖြောင်းကနဲ ထုကာ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရကြီး ပြောချလိုက်လေသည်။ နွယ်က သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြစ်သွားအောင်ပင်တခစ်ခစ်ရယ်သည်။
ပါးစပ်ကလေးကိုလက်ဝါးလေးနှင့်ပိတ်ထားပြီး ရယ်ပြန်သည်။ ‘’ မောင်ပဲ ပတ်တင်း သဘောကျတယ်ဆို ‘’ ‘’ အင်း – – ပတ်တင်း မလုပ်ပဲ– – ဆင်နင်းသွားရင်တောင်ဒီလောက်ခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး သိလား ‘’ မျက်နှာထားတင်းတင်း နှင့်နွယ့်ကိုတစ် ချက်မော့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ရာ – – နွယ်က မောင့်ပခုံးကိုကိုင်လှုပ်ရင်း ‘’ လုပ်ပြီ – – ခုနက တစ်မျိုး – – အခုတစ်မျိုး ‘’ ‘’ ဘာ – – – ခုနက တစ်မျိုးလဲ ‘’ မောင်က ကလေးဆိုးကြီးလို ပါးကြီးဖောင်းကာ မျက်နှာညိုညို နှင့်စိတ်ကောက်ပြပြန်လေသည်။
‘’ မောင်ပဲ – – -ခုနက မမအဖုတ်ကြီးကို ကြည့်ပြီးဂွင်းတိုက်ရရင်ကျေနပ်ပါပြီဆို – – – အခုကိစ ပြီးပြန်တော့တစ်မျိုး – – တစ်ခါ ထဲ သူ့အလိုကြီး လိုက်နေရတာပဲ– – တကယ် ‘’ ‘’ ဒီမှာ – – မမ – – ဟိုလေ – – ဒီလိုဗျာ – – မမ စောက်ပတ်ထဲတိုမောင့် လီးကြီး နဲ့စွတ်ကနဲ– – တစ်ချက်ပဲ လိုးမယ်မမရယ် – – အရေမထွက်စေရပါဘူးနော်မမ ‘’ ‘’ အလယ်လယ် – – လူလည် လေး – – ဝါးနုက ဝါးရင့်ကိုပတ်ချင်နေပြန်ပြီ – – တော်စမ်းပါကွယ် – ဟင်း-ဟင်း ‘’ တေ့ရုံလေးဆိုတစ်မျိုး – – သွင်းရုံလေးဆို တာတစ်မျိုး နွယ်က မောင့်ပါးကိုလိမ်ဆွဲရင်းရယ်သည်။ အောင်မောင်း နဲ့တွေ့မှနွယ့်အရှက် – – နွယ့်ဂုဏ်သိကာ တွေ တစ်ပြား သား မှမရှိတော့အောင်ခဝါကျခဲ့ ရတာပါလား မောင်ရယ်။
‘’ တကယ်ပါ – – မရယ် – – တစ်ချက်ပဲလိုးမှာ – – တစ်ချက်ထက်ပိုသွားရင် – – မမမောင့်ကိုပါးရိုက် ‘’ တဲ့ မောင်က ပြော ပြောဆိုဆိုနွယ့်ထမီကိုဆွဲလှန်သည်။ မောင်သည်တကယ့်ကလေးဆိုးဖြစ်သည်။ မောင်ကပုဆိုးမဝတ်သေးသဖြင့်မောင့်လီးကြီးက ဆင်နှာမောင်းကြီး လိုယမ်းခါနေသည်။ ‘’ ကွယ် – – လုပ်ပြီ – – – မဟုတ်တာ – – ဟိတ် – – – မောင်နော် ‘’ တကယ်တော့ လဲ နွယ်လဲအသွေးအသား နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သာမန် – – မနုသ – -လူတစ်ဦးပါ ‘’ မောင် – – – ဟေ့အေးကွယ် – – ဟင့်အင်း ‘’ နဲ့ပဲမောင်က ရင်ချင်းဆွဲအပ်ပြီး – – နွယ့်စောက်ပတ်ကိုလီးကြီးဆွဲသွင်းပြီး လိုးခဲ့တာပဲမလား မောင့်လီးတန် ကြီး နင့်နင့်နဲနဲစောက်ခေါင်းထဲကိုဝင်သွားကတည်းက မောင်ကတိမတည်ဘူးဆိုတာ သိပြီးသားပါမောင်။
ဗြစ်ကနဲ– – ထိုးခွဲဝင်သွားတဲ့မောင့်လီးရဲ့ဒဏ်ဟာ နွယ့်မေ့ကြောတွေကိုအကုန်ပိတ်ပစ်လိုက်သလိုပဲလေ။ နွယ်မျက်တောင်လေး များမှေးစင်းကာ မောင့်ကြောပြင်ကြီးကိုတစ်ဖက်ကျစ်နေအောင် ဖက်ထားမိလိုက်သည်။ ‘’ တစ်ချက်ထဲလိုးမှာ ‘’ ဆိုတဲ့မောင်ဟာ ဖင်ကြီးကိုခွာခွာပြီး ဆောင့်လိုးနေတော့တယ်လေ။ နွယ့်ဖင်တွေဆုပ်ဆွဲထားသလိုပါ ပဲကွယ်။ လီးကြီး က အလုံးအထည်ထွား အလျားကလဲရှည်ဆိုတော့လေ နွယ့်မှာရုန်းနိုင်တဲ့ ခွန်အားတွေမရှိပါဘူး – – မောင်က နွယ့်ကိုတွန်းလျက် – – စားပွဲစောင်းတွင်တင်ပြီး ခြေနှစ်ဖက်ကိုသူ့ခါးတွင်ညှပ်ထားစေကာ – – ဆောင့်၏။ စားပွဲက စာရေးစားပွဲ။ စားပွဲပေါ် ရှိအထပ်လိုက်အစီအရီတ ငထားတဲ့်စာအုပ်များ ပြိုကြသည်။ စားပွဲထောင့်စွန်းတွင် တင်ထားသောဂက် (စ်) မီးခြစ်ကလေး ဒေါက်ကနဲကြမ်းပြင်သို့ ကျသည်။
မောင်က ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံသော ယောကျာ်းကြီးဖြစ်၏။ နွယ့်မှာသာ ကြီးမားအိစက်သော တင်ပါးသားကြီးတွေ မရှိခဲ့ပါလျင် – – နွယ့်ဖင်အရိုးတွေကြေမွကျိုးအက်ကုန်ပေလိမ့်မည်။ ‘’ ပြွတ် – – ဖွပ် – – ပြွတ်ဖပ် – – ‘’ ဆါုတဲ့အသံတွေကလဲ တိုးတိတ်နေတဲ့ ညဥ့်ဦးယံမှာ – – ပီပီသသကြီး။ ‘’ အား – – မောင် – – ဖြည်းဖြည်း – – – နာတယ် – – – အ – – ‘’ ‘’ ခဏလေး – – အောင့်ခံပါ မမရယ် – – မစောက်ပတ်ကကျဉ်းနေသေးတော့နယတာပါ – – အင် – -အင့် – အား ‘’ မောင်က ဒရောသောပါကြီး အလုအယ က်လိုး၏။ နွယ်ကလဲလေ အဲဒီ့လိုအကြမ်းပတမ်းလေးလုပ်တာကိုပဲ သာယာတတ်တဲ့မနိ်းမမျိုးပဲလား မပြာတတ်တော့ပါဘူး မောင် – – ပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကို ခြေနှစ်ချောင်းစလုံး တင်လိုက်ပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခနာ ကိုယ်ကို စားပွဲပေါ် လှန်ချ လိုက်မိသည်။
ခေါင်းကအနေတော်ပြိုကျနေသော စာအုပ်ပုံပေါ်ရောက်သွားသည်။ဖင်နှစ်ခြမ်း က လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ဖြဲပေးထား သည့်အတွက် စောက်ပတ်ကြီး က ပြူးထွက်နေ၏။ တံခါးဘက်သို့ခပ်စောင်းစောင်း အနေအထားမျိုး လေးလှန်ပေးထား သည့်အတွက် – – သစ်သစ်ရင်သပ်ရှုမောရပြီ။ အစ်ကိုအောင်မောင်းလီးကြီး က ရှည်လျားကြီးထွားလှသည်မို့စောက်ပတ်ကြီး ထဲထိုးစိုက်ချလိုက်တိုင်း မမနွယ်ခမျာ ခါးလေးကော့ကော့သွားသည်မှာ စားပွဲနှင့်ခါးလေးကြားတွင – –်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးစာ လောက်ကိုလွတ်လွတ်သွား၏။ ယောကျာ်းတွေ ဒါကြောင့်မို့လို့လဲ ဖင်ကြီးတာ ကို နှစ်သက်ကြတာပါလားဟု – – သစ်သစ် – – မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့သင်ခန်းစာရမိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစ်ကိုအောင်မောင်း လီးတန်ကြီး ကမမနွယ် စောက်ခေါင်း ထဲ ‘’ဇွတ် ‘’ ကနဲတိုးဝင်သွားတိုင်း မမနွယ်ဖင်ကြီးက စားပွဲပေါ်တွင်ပြားကျသွားပြီး ဘေးသို့ကားကားသွားသော်လည်း – – အိကနဲ – – နိမ့်ဆင်းပြီး တင်းကနဲ – – တင်းကနဲကန်တတ်လာကာ အရှိန်နှင့်လွှဲရိုက်လိုက်သောဂွေးစိကြီး နှင့်ဖောက်ကနဲ ရင်ဆိုင်မိ ကြ၏။
ထိုနည်းအတိုင်း အိကနဲ ဖောက်ကနဲ ရင်ဆိုင်လှုပ်ရှားနေကြလေရာ အောင်မောင်းဆီးခုံမဲမဲကြီးက မမနွယ်ဖင်ကြီးနှင့်ဗြဲကနဲဗြိကနဲ ပွတ်ကြိတ်သံကြီးမှာ မြင်တွေ့ကြားသိနေရသော သစ်သစ်၏ အသည်းဆိုင်ကို အညှာမှကိုင်လှုပ်နေသလိုတလှပ်လှပ်တသိမ့် သိမ့်ဆတ်ဆတ်တုန်နေမိပေရာ – – ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်၏ ခံစားမှုမှာ ဆိုဖွယ်ရာမရှိအောင်အရသာအထူးကြီး ထူးနေကြပေ တော့သည်။ ‘’ မ – – ပေါင်တစ်ချောင်းကို – – ဒီဘက်ပြောင်း – အင်း ‘’ မမနွယ်က ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအစ်ကိုအောင်မောင်း ခေါင်းပေါ်မှကျွမ်းဘားမယ်များပမာ ဖြောင့်တန်းစွာကော်ယူလိုက်၏။ အစ်ကိူအောင်မောင်း က ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဂျိုင်း အောက်ထား တစ်ဖက်ကို ပခုံးပေါ်မှေးထားပြီး စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ဒေါင်လိုက်လိုးပြန်လေသည်။ သစ်သစ်မှာ လီးတန်ကြီး အဝင်အထွက်ကိုမမှိတ်မသုန်လေး ကြည့်နေမိရာ ဇောချွေးများပင်ပြန်နေသည်ကိုသတိမမူမိနိုင်အောင် ခံစားနေမိသည်မို့သရဲကို လဲ မေ့နေမိသည်။
တစ်စောင်းကြီး လိုးနေသောအခါ – – အခုလောက်ထိမိပုံမပေါ်ပဲမမနွယ်က ငုံ့ကြည့်ရုံလေးကြည့်ကာ သိပ်နာကျင်ဟန်မပေါ်ပေ။ ’ ညောင်းတယ် – – ခြေထောက်မြှောက်ထား ရတာ ‘’ ‘’ ဒါဆို – – ချလိုက်လေ – – မမ – – ကုန်းပြီးလိုးမယ် ‘’ အံ့သြစရာပင် – – မမနွယ်က – – အစ်ကိုအောင်မောင်းစကား ကိုကလေးငယ်တစ်ယောက်နှယ်တသွေမသမိ်း လိုက်နာရင်းစားပွဲကို လက်နှစ် ဖက်ဖြင့်ထောက်ပြီး ဖင်ကြီးကိုအနောက်သို့ခပ်ကော့ကော့ လေးကုန်းပေးလိုက်သည်။ သည်ပုံစံသည်လည်း သစ်သစ်ဖက်မှ မြင်ကွင်းကောင်းသော ပုံစံဖြစ်နေကာ ဘေးတိုက်အနေအထားမြင်ရ၏။ အစ်ကိုအောင်မောင်း က လီးကြီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး စောက် ပတ်အဝကိုတေ့လျက်မမနွယ်ပခုံးကို ကျောမှလှမ်းဆွဲပြီး ထိုးသွင်းလိုက်စဉ်လီးကြီးက ဝါးရင်းတုတ်ကြီးတစ်ချောင်းလိုပင် ကွေးကနဲ ဖြစ်ပြီးမှတန်းဝင်သွား၏။
‘’ ဗြွှတ် ‘’ ကနဲ အသံကိသစ်သစ်နား နဲ့ဆတ်ဆတ်ကြားလိုက်သည်။ မမနွယ်တော့ဘယ်လိုခံရမယ်မသိ၊ သစ်သစ်ရင်ထဲမှာမူအောင့် သက်သက်ဖြစ်သွား၏။ ‘’ အိုး – – အိုး – – အိုး – – – မောင်ရယ် – – ရှီး – – အား – – – ကျွတ်ကျွတ် ‘’ စားပွဲစောင်းလေး ကိုကိုင်ထားသော မမနွယ်လက်ကလေးများ ကျစ်လျစ်မြဲမြံစွာ ကိုင်ထားရင်း ညီး ရှာသည်။ ဗိုက်သားအောက်မှ ပွယောင်းယောင်း လေး အဖုတ်လိုက်ချွန်နေကြသော အမွှေးစုလေးမှာ ဇောငးသွားသည်။ ဖင်ကုန်းပြီး အလိုးခံရသော အလုပ်သည်အတော် ထိသည်ထသ်သည်။ မမနွယ်နှာသီးဖျားလေးတွင် ချွေးလေးတွေပင်သီးလာကြ၏။
အစ်ကိုအောင်မင်းကလည်း ပခုံးကိုမဆွဲတော့ပဲ ခါးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်ကာ တပြွတ်ပြွှတ်ဆောင့်တော့၏။ ‘’ ပြွှတ် – ပြွှတ် – ¬ ပြွှတ် – ဖတ် – – ဖတ် – ပြွှတ် – – – စွိ ‘’ ‘’ အင့် – အင့်- အ – အ – အ – အင့် – – အားလားလားလား ‘’ အခန်းတစ် ခုလုံး လိုးသံညီးသံသက်ပြင်းချသံ – – တအင့်အင့်လည်ချောင်းထဲမှညီးတွားသံတို့နှင့်သာစိုးမိုးနေရာ ချောင်းကြည့်နေသော သစ်သစ်ခမျာ သူမ စောက်ဖုတ်လေး ကိုလက်ဖြင့် အုပ်ပွတ်နေမိရာမှအားမရတော့ပဲ ထမီလေးကိုလှန်ကာ စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်ခလယ်လေးဖြင့်ထိုးမွှေကလိနေမိလေတော့သည်။
အိစိုသော စောက်ခေါင်းအတွင်းမှစောက်ရည်ကြည်များ စိမ့်ထလာကြသည်။ စောက်ပတ်အောက်ဖက်ထောင့်ချွန်းလေးမှနေကာ စောက်ရည်များက ဖင်ကြားမှတဆင့်ပေါင်သို့စေးကပ်စေးကပ်နှင့် လျောတိုက်ဆင်းသည်။ တံတွေးကို မကြာခဏ မျိုချနေရ သော လည်ချောင်းအတွင်းမှအစ်တစ်တစ်ကြီး ခံစားလိုက်ရသလိုစောက်မွေး ပါးပါးနုနုလေးများ ပေါက်ရောက်ရာ စိမ်းစိုစ ဆီးခုံမို့မို့ လေးမှာလည်း အောင့်သက်နာကျင်စွာ ဆီးကျင်သော ဝေဒနာကိုခံစားလာမိရသည်။စက်သေနတ်ပစ်သလို ဒလစပ်ဆောင့်လိုးလိုက် ပြီးမှအစ်ကိုအောင်မောင်း က မမနွယ် ကျောပြင်လေးပေါ်ဝမ်းလျားမှောက်ဖိကပ်ကာ ရင်ဘတ်မွှေးကြီးများနှင့် ပွတ်နေပြီး ‘’ ချစ် လိုက်တာ မမ ရာ ‘’ ဟုမောသံကြီး နှင့်ပြောကာ မမ ဂုတ်သား နုနုလေးကိုသွားဖြင့်မနာ့တနာလေးကိုက်ရင်း – – သုက်ရည်ပူပူနွေးနွေး ချွဲချွဲပစ်ပစ်များကို မမနွယ်စောက်ပတ်ထဲရှိသားအိမ်၏ အနက်ရှိုင်းဆုံး အတွင်းကျဆုံး နေရာလေးထဲသို့ဒလဟော ဗျစ်ကနဲ ဗျစ်ကနဲနေအောင်ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။
ဖင်ကြီးမှာလည်း ငလျင်ပြင်းထန်စွာ လှုပ်သလိုဘယ်ညာခါရမ်းသွားပြီး ကော့ကော့ဆောင့်လျက်စောက်ပတ်အတွင်း မှ စောက်ရေ များ ကိုညှစ်ထုတ်ပေးနေမိ၏။ ‘’ မောတယ် – – ‘’ မမက လီးကြီးကိုဖြုတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်နှင့်မောတယ်ဟုဆိုကာ ကု တင်ပေါ်ခြေပစ်လက်ပစ် လေးလှဲချလိုက်လေသည်။အစ်ကိုအောင်မောင်း က မမနွယ်ဘေး တွင်ယှဉ်အိပ်လိုက်ပြီး မမနွယ်ကို မြတ် မြတ်နိုးနိုးလေး ဖက်ထားရင်း။ ‘’ အား – – – ကောင်းလိုက်တာ မမနွယ်ရယ် ‘’ ဟုဆိုတာ့မမနွယ်က အစ်ကိုအောင်မောင်း နဖူးကို လက်ညိုးလေး အသာထောက်ကာ – – – ‘’ သွား – – – သေနာလေး – – လူငယ်သလောက်လီးကြီးတဲ့အကောင် – ဟွန်း – – ပြောတော့သွင်းရုံလေးဆို – – တစ်ချက်တည်း ဆို – – – တစ်ချက်ထက်ပိုရင်ပါးရိုက်ဆို – လူပါးလေး – – ဟင်းဟင်း ‘’ အောင် မင်း တသိမ့်သိမ့်ရယ်သည်။
‘’ မမ – က မောင့်ကိုသိပ်အလိုလိုက်တာပါနော် ‘’ ခံချင်မိတော့လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်၊ ‘’ အဟင်း မ- က မောင့်ကိုတကယ်ချစ်တာပဲ‘’ ‘’ အလိုတော် – – မင်းကိုအပျော်တမ်းချစ်တယ်လို့များ မင်းထင်ခဲ့လို့လားဟင် ‘’ ‘’ မဟုတ်ပါဘူး မ အခုလို – -အင်း – – လိုးလိုက်ရတော့- မောင့်ဘက်ကပိုချစ်သွားတာပေါ့ ‘’ အစ်ကိုအောင်မောင်း မျက်နှာ သည်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးလောက်အောင်ပင် – ကလေးဆန်စွာ ပြောနေခြင်းကြောင့်မမနွယ်မျက်နှာလေး မှာ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ မနူးမနပ် မျက်နှာပေး လေးဖြစ်နေရသည်။ မမနွယ်က အစ်ကိုအောင်မောင်းလည်ပင်းကြီး ကိုဟီးလေးခိုပြီး တခစ်ခစ်ရယ်ပြီး မှတီးတိုးလေးပြော လိုက်၏။ ‘’ မောင် မောပြီလားဟင် ‘’ ‘’ ဟင့်အင်း – – – ဘာလဲ မကထပ်ပေးမလို့လား ‘’
‘’ မောင့်သဘောလေ – – ဟုတ်ပြီလား ‘’ သစ်သစ်မမနွယ်အစားရှက်လိုက်တာ တော်ပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးလား ကိုယ်က မိန်းကလေး ပဲ ဟာ. အို – – အခုတော့မမနွယ်ကို ကြည့်ရတာ ဆပ်ဆလူးကိုခါနေတော့တာပဲ၊ လက်ကလဲအစ်ကိုအောင်မောင်း လီးကြီးကိုကောက်ညှင်းပေါင်းဆုပ်သလိုတင်းကနဲ တင်းကနဲ ဆုပ်နေလေရဲ့။ အောင်မောင်း ဆိုသော သူကလည်း အစကတည်းက မောင်းတင်ထားတာ – – သိတယ်မို့လား။ စိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်အထိလိုက်မဲ့ လူစား – – – ဗလကလည်း တော်ရုံမိန်းမဆိုဆွဲညှစ်လိုက်တာ နဲ့အရိုးအက်သွားလောက်တဲ့ သူ – -ဒီလိုလူစားကိုမမနွယ်မဖြုံဘူး ထပ်ပြီးတော့တောင်စိန်ခေါ်နေသေး ၊ အံ့လည်းအံ့ပါရဲ့အရှက်တွေလဲ မရှိကြတော့ဘူး၊ အို – – – သစ်သစ်သူတို့ကိုကြည့်ရင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေကိုမနိုင်မနင်း စုစည်းသိမ်းဆည်းနေရင်းက – – မမနွယ် က ပက်လက် လှန်ပြီး ကုတင်ပေါ်အိပ်ချလိုက်တဲ့ အောင်မင်းလီးတန်ကြီးပေါ်ကိုကားယားခွပြီး လီးတန်ကြီးကိုကိုင်ပြီး စောက်ပတ်ထဲထည့် နေတဲ့အချိန်။ သူတို့ကိုကျောခိုင်းလိုက်မိသည်။
မောင်နှမ – – မောင်နှမ – – နဲ့ဘာ မောင်နှမတွေလည်း – – ဘယ်မလဲ သိကာ – – အရှက် – -စည်းကမ်း – – – ဟင်းဟင်းဟင်း။ ဖြစ်ပါတယ် – – မိသစ်ဆိုတာကလည်း မွေးကတည်းက တစ်ကောင်ကြွက် တစ်မျက်နှာ တစ်ကိုယ်တည်း ။ ကိုယ်ထင်ရာလုပ် ကြစတမ်း ဟေ့ဆိုရင်အစ်ကိုအောင်မောင်းလိုပဲ မိသစ်မိုက်ရဲတာပေါ့။ စဉ်းစားကြည့်လေ အစ်ကိုအောင်မောင်းပေါ် ရင်ခုံ စိတ်ဝင်စားခဲ့မိတာက မိသစ်ပါ – – အခုတော့ဘယ်အချိန်က – – ခြေပုန်းခုတ်နေကြမှန်းမသိတဲ သူ့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရှုပ် ထုပ်ကို မိသစ်အသိနောက်ကျခဲ့ပြီး ကိုယ့်ဖာသာပဲတစ်ယောက်ထဲရှက်ရတယ်။ လူတကာသာ ဒီအကြောင်း သိကုန်ရင် – – မိ သစ်တို့တစ်အိမ်သားလုံး အိမ်အပြင်တောင်ထွက်ရဲမှာ မဟုတ်တော့ဘူး မဟုတ်လား။ အခှတော့အထီးကျန်ဘဝလမ်းမှာ မိသစ် တစ်ကောင်ကြွက်မ – – အဖော်မဲ့စွာ – – လျှောက်ရပြီပေါ့ ——။ ကျန်နေသေးသော အပိုင်းများမှာ မိသစ်၏ဇာတ်လမ်းများဖြစ်နေသော ကြောင့်ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါသည်။ – – – – – – ပြီးပါပြီ – – – – –
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မမကိုခဈြလို့